ဒုတိယအရှယျ၏ ပထမဝဒေနာ – My Blog
ဒုတိယအရှယျ၏ ပထမဝဒေနာ ( စ / ဆုံး )
ကနြျောနာမညျက ကိုကိုကွီး…..အသကျ ၄၀ အိမျထောငျကဘြူးတယျ…..အိမျထောငျကှဲသှားတာ….သားသမီး ၃ ယောကျရှိတယျ….. လကျရှိလုံခွုံရေးကငျးတဈခုရဲ ခေါငျးဆောငျပေါ့ကနြျောနတေဲ့မွို့လေးကသိပျမကွီးတော့….ကငျးစခနျးတခုလုံးမှာလူ ၂၀ လောကျဘဲရှိတယျလေ……..တဈနတေ့ော့ ကနြျောတို့ကငျးစခနျးကို နောကျထပျတပျဖှဲ့ဝငျအိမျထောငျသညျမိသားစု တဈခုပွောငျး လာတယျ………..အဲမှာကနြျောဘဝရဲ့ပထမဝဒေနာစတော့တာပေါ့…… ပွောငျးလာတဲ့မိသားစုကိုနအေိမျလိုငျးခနျးခပြေးဖို့ အခကျအခဲဖွဈတာနဲ့…ကနြျောယူထားတဲ့ ၂ ခနျးတှဲကို တဈခနျးခှဲပေးလိုကျတယျ…….နယျကငျးစခနျးဆိုတော့လိုငျးခနျးလဲပေါ ပေါမြားမြားမရှိဘူးလေ…………. ကနြျောယူထားတဲ့ ၂ ခနျးတှဲကလဲ…ကငျးစခနျးဘေးကပျလြှကျ….ကနြျောရုံးကိစ်စလုပျဖို့နဲ့အနားယူဖို ယူထားတာပါ.. ကနြျောက မွို့ထဲမှာအိမျရှိတယျ……ကငျးစခနျးထဲမှာက နဘေ့ကျလောကျပဲနတောမြားတယျလေ……………. အသဈပွောငျးလာတဲ့မိသားစုကိုတဈခွမျးခှဲပေးပွီး…ကနြျောကတဈခွမျးနလေိုကျတယျ………………………..။
ကမြနာမညျကဖွူစငျပါ…..အားလုံးကမဖွူလို့ဘဲချေါကွတယျလေ……….ကမြအမြိုးသားက လုံခွုံရေးဝနျထမျး မွနျမာပွညျအနံ့ ပွောငျးရှတေ့ာဝနျထမျးဆောငျနရေတဲ့သူပေါ့….ကမြတို့မှာသားသမီး ၂ ယောကျရှိပီး…သမီးအကွီးက သူအဖိုးအဖှားတှနေဲ့ရနျကုနျ မှာနတေယျ….သားအငယျ ကတော့ကမြတို့နဲ့အမွဲလိုကျနတေယျလေ….သူကအခုမ (၅)တနျး ကမြတို့ဒီမွို့လေးကိုပွောငျးလာ တော့….ကိုကွီး(ဦးကိုကိုကွီး)က လိုငျးခနျးမရှိလို့သူယူထားတဲ့အခနျးကိုတဈခနျးခှဲပေးတယျ ကမြတိုကမိသားစု ၃ ယောကျထဲဆို တော့…အဆငျပွတေယျလေ…သူကလဲအိမျထောငျမရှိတဲ့သူ….ညဘကျမွို့ထဲကအိမျမှာ အိပျတာဆိုတော့အဆငျပွတေယျလေ….. ကမြအကွောငျးပွောရရငျ…ကမြတို့လငျမယားက…သားလေးမှေးပီးကတညျးက နောကျသားသမီးမရအောငျ…..လိငျဆကျဆံ တိုငျး ကှနျဒုံးသုံးရငျသုံး….မဟုတျရငျအပွငျကိုထုတျပဈတဲ့အကငျြ့လေးလုပျထားတယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကမြက..တားဆေးတှေ နဲ့မတညျလို့….နောကျပီး ပစ်စညျးထညျ့ရမှာလဲကွောကျလို့….အဲလိုနလောတာ…. သားလေးတဈသကျလို့ပွောလို့ရတယျ……….
ကမြတို့ဒီကိုပွောငျးလာပီး…ကိုကွီး(ဦးကိုကိုကွီး)ကအစစအရာရာ ကူညီတယျ…ကမြအမြိုးသားကိုလဲနရောပေးတယျ…… ပွော ရရငျတော့…သူကကိုယျ့ကြေးဇူးရှငျလို့ပွောရမလိုပေါ့နျော…..လိုငျးခနျးတဈခုထဲမှာအတူနတောဆိုတော့ကနျြတဲ့သူတှထေကျ ကမြ တို့ကပိုရငျးနှီးတယျပွောရမှာပေါ့…….. ဖွူလေးတို့မိသားစုရောကျလာပီး…..ကနြျောအရငျလိုမပငျြးတော့ဘူးပွောရမှာ ဘဲ….ဖွူ လေးနဲ့နဘေ့ကျတှမှောအတူနရေတာ သူလုပျပေးတဲ့ လဘကျရညျသောကျလိုကျ….အသုပျလေးတှစေားလိုကျနဲ့…တျောတျော ရငျးနှီးလာတယျ…သူကလဲကိုကွီး…ကိုကွီးနဲ့ သူယောကြာင်္းကလဲကနြျောနရောပေးထားတော့…ပိုဂရုစိုကျတာလဲပါမှာပေါ့…….ဖွူ လေးက သာမာနျပါဘဲ…မကျြနှာလေးကခြောခြော ရငျသားကွီးကွီးနဲ့….တငျတော့ပွားတယျ…..ကလေး ၂ ယောကျအမဆေိုပေ မယျ့….ပွုပွုပွငျပွငျနတေော့….ကွညျ့လိုကောငျးတယျ..ဝတျတာစားတာကလဲ ဆကျဆီ ကတြယျ….ဘောငျးဘီအပြော့တှေ….ဂါဝနျ တှအေမွဲဝတျတတျတယျ…သူမြားတှလေို ထမီတှဘောတှေ မဝတျတော့….အမွငျပိုဆနျးတယျပွောရမှာဘဲ….ရငျးနှီးရာက နေ….စိတျတှဖေောကျပွနျလာတာကိုယျ့ကိုယျကိုသိတယျ………….. ဘာလိုလဲဆိုတော့….ဖွူလေးဘောငျးဘီနဲ့ထိုငျနရေငျ……..သူ့ဂှ ဆုံကိုကနြျောကွညျ့မိသလို…..ရငျသားကွီးတော့….အဈထှကျနတေဲ့ ဖွူလေးရဲရငျသားတှကေိုလဲ အမွဲကွညျ့ကွညျ့ပီးဖီးတကျလာ တယျ…….ကနြျောကပွညျနယျရုံးကိုခဏခဏသှားရတော့…ပွညျနယျက ပွနျလာတိုငျးဖွူလေးတို့သားအမိအတှကျ…အဝတျအစား တှဝေယျဝယျလာတတျတော့…ကနြျောသှားတိုငျးဖွူလေးက……တခုခုမှာ တတျတာအကငျြ့လို့ဖွဈနတေယျလေ……..ကနြျောဝယျ လာတိုငျးသူနဲ့မတျောတာ…မကိုကျတာကခပျမြားမြား…..ဆိုတော့သူအတိုငျး အထှာတှကေို ကနြျောကိုပွောပွောမှာတတျ တယျ……..ကနြျောဖောကျပွနျနတောဖွူလေးကမသိပမေယျ……ကနြျောစိတျကတော့ တနထေ့ကျတနဖွေူ့လေးကိုသိမျးပိုကျခငျြ စိတျပိုလာတာကနြျောသိတယျ….
အပိုငျး(၂)ကနြျော…ကိုကိုကွီး.. ကနြျောဖွူလေးကိုဘယျလိုကွံရမလဲဆိုတာစဉျးစားရငျးက…တဈနကေ့နြျောပွညျနယျကိုမနကျဖွနျ သှားရမယျဆိုတာသိတာနဲ့ ဖွူလေးအမြိုးသားကို…တောဘကျအလုပျကိစ်စတဈခုနဲ့ကနြျောခိုငျးလိုကျတယျ……….အိမျမှာဖွူလေးနဲ့ ကနြျောဘဲကနျြခဲ့တယျ……….. နဘေ့ကျကနြျောက ဖွူလေးတို့နဲ့လိုငျးခနျးတခုထဲအတူနတောဆိုတော့….သူယောကြာင်္းမရှိလဲသိပျ တော့မထူးဘူးပေါ့…………………. ခဏနတေော့ကနြျောလဲ……..အပွငျထှကျပွီးမွို့ထဲကကနြျောအိမျကိုပွနျ….ကိုကာကိုလာတဈ ဘူးယူပွီး….ဆေးထိုးအပျနဲ့အထဲကို….. လိငျစိတျကွှဆေးထညျ့လိုကျတယျ….ပီးတော့ပေါကျကိုဖယောငျးနဲ့ပိတျပွီး….လိုငျးခနျးကို ပွနျလာခဲ့တယျ……………………………… ကနြျောလိုငျးခနျးရောကျတော့ဖွူလေးကရမေိုးခွိုးပီးအလှတှပွေငျလို့…..သူ့ထုံးစံ အတိုငျး…အောကျကစပနျ့ဘောငျးဘီရှညျပြော့လေးနဲ့ လှနတေယျ…ကနြျောလဲယူလာတဲ့အအေးဘူးကိုလှမျးပေးပီး….. “ဖွူလေး ရေ…..ဒီမှာအအေးဖွူဖို့ယူလာတာသောကျလိုကျအုနျး” “အျောကိုကွီးကလဲ…..ဟုတျဟုတျ” ဖွူလေးအအေးဘူးကို…သောကျ ရငျး….TV ထိုငျကွညျ့နတေယျ…ကနြျောလဲဆေးတနျခိုးပွမဲ့အခြိနျကိုစောငျ့ရငျး…..ရုံးကိစ်စတှလေုပျ နတောပေါ့…… ခဏနတေော့ ဖွူလေးခြှေးဆေးလေးတှထှေကျပွီး…..ပေါငျတှလေိမျလိုကျကားလိုကျလုပျနတောမွငျရတော့…ကနြျောစဖိုအခြိနျဆိုတာ သိလိုကျ တယျ………
“ဖွူလေး….ကိုကွီးမနကျဖွနျပွညျနယျရုံးသှားမှာ…ဖွူလေးဖို့ဘောငျးဘီဝယျခဲ့မယျဟုတျပလား” “နပေါစကေိုကွီး…အားနာစရာ” “ဘာအားနာရမှာလဲဖွူလေးကလဲ…..ဖွူလေးအရှညျဘယျလောကျဆိုတာပွောလိုကျအုနျး” “ဟိုတခါလိုမကိုကျဘဲနအေုနျးမယျ” “ကိုကွီးဘာသာတိုငျးသှားတော့……”လို့ပွောတာနဲ့ကနြျောလဲ…အလုပျလုပျနရောကနထေပွီး…..ဖွူလေးထိုငျနတေဲ့နရောကို သှားလိုကျတယျ… “ထဖွူလေးဟုတျတယျတိုငျးသှားမဖွဈမှာ….တျောကွာဟိုတခါလို…မကိုကျဘဲနလေိမျ့မယျ”လိုပွောပီး….ဖွူ လေးကိုပခုနျးလေးနှဈဖကျကိုငျပွီး ထူလိုကျတယျ….ဖွူလေးအလိုကျသငျ့မတျတပျရပျလိုကျတော့မှ…ကနြျောလဲမကျြနှာခငျြးဆိုငျရပျ ပီး…… “မှနျးဘယျလိုတိုငျးသှားရမလဲ….နအေုနျးအောကျကနကေိုကွီးတောငျကွညျ့မယျနျောဖွူလေး” “ရှငျ….” “အျော တဈ ထောငျနဲ့ဘယျနှဈတောငျဆိုတာကိုပွောတာ” “အျောဟုတျကိုကွီး”ဆိုပွီး ဖွူလေးက မကျြလုံးလေးကလယျကလယျနဲ့ကွညျ့နေ တုနျး…..ကနြျောလဲထိုငျလိုကျပွီး ဖွူလေးခွတေောကျကနေ အထကျကို တဈတောငျ၊ နှဈတောငျဆိုပွီးတိုငျးရငျးသူပေါငျလေးတှေ ကို..ကိုငျရငျးလုပျနတေော့….ဖွူလေးတုနျကနဲဖွဈပီး….ညိမျနတောနဲ့ “ဖွူလေးဟိုဖကျလှညျ့လိုကျ…”လို့ပွောလိုကျတော့….သူလဲ ဆေးအရှိနျနဲ့ပေါငျးနတေော့…..ဘာမပွောဘဲလှညျ့ပေးတယျ….ကနြျောလဲအစ ကနပွေနျပွီး….တဈတောငျ၊နှဈတောငျဆိုပွီးတိုငျး ရငျး…ဖွူလေးဖငျသားလေးတှကေို…ရဲရဲတငျးတငျးကိုငျလိုကျတယျ…………………….
“အ…ကိုကွီး….ဟို”…..ဖွူလေးတဈခုခုပွောဖိုလှညျ့အလာ…ကနြျောလဲမတျတပျရပျပီး….လှညျ့လာတဲ့သူ့မကျြနှာလေးကိုမေးကနေ ကိုငျပီး နှုတျခမျးတှကေိုငုံစုပျလိုကျတာပေါ့…………….. ကမြတို့ဒီမွို့လေးကိုရောကျပီး….ကိုကွီးနဲ့တှရေတာ..ဘုရားမတယျပဲ ပွောရမလိုဘဲ….အစစအရာရာအကူအညီရသလို…… ကမြယောကြာင်္းလဲနရောရတယျလေ……ပီးတော့…..ကိုကွီးက ကမြတို့သားအမိ ကို…ဂရုစိုကျတယျ….သူလဲအိမျထောငျကှဲမိသားစုရှိဖူးတော့ သားလေးကိုလဲ…..သူသားလိုခဈြရှာတယျ…..သူပွညျနယျရုံးကို အလုပျကိစ်စနဲ့သှားတိုငျး….ကမြတို့သားအမိအတှကျ…တဈခုမဟုတျတဈခု… ဝယျဝယျလာတတျတယျ…….ဒီနလေဲ့သူပွနျနယျရုံး သှားဖို့အလုပျရှုပျနတောနဲ့…..တောဘကျကိုကမြယောကြာင်္းတဈယောကျထဲလှတျလိုကျ ရတယျ….အိမျမှာသူနဲ့ကမြဘဲကနျြခဲ့တာ ပေါ့……ခဏနတေော့ကိုကွီးအပွငျထှကျသှားတာနဲ့….ကမြလဲရမေိုးခြိုးပီး…..အဝတျအစားလဲ…. အိမျရှမှေ့ာ TV ထိုငျကွညျ့နေ လိုကျတယျ….ခဏနတေော့…ကိုကွီးပွနျလာပီး…ကမြဖို့ကမြကွိုကျတဲ့အအေးဝယျလာတာတှတေယျ…….. သူတိုကျတဲ့အအေး သောကျပီး….ကမြစိတျတှဘောဖွဈတယျမသိပါဘူး…..တဈမြိုးကွီးဘဲ…တဈကိုယျလုံးလဲဖိနျးခနဲရှိနျးခနဲ့နဲ့…………..။။
အဲလိုဖွဈနတေုနျးကိုကွီးက….ကမြဖို့ဘောငျးဘီဝယျဖို့အရှညျတိုငျးမယျဆိုပီး……..နောကျကနထေိုငျ….သူလကျကွီးနဲ့တဈတောငျ နှဈတောငျ တိုငျးရငျး…ကမြတငျသားတှကေိုဖွဈလိုကျတဲ့အခါ….ကမြဟိုးအမွငျ့ကွီးကိုရောကျသှားသလိုဖွဈပီး…..သူ့ကိုတားဖို အလှညျ့….သူကထရပျပီး ကမြမေးကနကေိုငျပီး…နှုတျခမျးတှငေုံစုပျလိုကျတော့…လောကကွီးနဲ့အဆကျပွနျသှားသလိုကမြခံစား လိုကျရတာပါဘဲရှငျ……။ ဖွူလေးနှုတျခမျးတှကေိုငုံစုပျရငျး……ကနြျောဒူးကှေးလိုကျတယျ….ပီးတော့ဖွူလေးနဲ့စပနျဘောငျးဘီး အပြော့လေးဝတျထားတဲ့ ဖငျကွားလေးထဲကို….နောကျကနကေနြော့လီးကွီးထောကျပေးထားလိုကျရငျး………..ဖွူလေးနို့တှေ ကို….ဖွဈညဈရငျးအနမျးရှညျးကွီးပေး နတောပေါ့….ဖွူလေးဘာမပွနျမပွောနိုငျဘဲ…ခေါငျးလေးနောကျလညျပွနျရငျး….ဖငျလေး ကိုနောကျကောကျပေးလာတာတှလေိုကျရတယျ… ကနြျောစိတျတှအေရမျးဟော့လာတော့….ပုဆိုးကိုခြှတျလိုကျပီး…လီးကွီးကို ထုတျကိုငျ….ဖွူလေးဖငျသားလေးနှဈခွမျးကိုလကျနဲ့ကိုငျဖွဲပီး… လီးကွီးကိုထောကျထားလိုကျတယျ…… “အ….အငျးးးးး…..” ဖွူလေးမပိမသအသံမြားသာထှကျရငျး……ဖငျလေးကိုကော့ကော့ပေးနတောပေါ့…..စပနျ့သားဘောငျးဘီအပြော့လေးဆိုတော့… ဖငျသား တှရေဲ့နူးညံ့မှုကိုအပွညျ့အဝခံစားနရေသလို….ဖွူလေးလဲကနြျောလီးအနှေးဓါတျကိုသိနပေီလေ…..ကနြျောဖွူလေးဖငျ သားတှကေိုကိုငျဖွဲ ထားရာကနလေကျတှကေိုရှဖေ့ကျပို့ပွီး……….ဖွူလေးစောကျပတျကိုဘောငျးဘီပျေါကနပှေတျပေးလိုကျ တော့….ဖွူလေးဒူးတှညှေတျမလို ဖွဈသှားတယျ….. ကနြျောထိနျးကိုငျရငျးဖွူလေးကို….သူတို့လငျမယားအိပျတဲ့အခနျးထဲ….နမျး ရငျး…ပှတျရငျး…တှနျးရငျးချေါသှားလိုကျတယျ.
အခနျးထဲကုတငျနားရောကျတော့ဖွူလေးကိုအသာ….တှနျးပွီးကုတငျပျေါမှောကျလိုကျတယျ…..ဖွူလေးကုတငျပျေါအပျေါပိုငျး မှောကျရငျး….. မှိနျးနတေုနျး…..ကနြျောနောကျကနထေိုငျပွီးဘောငျးဘီလေးကိုစှဲခြှတျလိုကျတယျ…..။ “ကိုကွီး…ကိုကွီး…ဖွူ လေ….” “ဖွူလေး…ခြာတိတျ..ကိုကွီးကိုခှငျ့လှတျကှာ…ကိုကွီးဖွူလေးကိုခဈြနတောကွာပီ့….”လိုပွောရငျး……..ဖွူလေးဖငျ ကွားလေးထဲကနနေောကျကိုပွူထှကျနတေဲ့….စောကျဖုတျလေးကို…လှမျးယကျပေးလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ….ဖွူလေး အားလိုအျော ရငျစကားလုံးတှပြေောကျကှယျသှားတော့တာပေါ့….။ ကနြျောဖွူလေးရဲဖငျကိုဖွဲရငျး…..ကွားထဲကပွူထှကျနတေဲ့စောကျဖုတျလေး ကိုစိတျကွိုကျယကျလိုကျ……အပေါကျလေးထဲကိုလြှာခြှနျပွီးကလိလိုကျလုပျ နရောကနအေသာရပျပီး….ကနြျောလီးကွီးကိုဖွူ လေးစောကျပတျဝလေးတကေ့ာ…အသာဒဈကလေးစသှငျးလိုကျတယျ…..။“အား…ရှီး……ကိုကွီး…အ…အ..” “ဖွူလေးရယျ… ခြာတိတျရာ…..”ကနြျောသူနာမညျကိုတတှတျတှတျရှတျရငျး…..နောကျကနဖွေူလေးဖငျသားလေးတှပှေတျသပျခြော့မွှူ ရငျး………….. အသှငျးအထုတျလုပျကာလီးကိုထညျ့ပေးလိုကျတယျ…… “အား….ကွပျတယျ…..အား…”
ကမြ …..ကိုကွီးရဲအပွုအစုအယုအယတှအေောကျမှာနဈမွောရငျး….အိမျခနျးထဲကကမြတို့လငျမယားအိပျတဲ့ကုတငျပျေါကို…… မှောကျရကျကလေး ရောကျသှားတော့တယျ……အပျေါပိုငျးက…ကုတငျပျေါမှောကျနပေီး….အောကျပိုငျးကတော့…ကုတငျအောကျ မှာ….အဲအခြိနျမှာဘဲကိုကွီးက…ကမြ….. စပနျ့သားဘောငျးဘီလေးကိုခြှတျရငျး…ကမြကိုခဈြတဲ့အကွောငျးတှေ..ပွောရငျး…….ကြ မဖငျသားလေးတှကေို…ကိုငျဖွဲကာ…..သူ့လြှာကွီးနဲ့ကမြဟာလေးကိုနောကျကနလှေမျးယကျလိုကျတယျဆိုရငျဘာ……..ရငျထဲဗြော ငျးဆနျခတျကာ……မှယေ့ာခငျးကိုလကျတှနေဲ့စုပျကိုငျရငျးးးး….ဖငျလေးကိုနောကျကော့ပေး မိတော့တယျ…..အိမျထောငျသကျ တှကွောပမေယျ့…ကမြယောကြာင်္းကအဲလိုတှမေလုပျတတျသလို……သူဆန်ဒရှိတဲ့အခါ…အပျေါကနတေကျလုပျရငျး…. ပီးခါနီးရငျအပွငျထုတျပီးလိုကျတာကမြားတယျ….အခုလိုလြှာနဲ့ယကျပေးတယျဆိုတာ…..ပွော သံတှေ….နိုငျငံခွားဇာတျကားတှထေဲမှာတှဖေူးမွငျဖူးပမေယျ တကယျခံစားတဲ့အခါ….ဒီလောကျကောငျးလိမျ့မယျလို့ထငျမထားမိ ဘူးလေ……ခဏနတေော့….ကိုကွီးမတျတပျရပျလိုကျတာသထိထားမီတယျ…………. ကမြအရမျးလိုခငျြနပေီဆိုတာ….ဝနျခံရမှာ ဘဲ…..သူကမြကိုလိုးတော့မယျဆိုတာသိပမေယျ့….ကမြ…တားမွဈဖို့ခှနျအားမဲ့နတောသိတယျ………………..။
ကိုကွီးသူ့လီးကွီးကို…ကမြဖငျကွားကနပွေူထှကျနတေဲ့စောကျပဝလေးကိုထောကျလိုကျတယျ….ပီးတော့စလိုးပါတော့ တယျ….ကိုကွီးလီးဟာကမြယောကြာင်္း လီးထကျ…တျောတျောပိုကွီးတာ…ကမြဖငျကွားကိုဘောငျးဘီပျေါကထောကျကထဲကသိ တယျ….ဒါပမေယျ…စောကျပတျထဲဝငျလာတော့…..ကမြထငျတာထကျ ပိုကွီးတာ….သိလာရယျ…အရမျးကွပျပီး…..ပွညျ့သိပျနတောခံစားရယျလေ….။ ကနြျောဖွူလေးကိုတဖွညျးဖွညျးခငျြးလိုးရငျးကနေ…..လီးတဈဝကျလောကျရောကျတော့……ခပျသှကျသှကျ လေးလိုးရငျး…ဖွူလေးဖငျကိုဖွဲကာ အဆုံးထိတဈရဈခငျြးထညျ့လိုကျတယျ…. “အား….ဖွေးဖွေးကိုကွီး…အရမျးကွပျတယျ..” “ဖွူလေးပေါငျကားလိုကျ…နျောခြာတိတျ….အားဖွူလေးစောကျပတျက…အရမျးကွပျတာဘဲကှာ….” ကနြျောဖွူလေးကိုပေါငျကား ဖိုပွောရငျး….ကနြျောကိုယျတိုငျဖွူလေးပေါငျတှကေိုဆှဲကားပေးလိုကျတယျ…ဖွူလေးလဲအလိုကျသငျ့ကားရငျး..ခွဖွေားလေး ထောကျပီးဖငျကိုအပျေါကော့ပေးလာတော့…လိုးရတာပိုအဆငျပွပေီး…အဝငျခြောလာတယျ…ဖွူလေးစောကျပတျထဲက လဲ….စောကျရညျတှထှေကျနေ ပီဆိုတော့…..တအားကွပျမနတေော့ဘဲ…အဝငျအထှကျခြောလာတာနဲ့…ကနြျောလဲအဆုံးထိထညျ့ ပေးလိုကျတယျ….. “အား…အထဲကိုထိတယျ…ကိုကွီး…အားအောငျ့တယျ…” ဖွူလေးအတှငျးသားအိပျကိုထိပုံရတယျ….ဖွူလေး ကအရပျပုတော့….သားအိပျနိမျ့ပုံရတယျ…ကနြျောလဲလီးထိပျကိုတဈခုခုထိမှနျးသိတယျကငျြကနဲ့နေ သှားတာကို…ဒါနဲ့ဖွေးဖွေး လေးအသှငျးအထုတျလုပျရငျးကနေ…ဖွူလေးအကငြ်္ီကိုခြှတျရငျး….နောကျကနဘေျောလီခြိတျတှဖွေုတျပေးလိုကျတယျ…..
အပျေါပိုငျးဗလာနဲ့မှောကျခုံလေးအလိုးခံနတေဲ့ဖွူလေးကို….အသာမပွီးသူနိုတှကေိုနောကျကနလှေမျးခပြေေးလိုကျတယျ……. ဗှ တျ….ဗှတျ….အ….အငျ့အငျ့…အား…အ…အ….. ဖွူလေးစီက…ဘာမှနျးမသိရတဲ့အသံတှထှေကျရငျး…ကနြေျာ့လိုးခကျြတှကေိုခံနေ ရှာတယျ….။ “ဖွူလေး….အား…ကိုကွီးပီးတော့မယျနျော…” “အား….အပွငျထုတျနျောကိုကွီး…ဖွူ….ဆေးလဲမစားဘူး…ထိုးလဲ မထိုးထားဘူး” “ဖွူစိတျခြ…ကိုကွီးကသားကွောဖွတျထားတာ….စိတျမပူနဲ့နျောဖွူလေး” “အား…ဖွူကွောကျတယျနျောကို ကွီး…” “စိတျခပြါ…ဖွူဗိုကျမကွီးစရေဘူး…ကိုကွီးသားကွောဖွတျထားတာ”ပွောရငျးအဆကျမပွတျကနြျောလိုးနမေိတယျ….ဖွူ လေးလဲစိတျထနပေီဆိုတော့… ဖငျကိုနောကျကော့ရငျး….ပွနျစောငျ့စောငျ့ပေးနတေယျ… “ဖွူလေး….အား…ကောငျးလိုကျတာ ကှာ” “ကိုကွီး…နဲနဲစောငျ့ပေး…ဖွူထှကျခငျြပီး…အ..အား…ဟုတျတယျ…စောငျ့ကိုကွီးအား…အ” “ကိုလဲပီးပီ…အား…”ပွောရငျး ကနြျောသုတျရညျတှကေိုဖွူလေးစောကျပတျထဲ….ပနျးထညျ့လိုကျမိတယျ……..။ ကိုကွီး….လိုးလာလိုကျတာ…သူ့လီးကွီးကမြထဲ အဆုံးဝငျတဲ့အထိပေါ့…..သူလီးကရှညျလဲရှညျတော့ကမြသားအိမျကိုထောကျမိတယျ…ကငျြပီး အောငျ့သှားတာဘဲ…ကမြပွော လိုကျတော့မ…သူနဲနဲလြော့သှားတယျ…..ကိုကွီးပီးတော့မယျဆိုတော့မ…ကမြလနျ့သှားတယျ….ကမြကဆေးမတညျ့ ဘူးလေ… ဆေးလဲမစား…ထိုးလဲမထိုးတော့…ကိုကွီးကိုအပွငျမှာပီးဖို့ပွောလိုကျတယျ…ကိုကွီးကသားကွောဖွတျထားတယျတဲ့…..ကမြလဲနဲနဲ တော့ စိတျအေးသှားတယျ…..နောကျဆုံးကိုကွီးပီးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာကမြကိုကွီးကိုဆှဲလမျးသှားတယျဆိုတာဝနျခံရမလို ဘဲ………….။
ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကိုကွီးလရညျတှကေမြစောကျပတျထဲကို…အလုံးလိုကျအရငျးလိုကျပနျးထညျ့လိုကျတဲ့အရသာဟာ……ဘာနဲ့မ လဲနိုငျအောငျပါဘဲ… ကမြအဲလိုအပနျးမခံရတာ..နှဈတှအေတေျောကွာခဲ့ပီလေ…….အဲလိုပနျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာကမြအပွညျ့အဝပီး သှားတာကို…ပထမဆုံးအကွိမျခံစားလိုကျရတယျ..။ “အားဖွူလေးရယျ…” ကိုကွီးကမြအပျေါမှောကျရကျလေးထပျကလြာ ရငျး….သူလီးကွီးတပျရကျမှီနျးနတေယျ…..။ “ထတော့ကိုကွီး….တဈယောကျမွငျသှားလိမျ့မယျ” အစကတဏှာစိတျမှနျနပေေ မယျ…အခုတော့လနျ့ရမှနျးကမြသိသှားတယျ…ကိုကွီးလဲခကျြခငျြးထပွီးပုဆိုးပွနျဝတျလိုကျတယျ…………..။ကမြလဲဘောငျးဘီပွနျ ဝတျ အကြီင်ျပွနျဝတျပီး…..ကုတငျပျေါထိုငျနလေိုကျတယျ…ကိုကွီးကတော့အပွငျထှကျသှားပီး…အိမျရှခေ့နျးကသူအလုပျစားပှဲမှာ ထိုငျနတေယျ…………။ကိုကွီးနဲ့ကမြအခုလိုဖွဈပီး…..မကျြနှာပူတာနဲ့ကမြလဲရှောငျနလေိုကျတယျ……သူပွညျနယျရုံးကပွနျလာ ပီး….ကမြအတှကျဘောငျးဘီအရှညျအတိုတှေ……. အကြီင်ျတှအေစုံဝယျလာသလို…..သားလေးအတှကျလဲကစားစရာနဲ့…မုနျ့တှေ ဝယျလာတယျ……ပီးတော့အိမျရှမှေ့ာထားပီးပွနျထှကျသှားတယျ…….ကမြအမြိုးသားနဲ့တော့ ပုံမှနျအတိုငျးစကားပွော….အလုပျ အတူလုပျနဲ့…..သူမဟုတျသလိုဘဲ….ကမြလဲနှဈရကျလောကျရှိတော့….ပုံမှနျအတိုငျးဖွဈသှားပီးမကျြနှာပူတာရှနျ့တာမရှိတော့ ဘူး…….
ဒီနထေုံ့းစံအတိုငျးကမြနလေ့ညျရမေိုးခြိုးအဝတျအစားလဲပီးခြိနျကိုကွီးအိမျကိုရောကျလာတယျ…..သူရုံးအလုပျတှထေိုငျလုပျနတော ပေါ့…..ကမြယောကြာင်္းကတော့မွို့ထဲကို အလုပျကိစ်စနဲ့ထှကျသှားတာပေါ့……ကမြအခနျးထဲက ကုတငျပျေါမှာပေါ့တေးဘဲလျလေး နဲ့ ကိုရီးယားကားကွညျ့နတေုနျး….ဖုနျးမညျလာတာနဲ့ကွညျ့လိုကျတော့……….. ဖုနျးနံပါတျက ကိုယျမသိတဲ့ဖုနျး…..ဘယျကဖုနျးလဲ ဆိုပီးကိုငျလိုကျတာပေါ့… “ဟလို….ပွောပါရှငျ” “ခြာတိတျ…ကိုကွီးပါ…..” ကမြရငျထဲထိတျကနဲ့ဖွဈသှားသလို…….လကျတှလေဲ တုနျနတောပေါ့…..ကိုကွီးဖုနျးဆကျလာလိမျ့မယျလိုလဲမထငျဘူးလေ………………………………………………….။ “ဟုတျ….ပွော ပါ…” “စိတျဆိုးတုနျးလားဟငျ..ခြာတိတျ” “မဆိုးပါဘူး….”ကမြဒီစကားလုံးဘယျလိုထှကျသှားတယျဆိုတာ….ကိုယျတိုငျမသိလိုကျ ဘဲ….အလိုလိုထှကျသှားတယျ…..။ “ဝမျးသာလိုကျတာခြာတိတျရာ….အပွငျထှကျခဲ့ပါ့လားဟငျ…” “အာကိုကွီးကလဲ….ဘာလုပျဖို လဲ” “မကျြနှာလေးမွငျခငျြလိုပါကှာနျော…ထှကျခဲ့နျောခြာတိတျ”ဆိုပီးဖုနျးခသြှားတယျ…..ကမြလဲထှကျရမလား…..မထှကျရမလား ဝခှေဲမရဖွဈနသေလို…..ရငျတှလေဲခုနျနတေယျ။ ထှကျလိုကျရငျ….ငါ့ကိုသူတဈခုခုလုပျမှာလား….အို…ကမြစိတျတှဟေိုပွေးဒီလှား နဲ့…….အကွောငျးမဲ့လကျတှခြေိုးရငျးစဉျးစားနတောပေါ့………..။
အဲခြိနျမှာဘဲ……ကမြအခနျးရဲ့ခနျးစညျးလိုကျကာလေးလှုပျသှားတာမွငျလိုကျရသလို…..အပေါကျဝမှာကိုကွီးမကျြနှာကိုမွငျလိုကျရ တယျ….ကမြလဲရငျတှတေုနျလှနျးလို……. ကုတငျပျေါကနခေကျြခငျြးထထိုငျလိုကျမိတယျ… “ကိုကွီး….အခနျးထဲမဝငျ နဲ့….တဈယောကျယောကျမွငျသှားရငျအကုနျခကျကုနျမယျနျော…” “ဒါဆိုခြာတိတျထှကျလာခဲ့လေ”တဲ့….ကမြလဲမထှကျရငျသူဝငျ လာမယျဆိုတာသိနတေော….ကုတငျပျေါကဆငျးပီး…..အိမျရှသေူ့အလုပျလုပျနတေဲ့စားပှဲနားကိုသှားထိုငျလိုကျ ရငျးကနေ…. “ပွော….ဘာပွောမလို့လဲ”လို့မေးလိုကျရငျဘဲကိုကွီးက….ကမြကိုရငျခှငျထဲဆှဲသှငျးပီး……မကျြနှာလေးကိုမေးကကိုငျမော့ကာ နှုတျခမျးတှကေိုနမျးလိုကျတယျ……ကမြတိမျတှပေျေါရောကျသှားသလို….အမွငျကွီးကပွုတျကသြလို….အိုးးးးးး……ခံစားမှုအနိမျ့ အမွငျ့အစုံနဲ့နဈမြောနတောပေါ့….ကိုကွီးလကျတှကေလဲ….ကမြရဲနို့တှကေိုအကြီင်ျပျေါကနေ ပှတျသပျခမြှေနတေယျ…..ပီးတော့ လကျတှကေအောကျကိုဆငျးသှားပီး….ကမြဂါဝနျပျေါကနေ….ဖငျသားတှကေိုဖွဈလိုကျ…ပေါငျတှကေိုပှတျလိုကျနဲ့…….ကမြကို ပွုစားနေ တာပေါ့…..။
“အား…ကိုကွီး…တျောပါတော့…တျောကွာကိုမြိုးပွနျလာလိမျ့မယျ” “မလာသေးပါဘူးခြာတိတျရာ….သူကလေးကြောငျးတဈခါထဲ ကွိုခဲ့မယျတဲ့…ကိုကွီးကိုပွောသှားတယျ” “အားးးး…မလာလဲတျောပါတော့နျော” “ခဈြလိုပါခြာတိတျရယျ…ကိုကွီးကိုခှငျ့ပွုပါ နျော….ခဏလေးပါ”………ကိုကွီးကပွောလဲပွော….လကျကလဲကမြစောကျဖုတျလေးကိုဂါဝနျပျေါကနပှေတျပေးနတောပေါ့…….။ ကမြလဲသူလုပျသမြှရငျခုနျလှိုကျမောစှာနဲ့….ခံယူနမေိတယျ….ခဏနတေော့ဂါဝနျလေးကိုလှနျလိုကျပီး…..အောကျကစတျောကငျ လေးပျေါကနကေမြအဖုတျလေးကိုပှတျတယျ “ခြာတိတျရယျ….ခဈြတယျကှာ…”သူကဒီစကားကိုထပျခါထပျခါပွောရငျး…..ကမြ ဖငျသားတှကေိုနယျလိုကျ….အဖုတျလေးကိုပှတျလိုကျနဲ့ကမြမှာသူအယုအယတှကေို…….။ မိနျးမူးနအေောငျညှို့ယူဖမျးစားနတော ပေါ့….ခဏနတေော့ကမြကိုဆှဲထူလိုကျတယျ…ကမြနဲ့ကိုကွီးမတျတပျလေးမကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွဈနခြေိနျမှာကိုကွီးက…ကမြမကျြလုံး တှကေိုစိုကျကွညျ့ရငျး…. “ခလေးဟိုဖကျလှညျ့လိုကျနျော”တဲ့ကမြကိုစိတျညှို့ပီးပွောလိုကျသလိုဘဲ….ကမြလဲကိုကွီးပွော သလို….သူ့ကိုကြောခိုငျးလှညျ့လိုကျတယျ…….အဲအခြိနျမှာကိုကွီးကကမြဆံပငျတှကေိုအသာဖယျပီး….နောကျကနကေမြဂုတျသား လေးတှကေိုနမျးစုပျနတေယျ….ကမြရငျတှအေရမျးခုနျနသေလို….ဒူးတှလေဲညှတျခငျြခငျြဖွဈနပေီလေ……..။
“ခြာတိတျလေး…..ဖငျလေးနောကျကော့လိုကျပါ့လားကှာနျောခလေး”…..ကိုကွီးဟာကမြကိုစိတျညှို့ထားသူတဈယောကျကိုအမိနျ့ ပေးသလို…..ခိုငျးစနေတော……ကမြလဲ.. သူခိုငျးတဲ့အတိုငျး….ဖငျလေးကိုနောကျကော့ပေးလိုကျမိတယျ……..ကိုကွီးက….ကမြ ကော့ပေးလားတဲ့ဖငျလေးကိုဖှဖှလေးလကျနှဈဖကျနဲ့ပှတျရငျးဖငျသားလေးနှဈခမျြးကိုဖွဲလိုကျ….ပှတျလိုကျလုပျနတော…ကမြ စောကျဖုတျလေးထဲကအရညျကွညျလေးတှစေိမျ့ထှကျလာတဲ့အထိပေါ့….ကမြဖငျလေးကိုကော့ပေးရငျး….သမငျလညျပွနျလေး ကွညျ့ လိုကျခြိနျမှာ….ကိုကွီးက…ကမြနှုတျခမျးတှကေိုစီးပွီးစုပျနမျးလိုကျတယျ….ပီးတော့…..သူဘောငျးဘီဇဈကိုဖှငျ့ပီး….သူလီး ကွီးကိုထုတျလိုကျတာကမြလှမျးမွငျလိုကျတယျ….ကမြစိတျတှတေအားလှုပျရှားနပေီး…..သူရှဆေ့ကျမှာကိုလဲမတားဆီးမိတော့ ဘူး…….။ “ခြာတိတျလေး…” “ရှငျ…ကိုကွီး….”ကမြအသံဟာတာဝေးအပွေးသမားတဈယောကျပနျးဝငျလာသလို…အမောတကွီး ဖွဈနတေယျလေ….။ “ခြာတိတျဖငျကွားထဲကို…ကိုကွီးလီးထောငျခငျြတယျကှာ….နျော”….ကမြနားထဲပူသှားသလို….စိတျတှလေဲ ကယောငျခြောကျခြားဖွဈကုနျတာပေါ့……. “အငျး….ကိုကွီးသဘောကှာ”….ကမြပွနျဖွပေမေယျ့ကိုကွီးကလုံးဝကမြဖငျကွားထဲ ကို…သူလီးကွီးမထညျ့သေးပါဘူး…… “ခြာတိတျဖငျလေးကိုထပျကော့ပေးပါ့လား….ကိုကွီးလီးနဲ့ထောကျလိုကောငျးအောငျလို့နျော ခြာတိတျ”…ကိုကွီးကထပျခိုငျးစလေိုကျသလို….ကမြဂုတျသားလေးတှကေိုလဲ…. သှားနဲ့မနာအောငျကိုကျလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ…ကြ မလဲ….ဟငျ့ကနဲ့ညီးညူသံနဲ့အတူ….ဖငျကိုထပျကော့ပေးလိုကျမိတယျ……။
အား….သူလီးကွီးကမြဖငျကွားကိုထောကျလိုကျတယျ…….ဒါပမေယျ့ဂါဝနျကော…..စတျောကငျပါကွားခံနတေော့….ကိုကွီးလီးအ နှေးဓါတျကသိပျမခံစားရဘူး…ဒါပမေယျ့… ရငျခုနျမှုကတော့အတိုငျးထကျအလှနျပါဘဲ…စောကျဖုတျလေးဟာလဲ…ဖောငျးကားပီး… အရညျတှတေအားထှကျနပေီပေါ့…….. “ခြာတိတျရယျ…ကောငျးလိုကျတာကှာ…..ဂါဝနျလေးလှနျလိုကျပါ့လား….အဲဒါမကိုကွီးလီး ကခြာတိတျဖငျကွားကိုပိုထိမှာလေ”“ဟုတျ…အား…အငျးကိုကွီးရာ….”ကမြလဲညီးညူရငျးကိုကွီးခိုငျးသလို…ဂါဝနျလေးကိုလှနျ ပေးလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ…အောကျကစတျောကငျအနီရဲလေးနဲ့နောကျကိုကော့ နတေဲ့ကမြဖငျလေးကိုမွငျနရေတယျ…ကိုကွီးကကြ မဖငျကွားထဲကိုသူ့လီးကွီးထညျ့ရငျးစောငျ့လိုကျတယျ….ဒုတျကနဲ့ထိသလို….ကမြပေါငျတှကေိုပှတျသပျရငျး…….. ပေါငျတဈဖကျ ကိုစှဲမပွီး……ဒူးကှေးကာ…သူ့လီးကွီးနဲ့ကမြဂှဆုံနရော…စောကျဖုတျတညျ့တညျ့ကို…ထောကျလိုကျတာကမြဒူးတှညှေတျကသြှားပါ တော့တယျ……။“ခြာတိတျလေး….လိုးရအောငျနျော…”ကမြနားထဲကိုဗုံးအလုံးပေါငျးမြားစှာပေါကျခှဲလိုကျသလို…ကိုကွီးစကားလုံး တှကေ…ဝငျရောကျလာပါတယျ…..နားကတဈဆငျ့….. ကမြဦးဏှောကျကိုလဲခိုငျးစလေိုကျသလိုပါဘဲ…..ကမြခေါငျးအလိုလိုညိမျ့မိ ပါတော့တယျ…….။ “သှားခြာတိတျလေး….အခနျးထဲကို…ကုတငျပျေါကနစေောငျ့နနေျော…”တဲ့ကမြဟုတျတဈလုံးထဲကလှဲပီးဘာ မ…မပွောနိုငျတော့ပါဘူး….ခကျြခွငျးဘဲအခနျးထဲသှားဖို့ ကမြလုပျလိုကျပါတယျ…ဒါပမေယျ့ကိုကွီးက ကမြလကျကိုဆှဲထားလိုကျ တော့….ကမြကွောငျပီးသူကိုကွညျ့လိုကျမိတယျဆိုရငျဘဲ….ကိုကွီးက……………………….။
“ဘယျကိုလဲခြာတိတျ…ဘယျသှားမလိုလဲ…” ကမြလဲခကျြခငျြးဘဲ…“အခနျးထဲကိုလေ…ကိုကွီး”…… “ဘာသှားလုပျမလိုလဲအခနျး ထဲကို….”ကမြ….ကိုကွီးမေးတာကိုအစကနားမလညျဘူး…. “ကိုကွီးဘဲအခနျးထဲကသှားစောငျ့ဆိုကှာ….”စိတျမရှညျစှာဘဲဖွေ လိုကျတယျ…….“အငျးလေ…ခြာတိတျကလဲ…အခနျးထဲကိုဘာလုပျဖိုသှားမှာလဲပွောပါအုနျးကိုကွီးကို…နျော…ခြာတိတျနျောလို့” “ကိုကွီးလိုးတာခံဖို့….သှားမှာမလား…ဟုတျတယျမလားဟငျခြာတိတျ”…..ကမြလဲကိုကွီးစားလုံးတှေ…အယုအယတှအေောကျမှာ နဈမြောနပေါပီ…. ခကျြခွငျးဘဲ….“ဟုတျ…ဟုတျ…ကိုကွီးလိုးတာခံဖို့အခနျးထဲသှားမလို့ပါ…”ကမြဒီစကားလုံးတှကေို…နှုတျက လား….ဦးဏှောကျကလား….ဘယျကထှကျလာတယျလို့ ကိုယျတိုငျတောငျမသိတော့သလိုပါဘဲရှငျ……။ကမြအခနျးထဲကိုရောကျ တာနဲ့…..ဂါဝနျနဲ့စတျောကငျလေးကိုခြှတျပီး……..ဘရာတဈခုထဲဝတျကာကုတငျပျေါတကျပီး….ကိုကွီးလိုးတာခံဖို့အသငျ့စောငျ့ နေ လိုကျပါတယျ……ခဏကွာတော့….ခနျးစညျးလိုကျကာလေးလှပျပီးကိုကွီးဝငျလာတယျ….ကမြမကျြလုံးဒေါငျ့ကနမွေငျနရေတယျ… ကိုကွီးကုတငျပျေါကိုတကျလာပီးကမြအပျေါကနကေမြနှုတျခမျးတှကေိုနမျးစုပျရငျး….လကျကကြောအောကျကိုလြှိုထညျ့ ကာ ဘရာဂြိတျလေးတှဖွေုတျလိုကျပါတယျ….ကမြအလိုကျသငျ့ကြောကော့ ပေးရငျးကနေ…ဘရာလေးကိုပငျ့တငျရငျးနို့တှကေိုငုံ စုပျခံလိုကျရတာဟာ….ရငျတဈခုလုံးလဈဟာသှားသလို……စောကျပတျထဲကလဲအရညျတှတေစိမျ့စိမျ့ယိုစီးကလြာ ပါတော့ တယျ…..
“အား….ရှီး….အ….ကိုကွီးအငျးးးးးးးးးးးးးးးး” ကမြ မပီမသစကားလုံးဗလုံးဗထှေးတှရေရှေတျရငျး….ရငျဘတျတဈခုလုံး ကော့တကျနသေလို….ကိုကွီးကလဲကမြနို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုငုံလိုကျ…..သှူ့လြှာကွီးနဲ့နို့သီး တှကေို ဝလုံးဝိုငျးသလိုလုပျ လိုကျ….နညျးမြိုးစုံသုံးပီး…ကမြကိုပွုစားနပေါတော့တယျရှငျ….. တဖွေးဖွေးကိုကွီး….အောကျပိုငျးကိုဆငျးသှားကာ…ကမြဗိုကျ သားနဲ့ခကျြတှကေိုနမျးလိုကျခြိနျမှာတော့….သူဘယျကိုဦးတညျနတေယျဆိုတာကမြသိနပေါတယျ……. ကမြဘဝမှာကိုကွီးနဲ့တှမှေ့ စတငျခံစားဖူးတဲ့….စောကျဖုတျအယကျခံတဲ့အရသာကို…ခံစားရတော့မယျဆိုတဲ့အသိက….ရငျထဲမှာကော….အဖုတျထဲမှာပါ တလှပျလှပျနဲ့ကွိုတငျခံစားနရေပါတယျ….. “ခြာတိတျ…” “ရှငျ….ကိုကွီး…”ကမြမောဟိုကျတိုးညှငျးစှာထူးလိုကျပါတယျ… “ကို ကွီး…ခြာတိတျစောကျဖုတျလေးကိုယကျခငျြတယျကှာ….နျော”…ကမြအဲလိုပွောတဲ့ကိုကွီးစကားလုံးတှအေောကျပါ…ကဆြုံးနရေ ပါပီ……………………………။ “အငျး….ကိုကွီးသဘော”လိုပွောလိုကျပမေယျ…ကမြပေါငျအတှငျးသားလေးတှကေိုသာသူ့နှုတျခမျးနဲ့ နမျးရငျး…ကမြစောကျဖုတျစီကိုရောကျလာလိမျ့နိုးမြှျောနတေဲ့ ကမြမြှျောလငျ့ခကျြကတော့မပွညျ့သေးပါဘူး….ကမြလဲဖငျကိုကော့ ရငျး…ကိုကွီးပါးစပျနဲ့ကမြစောကျဖုတျလေးတှထေိအောငျလိုကျရှပေ့ေးပမေယျ….ကိုကွီးကဟိုဒီ သာပွောငျးနတေယျ…ကမြ စောကျဖုတျကိုလုံးဝမယကျသေးပါဘူး…………..။
ကမြ…..ပေါကျကှဲထှကျမတတျဖွဈနပေါပီ…နောကျဆုံးမခံစားနိုငျတော့ဘဲ….. “ကိုကွီး….အားဖွူစောကျပတျကိုယကျပေးပါ တော့….”ကမြပေါကျကှဲထှကျသှားပါပီ….နှုတျကနအေျောဟဈထှကျလာတဲ့စကားလုံးတှဟော….ကမြကိုယျတိုငျမဟုတျရဲ့ လား လို့……ထငျမှတျမှားလောကျအောငျပါဘဲ…… “ယကျခငျြတာပေါ့ခြာတိတျရယျ…..ခြာတိတျစောကျပတျလေးကိုဖွဲပေးနျော…ကိုကွီး ယကျဖို့လေ..”…ကိုကွီးပွောလိုကျတာနဲ့ကမြလဲခကျြခွငျးလကျနှဈဖကျနဲ့စောကျပတျ နှုတျခမျးသားတှကေိုဖွဲပေးလိုကျတယျ……ကြ မစောကျပတျဖှေးဖှေးလေးဟာအမှေးအမွငျကငျးစငျပီး…..ကမြဖွဲလိုကျတဲ့အတှကျ..အစလေ့ေးဟာပွူးထှကျလာပါတော့တယျ… ကိုကွီးကအဲဒီအစလေ့ေးကိုခြိုခညျြစုပျသလို….တယုတယလေးငုံစုပျလိုကျတဲ့အခါ….ကမြ…လောကကွီးနဲ့အဆကျအသှယျပွတျ သှားသလို…..အရာအားလုံးဟာကိုကွီးရဲ့ စောကျစစေု့ပျပေးနတေဲ့အရသာအပျေါမှာသာ….အပွညျ့အဝခံစားနမေိပါတော့တယျ….. “အငျးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ကမြလညျပငျးကွောတှထေောငျပီး….ခေါငျးမော့ကာအသကျကိုမနဲ့ရှူသှငျးနရေပါတယျ…..အစလေ့ေး ကိုစုပျနရောကနေ…ကမြစောကျပတျအဝ လေးကိုလြှာလေးနဲ့ထိုးစှမှနှေောကျနပေါတော့တယျ….ကမြအသကျငငျနတေဲ့လူတဈ ယောကျလို….အသံပေါငျးစုံလညျပငျထဲကအဈထှကျ၇ငျး….လူးလှနျ့နမေီပါတော့တယျ.။
“ခြာတိတျ….လိုးရအောငျနျော….”ကိုကွီးကပွောလဲပွော……ဘောငျးဘီကိုအောကျဆှဲခြှတျရငျး…ကမြပေါငျကွားမှာနရောယူ လိုကျပါတယျ……..။ “အငျး….လိုး….လိုးပါတော့…ဖွူကိုလိုးပေးပါတော့…”ကမြအရမျးဆာလောငျနပေီလေ…..ဘာအရှကျ…ဘာ အကွောကျတရားမ…မရှိတော့ပါဘူး……………….။ ကိုကွီးလီးဒဈကွီးဟာကမြစောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုကွားကို….ထိုးခှဲဝငျ ရောကျလာသလို….ကမြပေါငျတှဟောလဲ….သှေးသှားအလိုအရ…အလိုလိုထောငျကားသှားပါတယျ။ “အား……အငျး…..အားကို ကွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ကမြစောကျပတျထဲမှာအပွညျ့အသိပျ….လဟောနယျမရှိ….အရသာပေါငျးမြားစှာပေးနတေဲ့လီးကွီးဟာ… တဖွညျးဖွညျးခငျြး တရဈခငျြး…ထိုးခှဲဝငျရောကျလာလိုကျ….ပွနျထှကျသှားလိုကျ…ကမြစောကျပတျလေးဟာလဲ….ဟာသှား လိုကျ…ပွညျ့အငျ့သှားလိုကျနဲ့……ကမြအောကျကနကေော့တကျလိုကျ ပွနျပွုတျကသြှားလိုကျနဲ့….စညျးခကျြကိုကျနတော…ကိုယျ ဖာသာတောငျသတိမထားမိအောငျပါဘဲ…. “ခြာတိတျလေး….” “ကိုကွီး….” “ကောငျးလားဟငျခြာတိတျ” “အရမျးကောငျး တယျ..ကိုကွီးရာ” “ဘာကောငျးတာလဲဟငျခြာတိတျ” “ကိုကွီးလိုးတာလေ….ဟိုးဖွူစောကျပတျထဲကအရမျးကောငျးတယျ”ကဲအဲ ဒါကမြလားလို့တောငျမေးယူရမလိုဘဲ….ကမြနှုတျကထှကျတာတှဟေုတျရဲ့လားတောငျမေးယူရမလိုပါ။
“အငျ့….အား….ရှီး…အား…အငျ့အငျ့အငျ့”ကမြအသံပေါငျးစုံထှကျနသေလို…ကိုကွီးကလဲအပျေါကနလေကျထောကျရငျးမှနျမှနျစော ငျ့လိုးနပေါတော့တယျ….။ ကမြယောကငြ်္ားဆိုဒီလိုအခကျြတှအေမြားကွီးမလိုးနိုငျပါဘူး…..၁၀ ခကျြလောကျလိုးလိုကျ အခကျြ ၂၀ လောကျလိုးလိုကျ…နားလိုကျနဲ့စပျတငနျ့ငနျ့ကွီး…ကိုကွီးကတော့… အဲလိုမဟုတျပါဘူး….စလိုးကတညျးက…တဈခကျြမ မနား ဘဲအခကျြပေါငျးမြားစှာမရမေတှကျနိုငျအောငျပါဘူး……ကမြ…ပီးသှားလိုကျ….ပွနျကောငျးလာလိုကျနဲ့………….။ “ကိုကွီး…တျော ပါတော့…ဖွူဒူးတှတေုနျနပေီ”ကမြတားယူတော့မ…ကိုကွီးအလိုးရပျရငျးကမြနို့တှကေိုငုံစုပျပေးနတေယျ….။ ခဏနတေော့…ကို ကွီးကသူ့လီးကွီးကိုကမြထဲကနထေုတျလိုကျတယျ………ပီးတော့ကုတငျအောကျကိုဆငျးသှားတယျ….ကမြလဲဘာလိုပါလိမျ့ဆိုပီး ကွောငျကွညျ့နတေုနျးမှာဘဲ “ခြာတိတျလေး….ကုတငျစောငျးမှာလိုးရအောငျနျော…”ကမြလဲခေါငျးညိမျ့ပွရငျး….ကုတငျစောငျးကိုလူ ရှကေ့ာ….ကိုယျအောကျပိုငျးကိုကုတငျအောကျတှဲလောငျးခထြားလိုကျတယျ……ကမြတငျက…ကုတငျစောငျးမှာတငျနတေော့… စောကျဖုတျလေးကအထကျကိုခုနျးထနတောပေါ့…ကိုကွီးက…အောကျကိုတှဲလောငျးကနြတေဲ့ကမြခွထေောကျ တှကေိုအသာ လကျနဲ့မရငျး…ကမြပေါငျကွားကိုနရောယူကာ…သူ့လီးကွီးနဲ့ကမြစောကျပတျလေးကို…စလိုးပါတော့တယျ… “အား…ဖွေးဖွေးကို ကွီး…ထိတယျ..အရမျးထိလို့”ကမြတောငျးပနျသံကို…မကွားတာလား….ဒါမဟုတျဂရုမစိုကျတာလားတော့မသိဘူး…ကိုကွီးကတဈခကျြလေးမ မလြော့ဘဲ ဆကျတိုကျလိုးစောငျ့နပေါတော့တယျ….
“အား….အား…အငျးအ…အ..အ…အ….” “အား…အအ….အ….ကိုကွီး…အ….အငျး….“ “ခြာတိတျကိုကွီးပီးတော့မယျ….” “ဟုတျ….ပီးလိုကျအ…အ..အား….အား…အ..အ….အ…” “ပီးတာသိတယျမလားဟငျခြာတိတျ“ “အငျး…သိတယျ…အားးး အားးးးးးးးးးအအအအအအ” “ဘာလဲပီးတာ…သိတယျဆိုပွောကှာခြာတိတျ” “အား…ကိုကွီးလရတှေေ…ဖွူစောကျပတျထဲ…ပနျး ထညျ့တော့မှာလေ….အ…အာ…” “ဘယျလိုလုပျပနျးထညျ့မှာလဲဟငျခြာတိတျလေးးးး” “အား…လိုးရငျး…လိုးအ…လိုးရငျးပနျးထညျ့ မှာလေးအားအားးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ပွောဆိုလိုးညှောငျ့နရေငျးကနေ…ကိုကွီးလရတှေကေမြစောကျပတျထဲကို…အရှိနျအဟုနျနဲ့ပနျးဝငျ လာပါတော့တယျ….ကမြပွောမပွတတျအောငျ…ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ပွီးမွောကျခွငျးကိုရောကျသှားပါတော့တယျရှငျ…..။ကမြနဲ့ကိုကွီး တို့ဟာအမွဲထိတှနေရေပမေယျ့……အမွဲတနျးတော့မလိုးဖွဈပါဘူး……….ကိုကွီးမအားတဲ့ခါတှရှေိသလို……ကမြအမြိုးသားအိမျ မှာရှိနတေဲ့ အခါတှမှောလဲ…ကမြတို့ဟာခပျတညျတညျခပျတနျးတနျးနကွေတာပါ……ကမြနဲ့ကိုကွီးမတှဖွေဈတာအခုဆို ၁၀ ရကျ ကြျောလောကျဖွဈနပေါပီ…..ကမြကို…ကိုကွီးကဖုနျးထဲကနအေမွဲလိုလိုလှမျးပီး…သတိရကွောငျး…တှခေငျြကွောငျးပွောနပေေ မယျ…..လကျတှမှောအခကျအခဲတှကေိုယျစီနဲ့မို့ဒီလိုဘဲ…မွငျသာမွငျမကဉျြရဆိုသလို နီးလြှကျနဲ့ဝေးနကွေဆဲပါ……ဒီနလေဲ့ကိုကွီး အလုပျမြားနလေို့….စခနျးထဲမှာရှိနပေမေယျ….ကမြတို့အိမျဖကျကိုကူးမလားနိုငျပါဘူး….ဘာတှအေလုပျမြားနတောဆိုတာ တော့ကမြ မသိပမေယျ…..အလုပျရှုပျနမှေနျးတော့ကမြကောငျးကောငျးသိပါတယျ….ကမြလဲကိုကွီးလာရငျ….အလှပွခငျြတာနဲ့… ရမေိုးခြိုးပီးထုံးစံအတိုငျး….ခါးတိုလေး နဲ့ စပနျ့ကောငျးဘီရှညျအပြော့လေးကိုဝတျထားပီးအသငျ့စောငျ့နမေိပါတယျ….ကမြ အမြိုးသား ကိုမြိုးဟာလဲ….ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ….အလှုပျမြားနတောအိမျကနေ… လှမျးမွငျနရေပါတယျ…..
ကမြအိမျရှစေ့ကျတီပျေါထိုငျငေးနတေုနျးဖုနျးသံမညျလာတာနဲ့ဖုနျးကိုကွညျ့လိုကျတော့…ကိုကွီးဖုနျးဖွဈနတေယျ…စခနျးနဲ့အိမျက လှမျးမွငျနရေတာ….ပီးတော့…….. ၆ ပလေောကျကှာတာကို….ဘာလိုဖုနျးဆကျတာလဲပေါ့ကမြလဲ…ဖုနျးကိုကောကျကိုငျလိုကျ တယျ…. “ဟလို…ကိုကွီးပွောလေ..” “ခြာတိတျအရမျးလှတယျ….အမောကိုပွသှေားတာဘဲသိလား…”…သူပွောမ ကမြထိုငျနေ တဲ့နရောကို သူအခနျးထဲကနလှေမျးမွငျနရေမှနျးသတိထားမိတယျ……….အုတျခပျြလေးတှထေောငျပီး…လဝေငျပေါကျသဘောမြိုး ဖောကျထားတဲ့နရောကနမွေငျနရေတာကိုး…ကမြလဲလှမျးပီးလြှာထုတျပွလိုကျတယျ…….“အပိုတှေ…..လှပါဘူး”…ကမြခပျခြှဲခြှဲ လေးပွောလိုကျတာပေါ့…. “အရမျးလှမျးတယျကှာ…မတှရေ့တာကွာပီ…”……ကိုကွီးကမြကိုအရမျးတှခေငျြနသေလို…ကမြလဲ တှခေငျြတာပါဘဲ….ကမြလဲဘယျလိုတှနေို့ငျမလဲဆိုတာကို အမွဲလိုလိုတှေးနမေိတာပါ….. “ခြာတိတျလေး…အိမျရှခေ့နျးထှကျ လိုကျ…” “ဘာလို…” “အျော…ခြာတိတျကလဲခိုငျးစရာရှိလိုပေါ့…နျော” ကမြလဲကိုကွီးပွောတဲ့အတိုငျးအိမျရှခေ့နျးကိုထှကျလိုကျ တယျ…..အိမျရှခေ့နျးဆိုတော့ကမြကိုတဈကိုယျလုံးလှမျးမွငျနိုငျတာပေါ့…ကမြလဲဖုနျးကိုငျရငျးအိမျရှခေ့နျး ထှကျလာလိုကျ ယျ…… ကိုကွီးဘာခိုငျးမလိုလဲပေါ့….. “ခြာတိတျ…ကိုကွီးစာအုပျဘီဒိုအောကျမှာ..မနကေ့ပငျတခုကနြတောရှိသေးလားကွညျ့ပေးပါအုနျး” ကမြလဲသူပွောသလို…ဘီဒိုအောကျကိုကုနျးကွညျ့လိုကျတာပေါ့….မှောငျနလေို့လား…..သူပွောတဲ့ပငျကသေးလို့လား…မတှဘေူး ဖွဈနတေယျကမြလဲအတတျနိုငျဆုံး ဘီဒိုအောကျကိုခေါငျးဝငျပီးကွညျ့တာပေါ့….. “အားး…ခြာတိတျအဲလိုလေးနေ..အရမျးမိုကျ တယျကှာ…” ကမြသိလိုကျပီ…ဘာပငျမဘီဒိုအောကျမှာမရှိဘူး……သကျသကျကမြကိုသူဖကျဖငျကုနျးပွအောငျလုပျတာဆိုတာ ကို…..ကိုကွီးကအဲလိုမထငျမှတျထားတာတှနေဲ့ ကမြကိုဆှဲဆောငျနတောလားလိုထငျမိတယျ….အခုလဲကွညျ့ကမြဘီဒိုအောကျက ဘဲပွနျထှကျရမလား….ကိုကွီးကိုဘဲဆကျပီးဖငျကုနျးပွနရေမလားပေါ့………..
ကမြဘောငျးဘီအပြော့သားနဲ့ဖငျကုနျးနတောဆိုတော့….ကမြနောကျကနကွေညျ့နတေဲ့ကိုကွီးစိတျတှဘေယျလောကျထနျနမေလဲဆို တာတှမေိရငျး…..ကမြလဲ စောကျဖုတျထဲက…အရညျကွညျလေးတှစေိမျ့လာပါပီ….. “ကိုကွီး….တျောပီကှာ…ညောငျးနပေီ”လို့ကြ မလှမျးပွောလိုကျတယျ…..စိတျထဲမှာလဲအဲလိုကုနျးပွနရေတာ…တဈမြိုးကွီးလေ….မပွောပွတတျအောငျဘဲ……. “ခဏလေးပါ ကှာ…ခြာတိတျကလဲ…အလှမျးပွလေေးနျော….အရမျးမိုကျတယျ..ခြာတိတျဖငျကွီးက….လှလိုကျတာကှာ” ကမြလဲကိုကွီးဖုနျးထဲက ပွောလေ…..စောကျပတျထဲက…အရညျတှထှေကျလေ….ဖငျကိုပိုထောငျပေးမိတာပေါ့…….။ “ခြာတိတျလေး…..ကိုကွီးလာခဲ့မယျ နျော…အနီးကပျကွညျ့ခငျြတယျကှာ…”… “ဟလို…ဟလို…”ကိုကွီးကပွောပွောဆိုဆိုဖုနျးခသြှားတော့…ကမြလဲကုနျးနရောကနထေ ပီး…..အိမျရှခေ့နျးထဲဝငျ…….စောစောကထိုငျနတေဲ့ခုံလေးပျေါပွနျထိုငျ နတောပေါ့….. ခဏနတေော့…ခွလှေမျးကွဲကွီးတှနေဲ့ကို ကွီးအိမျပျေါတကျလာတာတှလေိုကျတယျ…..ကမြရငျတှတေဒိုငျးဒိုငျးခုနျနရေငျးသူ့ကိုကွညျ့နမေိတယျ…………………..။ ကိုကွီးက အိမျပျေါတကျလာရငျး….သူဘကျခမျြးကအလုပျစားပှဲမှာခပျတညျတညျနဲ့ထိုငျရငျးကမြကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတယျ…..ကမြလဲကိုကွီး ဘာပွောလာမလဲ…..။ ဘာတှစေခေိုငျးလာမလဲဆိုတာကိုငနျ့လငျ့ရငျး…….သူမကျြလုံးတှကေိုစိုကျကွညျ့နမေိတာပေါ့…..။..ကိုကွီး ကသူ့နားလာဖို့ကမြကို…မကျြရိတျလေးနဲ့ပွတော့…… ကမြလဲအသာထပီး….သူစားပှဲနားသှားလိုကျတယျ……ကိုကွီးထိုငျနရေငျး ကနကေမြခါးလေးကိုဖကျကာ……တငျသားလေးတှကေိုလကျနဲ့ပှတျသပျခွမှေပေးနတေယျ….။
ကမြလဲဘေးဘီကိုကွညျ့ရငျး…… “ကိုကွီး…..တဈယောကျယောကျမွငျသှားအုနျးမယျကှာ” “ခြာတိတျကလဲ…ဘယျလိုမွငျရမှာလဲ ကှာ..”ဟုတျတော့ဟုတျပါတယျ…ကိုကွီးအလုပျစားပှဲနားက…အပွငျကနလှေမျးမမွငျနိုငျဘူးလေ….အိမျထဲဝငျလာမသာမွငျရ တာ…။ ပွောပွောဆိုဆိုကိုကွီးက….ကမြစောကျဖုတျလေးကိုဘောငျးဘီပျေါကနပှေတျသပျပေးလာတော့…..ကမြပေါငျလေးကား ပေးလိုကျမိတယျ…..။ကမြအရညျတှဟော…..။ ဘောငျးဘီလေးတောငျဆိုနပေီလေ……ကိုကွီးကဖငျသားတှကေိုခွမှေ လိုကျ…..စောကျဖုတျလေးကိုပှတျသပျလိုကျလုပျနရေငျးကနေ……..ကမြကိုထိုငျနရောနမေော့ကွညျ့ရငျး “ခြာတိတျလေး…မတှရေ့ တာကွာပီကှာ…အရမျးလိုးခငျြတယျ…” “အား…အတူတူဘဲကိုကွီးရာ….လဈမ…မလဈတာ”ကမြလဲပွနျပွောလိုကျမိတယျ…. “အခုလှတျလပျတယျလေ…..ကိုမြိုးလဲမရှိဘူး….ညမပွနျလာမှာ…သားလေးကလဲကြောငျးဆငျးဖိုအဝေးကွီးလိုသေးတယျ…” “လိုးရအောငျနျော..ခြာတိတျ” ကမြလဲအရမျးခံခငျြနပေီလေ….ဟနျဆောငျညငျးဆနျဖို့တောငျအငျအားမရှိတော့ဘူး….ခေါငျးလေး ကိုသှကျသှကျညိမျ့လိုကျတာပေါ့…..။ ကိုကွီးကထိုငျရာကနထေပီး…….ကမြနှုတျခမျးတှကေ…လညျတိုငျတှကေိုနမျးရငျးကနေ….နို တှကေိုအကငြ်္ီပျေါကနကေိုငျတှယျဖွဈညဈပေးနလေိုကျတာ…လူတဈကိုယျလုံး လဟောနယျထဲရောကျနသေလိုပါဘဲ….။
“ခြာတိတျ…အခနျးထဲကခေါငျးအုနျးတလုံးသှားယူခဲနျော…” ကမြခကျြခွငျးအခနျးထဲဝငျပီးခေါငျးအုနျးယူလိုကျတာပေါ့….သူနားပွနျ ရောကျတော့ကိုကွီးက…သူအလုပျစားဘေး..ခြောငျလေးထဲမှာခေါငျးအုနျးကိုခထြားလိုကျတယျ…….ကမြကိုလဲအဲဒီခြောငျလေးထဲ ကိုဆှဲချေါရငျး….. “ခြာတိတျခေါငျးအုနျးပျေါဒူးထောကျပီးကုနျးလိုကျ…” ကမြသူပွောသလိုခေါငျးအုနျးပျေါဒူးလေးထောကျပီးကုနျး လိုကျတယျ…..ကိုကွီးကနောကျကနကေမြကိုစိုကျကွညျ့နပေီး…….သူပုဆိုးထဲကလီးကွီးကိုပုဆိုးပျေါကနပှေတျသပျ ကိုငျတှယျနေ တာမွငျနရေတယျ….. “ခြာတိတျ…..ဘောငျးဘီလေးကိုပေါငျလယျလောကျထိခြှတျလိုကျ” ကမြကိုကွီးပွောသလိုဘောငျးဘီကို ပေါငျလညျလောကျထိခြှတျလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ….ကမြဖငျသားဖှေးဖှေးလေးနဲ့….ဖငျကွားထဲကစောကျပတျလေးကကိုကွီးကိုဖိတျ ချေါနပေီဆိုတာသိလိုကျမိတယျ…….ကိုကွီးကထိုငျခုံကနကေမြနားလာပီးကမြဖငျသားတှကေိုပှတျသပျလိုကျ….ဖငျသားနှဈဖကျကို ဖွဲလိုကျစလေို့ကျလုပျရငျး…..ဖငျကွားထဲကနောကျကိုပွူးထှကျနတေဲ့ကမြစောကျပတျလေးကိုယကျတော့တာပါဘဲ…..ကမြဖငျကွီး ကိုဟိုရမျးဒီရမျးလုပျရငျးကနတေအငျးအငျးညီးညူနမေိတာပေါ့….
“ခြာတိတျခံခငျြပီလား” “ဟုတျ…ခံခငျြပီကိုကွီးရာ….လိုးပေးတော့နျော…” “ဒီနားမလိုးခငျြဘူးကှာ…ခြာတိတျတို့လငျမယားလိုးတဲ့ကု တငျပျေါမှာလိုးခငျြတာ” “ကိုကွီးသဘောလေ….” “အဲဒါဆိုအခနျးထဲသှား….အလိုးခံဖို့အသငျ့စောငျ့နနေျော….အသငျ့ဖွဈရငျကိုကွီး ကိုချေါလိုကျ” “အာကိုကွီးကလဲ….လှမျးချေါရငျ..သူမြားတှကွေားကုနျးမှာပေါ့”ကမြပွောလိုကျတော့.. “ဖုနျးနဲ့ချေါလေ….သူမြားတှေ မကွားတော့ဘူးဟလား”အဲလိုထူးထူးဆနျးဆနျး….အသဈအဆနျးတှနေဲ့ကမြကို….စိတျလှုပျရှားစတော…ကိုကွီးတဈယောကျပဲရှိတယျလေ…။ ကမြလဲ….ကုနျးနရောကအသာထပီး…..အိပျခနျးထဲကိုဝငျသှားလိုကျတယျ….အခနျးထဲရောကျတော့…အဝတျအစားတှအေကုနျခြှတျပီး…..အသငျ့ဖွဈတာနဲ့ဖုနျးယူပီး…… ကိုကွီးကိုဖုနျးချေါလိုကျတယျ…..တဈအိမျထဲ….အိမျရှခေ့နျးနဲ့…အိပျခနျးဖုနျး ဆကျရတာ…ရီတော့ရီခငျြတာ….ပီးတော့စိတျထဲလဲတဈမြိုးကွီး…..အလိုးခံဖို့အသငျ့ဖွဈတာကို ကိုယျ့လိုးမဲ့သူကိုလှမျးပွောရမှာဆို တာကလဲ…..စိတျကိုပိုထစသေလားဘဲ….. “ခြာတိတျလေး….အသငျ့ဖွဈပီလား”ကိုကွီးကဖုနျးကိုငျရငျးမေးသံတဈဆကျထဲထှကျ လာတယျ… “ဟုတျကိုကွီး…အသငျ့ဖွဈပီကှာ….လာခဲ့တော့…” “ဘာအသငျ့ဖွဈတာလဲခြာတိတျလေးရာ…” “ကိုကွီးအလိုးခံဖို့ အသငျ့ဖွဈနပေီ….နျောကိုကွီးလာခဲ့တော့” “ဘာလုပျလာရမှာလဲ..ပွောလေ” “ဖွူကိုလာလိုးပါတော့ကိုကွီးရယျ….ဖွူလကေိုကွီး အလိုးခံဖို့အသငျ့ဖွဈနပေီ“ကမြအဲလိုပွောလိုကျတာနဲ့တငျ…ပီးခငျြခငျြဖွဈသှားတာအံ့သွမိတယျ….လိုးတောငျမလိုးရသေးဘူး
“ခဈြတယျခြာတိတျရာ…ပွနျချေါပါ့လားအဲလိုလေး…အရမျးနားထောငျကောငျးလိုနျောခြာတိတျ”ကိုကွီးအသံကတုနျရီနပေီး… တကယျဖီးဖွဈနတောသိသာတယျ…ကမြလဲအရမျး ထကွှနပေီဆိုတော့… “ကိုကွီး…ဖွူကိုလားလိုးပေးတော့နျော…ဖွူစောကျ ပတျလေးကိုကိုကွီးလီးနဲ့လာလိုးပေးပါတော့….ဖွူအရမျးခံခငျြနပေီး…”ကမြပွောရငျးကိုယျ့စောကျပတျလေးကိုယျပှတျလိုကျ မိတဲ့ အထိပါဘဲ….. ကိုကွီးဝငျလာပီးကုတငျဘေးမှာရပျကာ ကမြကိုယျလုံးတီးလေးနဲ့ပကျလကျအိပျနတောကိုကွညျ့ပီး…..သူ့ အဝတျအစားတှခြှေတျလိုကျတယျ….ပီးတော့ကုတငျပျေါကိုတကျလာ ပီးကမြပေါငျကွားမှာနရောယူရငျးကမြပေါငျနှဈခြောငျးကိုမ လိုကျတယျ….“ခြာတိတျ…လိုးမယျနျော” “အငျး…လိုး…လိုးပေးကှား” “ခြာတိတျကိုယျ့လီးကွီးကို…ခြာတိတျစောကျပတျဝမှာတေ့ ပေးပါ့လား….”ကမြစိတျတှအေမွငျ့ဆုံးကိုပေါကျကှဲထှကျသှားပါပီ…ခေါငျးသှကျသှကျညိမျ့ရငျး…..ကိုကွီးလီးကွီးကိုလှမျး ကိုငျ ကာ…ကမြစောကျပတျဝလေးမှာတပေ့ေးလိုကျပါတယျ…..
“အား…အငျး….ဝငျတယျ…ကိုကွီး…ဝငျလာပီးဖွူစောကျပတျထဲကို…ကိုကွီးလီးကွီးအားးးးးးးးးး”ကမြစကားလုံးတှေ…ညီးညူ သံတှနေဲ့အတူ……စောကျပတျကိုလဲကော့ပေးလိုကျ မိပါတယျ…. ကိုကွီးရဲထုံးစံအတိုငျးစလိုးပီဆိုကထဲက…..ဖွေးဖွေးမှနျမှနျနဲ့ တဈခကျြခွငျး…..နောကျမွနျမွနျ…နောကျစောငျ့လိုကျ….နညျးမြိုးစုံနဲ့မရပျမနားလိုးပေးနတောပေါ့…………..။ ကမြလဲကာမအရာ သာရဲ့ အနိမျ့အမွငျ့……အပူအအေး…စတဲ့ခံစားမှုတှကေို….ရငျခုံလှိုကျမောစှာခံစားရငျး…..အောကျကနစေညျးခကျြညီညီ….ညီ လိုကျ..အျောလိုကျ….. ကော့လိုကျ…ကားလိုကျခံနမေိပါတော့တယျ………။ ကမြ ၃ ခါလောကျပီးလို့…ကိုကွီးလီးမှာလဲကမြစောကျ ရဖွေူဖွူပွဈပွဈတှေ…..ပပှေနပေါပီ….ကမြလဲမောဟိုကျတုနျရီနပေီး….တဈကိုယျလုံး….နုနျးခြီလိုကျမောနပေီလေ… “ခြာတိတျ လေး…..လရညျတှလေိုခငျြပီလား”ကိုကွီးက မှနျမှနျလိုးနရေငျးကနလှေမျးမေးလာတော့…ကမြလဲခကျြခငျြးဘဲ…. “လိုခငျြပီ…ကို ကွီး…ဖွူစောကျပတျထဲကို..လရညျတှပေနျးပေးပါတော့…“ “ကိုကွီးဖွူစောကျပတျကို…လိုးရငျးပနျးထညျ့ပေးနျော….“အား….ကို ကွီး………အငျးးးးးး ကိုကွီးကအလဈအငိုကျတိုကျခိုကျလိုကျသလို……ကမြပွောနတေုနျးမှာဘဲ….သူလရညျတှကေို…..ကမြစောကျ ပတျအတှငျးထဲ….ပနျးထညျ့လိုကျသလို….လိုးခကျြတှကေလဲ အငျနဲ့အားနဲ့ပွငျးပွငျးထနျထနျလိုးလိုကျပါတော့တယျရှငျ……….။ကြ မဟာကိုကွီးရဲ့တဈခါနဲ့တဈခါ….မရိုးနိုငျသော…ဆနျးသဈမှုတှေ…….ရငျခုနျထိတျလနျ့မှုတှနေဲ့အတူဖွဈပျေါလာတဲ့….ကာမစိတျကို သဘောကမြိနပေါပီ…။
ကိုကွီးဟာနညျးလမျးတှေ….စိတျကိုဖမျးစားမှုတှဟော…တဈခါနဲ့တဈခါမတူရအောငျ…မမွဲမထငျမှတျထားတဲ့စိတျခံစားမှုတှကေို ပေးနတေုနျးပါဘဲ…….။သာယာမိတာအမှား လားအမှနျလဲမဝခှေဲတတျအောငျပါဘဲ……။ ဒီနကေို့မြိုးအိမျမှာနားတဲ့ရကျဆို တော့…..နလေ့ညျအေးအေးဆေးဆေး…လငျမယားနှဈယောကျအိမျရှမှေ့ာအသုပျစားရငျး….. TV ထိုငျကွညျ့နတောပေါ့…..။ နေ့ လညျ ၁ နာရီလောကျမှာကိုကွီးအိမျကိုရောကျလာတယျ….ထုံးစံအတိုငျး….သူအလုပျတှနေဲ့သူ…စားပှဲမှာအလုပျမြားနတော ပေါ့………..။ ကိုမြိုးလဲဘေးကနကေိုကွီးအလုပျတှကေို ကူလုပျပေးနတောနဲ့…..ကမြလဲ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲလေးဆကျကွညျ့ နလေိုကျပါတယျ………..။ ကမြဇာတျကားသာကွညျ့နရေတယျ……စိတျက ကိုကွီးစီမှာရောကျနတောလေ…..ကမြကိုယျကမြ လဲ….စဉျးစားလို့မရဘူးဖွဈနတေယျ…..ကမြအသကျအရှယျ….ကမြအနေ အထားက…….အခုမကွီးမဝကျသကျပေါကျတယျပွောရ မလား…….ဒုတိယအရှယျရောကျမ….ပထမဝဒေနာကိုခံစားမိတယျပွောရမလား…….ဘယျလိုပွောရမယျမှနျးမသိ တော့ပါဘူး ရှငျ….။ ကိုကွီးနဲ့ကိုမြိုးကတော့…..အလုပျကိုယျစီနဲ့အလုပျမြားနတောပေါ့…..ကိုမြိုးက…ကမြကိုကြောခိုငျးထားပီး….ကိုကွီးက မကျြနှာခငျြးဆိုငျအနအေထားပါ…။
ကမြ….ဇာတျကားကွညျ့လိုကျ….ကိုကွီးကိုလှမျးကွညျ့လိုကျနဲ့…..ဗြာမြားနတေုံး….ကိုကွီးထ လာတာတှလေိုကျတယျ…..ကမြလဲခပျတညျတညျဘဲဇာတျကားကိုအာရုံစိုကျနေ သလို……TV ကိုဘဲမကျြတောငျမခတျကွညျ့နေ တာပေါ့…..ကိုကွီးက….ကမြရှကေ့ စကျတီစားပှဲပျေါတငျထားတဲ့….ဆားငနျစဘေူ့းလေးထဲက….ဆားငနျစလေ့ေးတှကေို…… အသားမြားတဲ့အလုံးလေးတှရှေေးရငျး….ကမြမကျြနှာကိုစိုကျကွညျ့နတော…ကမြ…မကျြလုံးဒေါငျ့ကနမွေငျနရေတယျ…..ခဏနေ တော့….ကိုကွီးလကျထဲကစာရှကျပိုငျးလေး တဈခု….ကမြရငျခှငျထဲပဈပေးပီး…..အလုပျစားပှဲကိုပွနျသှားတယျ….ကမြ…ကိုမြိုးကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့…..ကမြကိုကြောပေးရငျး….အလုပျတှဆေကျလုပျနတေယျ….. ဘာမသိလိုကျပုံမရဘူး…..ကမြလဲကိုကွီး ပဈခသြှားတဲ့စာရှကျပိုငျးလေးကိုအသာပေါငျကွားထဲဖွညျကွညျ့လိုကျတော့……ခြာတိတျ…လှမျးတယျ….အောကျစလှတျပွ……တဲ့။
ကမြ..မကျြလုံးပွူးသှားတယျ….ခကျြခွငျးကိုကွီးကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတော့…ကိုကွီးကအေးအေးဆေးဆေးဘဲ…..ဆားငနျစစေ့ား ရငျးအလုပျလုပျကာ….ကမြကိုလှမျးကွညျ့နေ တယျ…..ကမြဘယျလိုလုပျရမလဲ…..ကမြစောကျဖတျလေးကို….အကွိမျမြားစှာလိုး လိုကျ…..ယကျလိုကျ…..လုပျနတေဲ့ကိုကွီးက……ကမြဟာလေးကိုအောကျစလှတျပွခိုငျး နတော…ထူးဆနျးမနဘေူးလား….. ကမြ ဘယျလိုလုပျရမလဲတှေးနမေိတယျ…….အောကျစလှတျပဲပွရမလား….ဟငျ့အငျးလိုခေါငျးရမျးပွလိုကျရမလား……အောကျစလှတျ ပွတုနျးကိုမြိုးနောကျလှညျ့ ကွညျ့လိုကျရငျကော….အို….ကမြအတှေးမြားစှာနဲ့…..ရငျတှဆေူပှကျနတောပေါ့….အဲဒါကိုကွီးရဲ့ ထူးခွားခကျြပါဘဲ…..ဘယျလိုအခြိနျ…ဘယျလိုပုံစံနဲ့ကမြကို…..အံ့သွ… ထိတျလနျ့….ရငျခုနျစမေလဲဆိုတာမသိနိုငျ အောငျ…..ထူးဆနျးတဲ့ရငျခုနျသံတှပေေးတတျတဲ့သူပါ…..။ ကိုကွီးက…တဈခကျြတဈခကျြ…ကမြကိုလှမျးကွညျ့ရငျး…..သူ့ မကျြလုံးတှကေ…ကမြပေါငျကွားကို…လှမျးကွညျ့လိုကျ…ကမြမကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျနဲ့………… စောငျ့နသေလိုလုပျနေ တော့….ကမြဟာ….နောကျဆုံး…..ကိုမြိုးအခွအေနအေကဲခတျရငျး……ပေါငျလေးတဈခြောငျးကိုထောငျပီး…..ဂါဝနျလေးကို အောကျစလှတျပေး… လိုကျတယျ……ကိုကွီးနရောကနလှေမျးကွညျ့ရငျ…ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျသာတဲ့အနအေထားပါ…..ကမြ အောကျစလှတျပွလိုကျတော့….ကိုကွီးကနှာခေါငျးရှုံ့ရငျး……… ခေါငျးကိုမသိမသာရမျးပွတယျ…ဟုတျတယျလေ….ကမြ အောကျခံဘောငျးဘီကွီးနဲ့ကို….သိတာပေါ့…..ကမြလဲစခငျြစိတျပျေါလာပီး…..ကဲမှတျပလားဆိုတဲ့မကျြနှာပေးနဲ့ ပွုံးစစပွနျကွညျ့ ပလိုကျတယျ……။ကိုကွီးကမကျြနှာရိပျမကျြနှာကဲနဲ့ဘောငျးဘီသှားခြှတျဖို့လုပျပွတော့….ကမြလဲ…..ခေါငျးရမျးပွလိုကျတယျ……။
ကိုကွီးကစားပှဲအောကျ ကနေ…ကမြကို….လကျသီးဆုပျပွတယျ…..ကမြလဲလြှာထုတျပွလိုကျတာပေါ့…..ကိုကွီးတို့အလုပျစားပှဲ ကအမွငျ့….ခါးစားပှဲ…ကမြဆကျတီကအနိမျဆိုတော့………….. စားပှဲအောကျကနကေိုကွီးလုပျပွတာမွငျနရေတာပေါ့….ကိုမြိုး ကနမေမွငျဘူးလေ…..။ကိုကွီးကအလုပျကိုပွနျဆကျလုပျရငျး…..ကမြကိုသှားဖို့မေးငေါ့ပွလိုကျ…….စားပှဲ အောကျက နေ…..လကျသီးထောငျပွလိုကျလုပျနတောကို..ကွညျ့ရငျးရီနမေိတယျ…အဲအခြိနျမှာဘဲကိုကွီးက…..သူ့ပုဆိုးကိုပေါငျရငျးထိလှနျ တငျလိုကျပီး……..စားပှဲ…. အောကျကနေ….လီးကွီးကိုထုတျပွလိုကျတော့….ကမြထိုငျရမလို….ထရတော့မလိုဖွဈသှားတယျ…… ကိုမြိုးမမွငျနိုငျမှနျးသိပမေယျ….ကမြစိတျထဲမှာကိုမြိုးသိသှားရငျ ဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ထိတျလနျ့နမေိတယျ…..ကိုကွီးက….သူ့လီးကွီးကို လကျတဈဖကျနဲ့ပှတျပွရငျး…အပျေါဘကျကတော့အလုပျကိုဟနျမပကျြလုပျနတေယျ………………။
နောကျတော့…ကမြလဲကိုမြိုးမသိနိုငျတာသခြောတော့….ကိုကွီးလီးကွီးကိုငေးကွညျ့နမေိတယျ….ဒီလီးကွီးနဲ့ငါ့ကိုလိုးတာပါ့လား ဆိုတဲ့အသိကလဲ….စိတျကိုထကွှလာ စတေယျလေ…..။ပွောရရငျ….ကမြအလိုးသာခံတာ….ကိုကွီးလီးကို သသေခြောခြာ…..စစေ့စေ့ပျစပျအခုလိုမကွညျ့ဖူးဘူး…..အခုလိုမွငျရတော့စိတျထဲ့ပိုထကွှလာသလို စောကျဖုတျလေးဟာလဲ….မို့ ဖောငျးပီး…အရညျတှစေိမျ့ထှကျလာတယျ….။ ကိုကွီးက လီးကွီကို ဆပျခနဲဆပျခနဲ…..လှုပျပွလိုကျခြိနျမတော့….ကမြစောကျပတျ လေးထဲက စဈခနဲ့စဈခနဲ့….ကငျြသှားပါတယျ……ကမြထိုငျရာကနထေပွီးအခနျးထဲဝငျသှားမိတယျ…..ပီးတော့အောကျခံဘောငျးဘီ လေးကိုခြှတျပီး…..ဂါဝနျလေးကိုသသေပျ….. အောငျပွနျလုပျပီးပွနျထှကျလာခဲ့တယျ…..အခနျးထဲကထှကျလာ ရငျး….ကိုကွီးမကျြနှာကိုလဲ….ရမကျခိုးတှပွေညျ့နတေဲ့ကမြရဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့စိုကျကွညျ့ရငျး……………. စောစောကထိုငျတဲ့နရော ထကျ…ရှပေို့ကပြီး….ကိုကွီးနဲ့ပိုနီးတဲ့ခုံလေးကိုပွောငျးထိုငျလိုကျတယျ……..ကိုကွီးမကျြဝနျးတှဟော….မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့ အရောငျတောကျ နသေလို…..ရီဝပေီးကမြပေါငျဂှကွားကိုစိုကျကွညျ့နတောပေါ့……ကမြပေါငျလေးကိုထောငျပီး….ဂါဝနျအောကျစ လေးကိုလှပျလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ……စောကျပတျလေးဟာ ပေါငျဂှကွားမှာ…….ဟဟလေးပျေါထှကျလာတာပေါ့…..ကမြစောကျ ပတျလေးကိုလကျနဲ့ပှတျပွရငျး…..ကိုကွီးလီးကွီးကိုလဲ….စိုကျကွညျ့နမေိတယျ…….။ကိုကွီးလီးကွီး တဆပျဆပျတောငျနေ သလို…..မကျြလုံးတှကေလဲ…..ကမြစောကျပတျလေးစီကနမေခှာတနျးကွညျ့နတော…..ကမြရငျတှတေဒိုငျးဒိုငျးခုံရငျးတှမွေငျနရေ ပါတော့တယျ….။ကိုကွီးလီးကွီးကိုကွညျ့ရငျး…..ကမြကိုယျ့စောကျပတျလေးကို…ပှတျရတာအရသာတဈမြိုးဘဲ…..ရငျတှလေဲခုနျ သလို…..ဖီးလဲအရမျးတကျတာဘဲ……….။
ကိုကွီးလဲကမြစောကျပတျလေးကိုလှမျးကွညျ့လိုကျ….စားပှဲအောကျကသူလီးကွီးကိုပှတျလိုကျလုပျနတေယျ……ခဏနတေော့ကို ကွီးက….။ “ကိုမြိုး….ငါးကငျသှားဝယျကှာ….စားရအောငျ….ခလေးလဲတခါထဲကွိုလာခဲ့” “ဟုတျဆရာ…သှားလိုကျမယျ”လိုခိုငျး သံကွားလိုကျတယျ….ကမြလဲထောငျထားတဲ့ခွတေောကျကိုအောကျခပြီး….ဇာတျကားကွညျ့နလေိုကျတယျ….။ “ဖွူ…ကိုသားကွို ရငျးငါးကငျသှားဝယျမလို…ဘာမှာအုနျးမလဲ”လိုမေးရငျးသူအပွငျသှားဖိုထလာတာပေါ့….ကမြလဲ….အခုမသူတို့ဖကျလှညျ့ကွညျ့ ဖွဈသလိုပုံစံနဲ့……. “မမှာတော့ဘူး….ငါးကငျကကွာမှာ…သားကိုကွိုတာနောကျကနြအေုနျးမယျ”လိုပွောလိုကျတယျ….။ “မီပါ တယျ….ငါးကငျက ၁ နာရီလောကျကွာတာ…အေးဆေးပါ…အာဆိုသှားပီနျောမိနျးမ..”“ဟုတျကို….ဖွေးဖွမေောငျးနျော….” “အေး ပါစိတျခြ…”လိုပွောရငျးကိုမြိုးထှကျသှားတာ…အိမျပေါကျဝထိလိုကျပို့ရငျးကွညျ့နလေိုကျတယျ…..ကိုမြိုးဆိုငျကယျနဲ့အပွငျကို ထှကျသှားတာသခြောတော့မှ အခနျးထဲပွနျဝငျလာပီး….စောစောကခုံလေးမှာထိုငျဖို့အသှား…..ကိုကွီးက “ခြာတိတျလာ ခဲ့….စောကျပတျယကျခငျြနပေီ…”လိုကိုကွီးလှမျးပွောသံကွားလိုကျတယျဆိုရငျ….တုနျကနဲ့ဖွဈသှားပီး….ကိုကွီးဘကျလှညျ့ကွညျ့ ရငျးသူအနားကို လြှောကျသှားမိတာပေါ့…..။ အနားရောကျတော့….ကိုကွီးကထိုငျနရောကနကေမြကိုမော့ကွညျ့ရငျး…..သူ့လြှာ ကွီးကိုထုတျပွလိုကျတယျ….ပီးတော့ကမြကိုခါးကနသေိုငျးဖကျထားရငျး……. ဖငျသားတှပှေတျလိုကျ….ဂါဝနျပျေါကနစေောကျပတျ လေးကိုပှတျလိုကျလုပျနတေယျ……ကမြမကျြလုံးလေးမှိတျ….ခေါငျးလေးမော့…ပေါငျလေးကားရငျး……… နဈမြောနမေိတာ ပေါ့……
“ခြာတိတျ….ကာဝနျလှနျပေးကှာနျော…”တဲ့… ကမြမတျတပျရပျရငျးကနေ…..ဂါဝနျကိုလှနျပေးလိုကျတယျဆိုရငျဘဲ….ကို ကွီးကထိုငျခုနျပျေါကနအေောကျကိုဆငျးဒူးထောကျထိုငျရငျးကနေ….ကမြစောကျပတျ လေးကိုပှတျသပျရငျး…..ပေါငျတှကေိုနမျး လိုကျ…..ဆီးခုံလေးကိုနမျးလိုကျလုပျနတောပေါ့….ကမြအရမျးဟော့နပေီဆိုတော့…..ပေါငျတှကေိုကားပီးခွဖြေားထောကျ ကာ…..ကိုကွီးခေါငျးကိုကိုငျပွီး…စောကျပတျနဲ့သူမကျြနှာအပျပေးလိုကျတယျ…..ကိုကွီးကမြစောကျပတျလေးကိုဖွဲရငျး….အစေ့ လေးကိုယကျလိုကျ….အကှဲကွောငျး လေးကိုအောကျခွကေနအေထကျထိယကျလိုကျ…..အစလေ့ေးစုပျပေးလိုကျနဲ့….နညျးမြိုးစုံ အောငျသုံးပီးယကျပေးနပေါတော့တယျ…. “အား…အငျး…ကိုကွီး…အားရှီး….အငျး…” ပလပျ….ပလပျ “ရှီး…အား…အငျး…ကို ကွီးရာ…အား….” “အငျး…အ….အ..အငျး….မရ…အ…မရရှီးး….မရတော့ဘူး” “အားးးး…..မရတော့ဘူးကိုကွီး…အ…ဖွူမနနေိုငျ တော့ဘူး…”ကမြတကယျမရတော့ဘူး….ကိုကွီးကိုအောကျစလှတျပွကထဲက….အရမျးဖီးတကျနပေီလေ………. အခုလိုစောကျ ပတျအယကျခံလိုကျရတော့…..အမွငျ့ဆုံးပေါကျကှဲမှုဖွဈပီပေါ့…. “ဘာမရတာလဲခြာတိတျ….ပလပျ”ကိုကွီးက မေးလဲမေး… စောကျပတျကိုလဲသူ့လြှာအပွားလိုကျကွီးနဲ့ယကျတငျလိုကျတော့….ကမြလဲ….. “အား….အလိုးခံခငျြပီ…..ကိုကွီးလိုးပေးတော့… ဖွူစောကျပတျကိုလိုးပေးပါတော့…အား”ကမြပွောလဲပွော…..သူခေါငျးကိုလဲတှနျးလှတျကာ…ကမြနောကျကို ဆုတျပလိုကျ တယျ….ဟုတျတယျကမြ…မရတော့ဘူး…..အရမျးခံခငျြနပေီလေ…..။
ကိုကွီးကထိုငျရာကနထေပီး…ကမြ မကျြနှာလေးကို…မေးက နကေိုငျမော့ နှုတျခမျးတှကေိုမြှငျးပီးစုပျလိုကျတယျ…ပီးတော့မ “မရမျးခံခငျြနပေီလားခြာတိတျ…” “အား….ခံခငျြတယျကှာ…ကို ကွီးရာ…အရမျးအလိုးခံခငျြတယျ…” “အာဆို….အခနျးထဲကိုသှား….ကုတငျပျေါမှာဂါဝနျလေးလှနျပီး…ဖငျကုနျးနဟေုတျပလား” “ဟုတျ….ကုနျးပေးမယျ…ကိုကွီး”ကမြသှားဖို့အလုပျမှာ….လကျကိုဆှဲထားတော့….ကမြသိတယျလေ…ကိုကွီးရဲ့အကငျြ့ကို….. “ကို ကွီးလိုးတာခံဖို့….ဖွူအခနျးထဲကိုသှားမလိုနျောကိုကွီး….ဖွူကိုလာလိုးပေးနျော…ဖွူဖငျကုနျးပီးကိုကွီးလာလိုးတာစောငျ့နေ မယျ”လိုးပွောလိုကျတာပေါ့…… အဲတော့မှကိုကွီးကဆှဲထားတဲ့လကျကိုလှတျရငျး…..ကမြကိုရီဝတေဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့စိုကျကွညျ့နေ တယျ…ကမြလဲခပျသှကျသှကျလေးအခနျးထဲကိုဝငျလိုကျပီး…ကုတငျပျေါတကျ….ဂါဝနျလေးလှနျဖငျလေးကုနျးရငျး…..ကိုကွီးဝငျ လာပီးလိုးမဲ့အခြိနျကို….ရငျခုနျစှာစောငျ့နတောပေါ့….ခဏနတေော့…ကိုကွီးအခနျး ထဲဝငျလာတာသိလိုကျပီး…..ကမြဖငျတှကေို နောကျကနေ…ပှတျသပျရငျးဖငျပေါကျလေးကိုလဲ……လကျနဲ့ဝလုံးဝိုငျးသလိုလုပျပေးနတေယျ….ကမြဖငျကွီး ဟိုရမျးဒီရမျးနဲ့…..ညီး ညူရငျး…..ငနျ့လငျ့စှာစောငျ့စားနတောပေါ့….။
ကိုကွီးကမြဖငျကိုစိတျကွိုကျပှတျသပျပွီး…..ဖငျကွားထဲကနေ…နောကျကိုပွူးထှကျနတေဲ့ကမြစောကျပတျဝလေးကို….သူ့လီးဒဈကွီးတော့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ လီးကွီးရဲ့အနှေးဓါတျဟာ…..စောကျပတျဝကနတေဈကိုယျလုံးကို…လှမျးခွုံသှားသလိုခံစားလိုကျရ တယျ……. ဗွဈ….ဗွဈ…. “အ….အငျးးးးးးး….အား….ဝငျတယျ…ကိုကွီးရာ…အငျး”ကမြဝငျလာတဲ့ကိုကွီးလီးရဲအရသာကို….ခံစား ရငျးပါးစပျကလဲ…အျောဟဈနမေိတယျ………….။ ကိုကွီးက…ကမြဖငျသားကွီးတှကေိုဖွဲရငျး…လီးကွီးကို….အသှငျးအထုတျမှနျ မှနျလုပျရငျး…..စလိုးနပေါပီ….ကမြလဲ…..သူလိုးခကျြတှကေပေးတဲ့…….. အရသာကိုခံစားရငျး…..အသံမြိုးစုံထှကျကာ….ညီညူ နတောပေါ့…. “အား…အငျး…အား…” “……ရှတျ…..ပွှတျ……ဖှတျ……ဖတျ…..” “…….ဖှတျ….ပွှတျ……ပလှတျ…..ဖှတျ….”ကို ကွီးလီးကွီးကို……တဖွညျးဖွညျးခငျြး တထဈခငျြးထညျ့လာလိုကျတာနောကျဆုံး….ကမြစောကျပတျလေးထဲကို အဆုံးကိုရောကျ လာပါတော့တယျ။…ကိုကွီးလီးကကွီးမားတုတျခိုငျရှညျလြှားတော့…အရမျးအရသာရှိပွီး…ခံရတာအပွညျ့အသိပျနဲ့အရမျးကောငျး တယျ… “ အို….ကောငျးလိုကျတာ…..ဆောငျ့ပါ….တအားဆောငျ့ပေးစမျးပါ……..ဆောငျ့ ဆောငျ့…အငျး…….အီး………”လိုကမြညီး ညူရငျး…တောငျးခံနမေီတာပေါ့ “ ဖှတျ…ဖတျ..ဖတျ…ဖုတျ…ဖှတျ…ဖတျ…ဖတျ…ဖှတျ…အငျ့ ဟငျ့ ဟငျ့….” “ အားပါးပါး…ရှီး…” “ကောငျးလားဖွူလေး…ခြာတိတျ…အား..အငျ့အငျ့”ကိုကွီးကအားရပါးရငျစောငျ့လိုးရငျး….ကမြကိုလှမျးမေးလာတယျ “အား… ကောငျးတယျ….ထိတယျကိုကွီး…လိုးကှား….လိုးပါဖွူကို….အား”ကမြကိုလိုးနတောမှနျးသိပမေယျ….ထပျထပျတောငျးခံမိလောကျ အောငျကောငျး နတေော့…ကမြနှုတျကနေ….တတှတျတှတျရရှေတျရငျး…ပွောနမေိတာပေါ့….
“ ဘှပျ….ဘှပျ….ပလှတျ….” “ ဘု…ဗွဈ….” “ အား….ကြှတျကြှတျ..ကြှတျ..” “ ဘု…ဗဈြ…ဗဈြ….”အား…ကမြအရမျးကောငျးနေ ပီ…..ဘယျလိုကောငျးတယျဆိုတာတောငျပွောမပွတတျအောငျပါဘူး….. “ တစောငျးကှေးပွီး လိုးကွရအောငျ…နျောခြာတိတျ”ကို ကွီးကကမြကို…..ဖငျကုနျးလိုးနရေငျးကနပွေောလာတော့…..ကမြလဲ…အငျးလိုတုနျ့ပွနျရငျး……. ကိုကွီးလီးအခြှတျကိုစောငျ့နေ လိုကျတယျ….ကိုကွီးကဖငျသားတှကေိုပှတျနရေငျးကနဖွေေးဖွေးခငျြး…လီးကွီးကိုစောကျပတျထဲကနထေုတျလိုကျတယျ….။ ကြ မတစောငျးလေးကုတငျပျေါအိပျလိုကျတာပေါ့……။ “ဂါဝနျခြှတျလိုကျတော့လခြောတိတျ…အကုနျခြှတျလိုးခငျြတာ…..”ကိုကွီးက တောငျးဆိုလာတော့…ကမြလဲဂါဝနျကိုခြှတျ…ဘရာကိုခြိတျဖွုတျခြှတျပီး…. ကိုယျတုံးလုံးလေး…တစောငျးအိပျလိုကျတယျ……ကို ကွီးက…ကမြနောကျကနေ…..ကပျပီး…ခပျကှေးကှေးလေးအိပျလာတယျ…စတီးဇှနျး(၂)ခြောငျး ထပျထားသလိုပေါ့………ပီး တော့…ကမြဖငျသားအပျေါခမျြးကိုလကျနဲ့ဆှဲဖွဲရငျး….သူလီးကွီးကိုကမြစောကျပတျထဲသှငျးလိုကျတယျ……………….။ ကမြဖငျကို နောကျကော့ပေးရငျး….ဝငျလာတဲ့လီး…အဝငျဖွောငျ့အောငျအလိုကျသငျ့လေးနပေေးလိုကျတာပေါ့………………။လီးကွီးဝငျလာ လိုကျတာ ကမြဖငျကွားထဲကိုကွီးဆီခုနျထိသှားမရပျသှားတယျ…..။ကမြနောကျကနေ…..ကိုကွီးနို့တှကေိုဆှဲရငျး….လိုးစောငျ့ပါ တော့တယျ….စောငျ့ခကျြကလဲ ပွငျးထနျသလို…..ကမြလဲဖငျကိုနောကျပွနျကော့ရငျး…အလိုးခံနမေီတယျ…..ကိုကွီးလီးကွီးရဲထိ ရောကျမှုက….တစောငျးလိုးတဲ့အခါပိုသိသာတယျ… ကမြဖငျသားတှနေဲ့ကော…ပေါငျတှပေါညှပျထားတော့……စောကျပတျထဲကို လီးဝငျထှကျတိုငျး…ပှတျတိုကျမှုအားကပိုသိသာတယျ……။
“ ဗဈြ….ဘု ဘု…ဘှပျ..” “ အား…ကြှတျကြှတျ….ဟငျ့…” “ခြာတိတျ…ပီးမယျ….အား…နျော…အ….အ..” “အငျး…ပီးလိုကျတော့… အား….ကိုကွီးလရတှေေ…လိုးပီးဖွူစောကျပတျထဲပနျးထညျ့ပေးပါ…အား…”ကမြအျောဟဈနတေုနျးမှာပဲ……………….။ “အငျး..အား…ရော့ခြာတိတျ…ကိုကွီးလရတှေယေူ…အငျ့…အား…အငျ့” “အား…အ…အား…ကိုကွီးအားးးး” ကိုကွီးလရတှေေ ဟာ…အရှိနျအဟုနျနဲ့ကမြစောကျပတျထဲပနျးထညျ့လိုကျတာ…နှေးကနဲ့ဖွဈသှားရငျး…..ကမြလဲဟိုးအမွငျ့ကွီးကပွုကလြာသလို… ရငျထဲအေးကနဲ့ဖွဈကာ….အဆုံးအစှနျဆုံးပီးမွောကျသှားပါတော့တယျ….ရှငျ….။
ဒုတိယအရွယ်၏ ပထမဝေဒနာ ( စ / ဆုံး )
ကျနော်နာမည်က ကိုကိုကြီး…..အသက် ၄၀ အိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်…..အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာ….သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်….. လက်ရှိလုံခြုံရေးကင်းတစ်ခုရဲ ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကျနော်နေတဲ့မြို့လေးကသိပ်မကြီးတော့….ကင်းစခန်းတခုလုံးမှာလူ ၂၀ လောက်ဘဲရှိတယ်လေ……..တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့ကင်းစခန်းကို နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်သည်မိသားစု တစ်ခုပြောင်း လာတယ်………..အဲမှာကျနော်ဘဝရဲ့ပထမဝေဒနာစတော့တာပေါ့…… ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုနေအိမ်လိုင်းခန်းချပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်တာနဲ့…ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကို တစ်ခန်းခွဲပေးလိုက်တယ်…….နယ်ကင်းစခန်းဆိုတော့လိုင်းခန်းလဲပေါ ပေါများများမရှိဘူးလေ…………. ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကလဲ…ကင်းစခန်းဘေးကပ်လျှက်….ကျနော်ရုံးကိစ္စလုပ်ဖို့နဲ့အနားယူဖို ယူထားတာပါ.. ကျနော်က မြို့ထဲမှာအိမ်ရှိတယ်……ကင်းစခန်းထဲမှာက နေ့ဘက်လောက်ပဲနေတာများတယ်လေ……………. အသစ်ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုတစ်ခြမ်းခွဲပေးပြီး…ကျနော်ကတစ်ခြမ်းနေလိုက်တယ်………………………..။
ကျမနာမည်ကဖြူစင်ပါ…..အားလုံးကမဖြူလို့ဘဲခေါ်ကြတယ်လေ……….ကျမအမျိုးသားက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း မြန်မာပြည်အနံ့ ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူပေါ့….ကျမတို့မှာသားသမီး ၂ ယောက်ရှိပီး…သမီးအကြီးက သူအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ရန်ကုန် မှာနေတယ်….သားအငယ် ကတော့ကျမတို့နဲ့အမြဲလိုက်နေတယ်လေ….သူကအခုမ (၅)တန်း ကျမတို့ဒီမြို့လေးကိုပြောင်းလာ တော့….ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)က လိုင်းခန်းမရှိလို့သူယူထားတဲ့အခန်းကိုတစ်ခန်းခွဲပေးတယ် ကျမတိုကမိသားစု ၃ ယောက်ထဲဆို တော့…အဆင်ပြေတယ်လေ…သူကလဲအိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူ….ညဘက်မြို့ထဲကအိမ်မှာ အိပ်တာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လေ….. ကျမအကြောင်းပြောရရင်…ကျမတို့လင်မယားက…သားလေးမွေးပီးကတည်းက နောက်သားသမီးမရအောင်…..လိင်ဆက်ဆံ တိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးရင်သုံး….မဟုတ်ရင်အပြင်ကိုထုတ်ပစ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ထားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကျမက..တားဆေးတွေ နဲ့မတည်လို့….နောက်ပီး ပစ္စည်းထည့်ရမှာလဲကြောက်လို့….အဲလိုနေလာတာ…. သားလေးတစ်သက်လို့ပြောလို့ရတယ်……….
ကျမတို့ဒီကိုပြောင်းလာပီး…ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)ကအစစအရာရာ ကူညီတယ်…ကျမအမျိုးသားကိုလဲနေရာပေးတယ်…… ပြော ရရင်တော့…သူကကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရမလိုပေါ့နော်…..လိုင်းခန်းတစ်ခုထဲမှာအတူနေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေထက် ကျမ တို့ကပိုရင်းနှီးတယ်ပြောရမှာပေါ့…….. ဖြူလေးတို့မိသားစုရောက်လာပီး…..ကျနော်အရင်လိုမပျင်းတော့ဘူးပြောရမှာ ဘဲ….ဖြူ လေးနဲ့နေ့ဘက်တွေမှာအတူနေရတာ သူလုပ်ပေးတဲ့ လဘက်ရည်သောက်လိုက်….အသုပ်လေးတွေစားလိုက်နဲ့…တော်တော် ရင်းနှီးလာတယ်…သူကလဲကိုကြီး…ကိုကြီးနဲ့ သူယောကျာင်္းကလဲကျနော်နေရာပေးထားတော့…ပိုဂရုစိုက်တာလဲပါမှာပေါ့…….ဖြူ လေးက သာမာန်ပါဘဲ…မျက်နှာလေးကချောချော ရင်သားကြီးကြီးနဲ့….တင်တော့ပြားတယ်…..ကလေး ၂ ယောက်အမေဆိုပေ မယ့်….ပြုပြုပြင်ပြင်နေတော့….ကြည့်လိုကောင်းတယ်..ဝတ်တာစားတာကလဲ ဆက်ဆီ ကျတယ်….ဘောင်းဘီအပျော့တွေ….ဂါဝန် တွေအမြဲဝတ်တတ်တယ်…သူများတွေလို ထမီတွေဘာတွေ မဝတ်တော့….အမြင်ပိုဆန်းတယ်ပြောရမှာဘဲ….ရင်းနှီးရာက နေ….စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်………….. ဘာလိုလဲဆိုတော့….ဖြူလေးဘောင်းဘီနဲ့ထိုင်နေရင်……..သူ့ဂွ ဆုံကိုကျနော်ကြည့်မိသလို…..ရင်သားကြီးတော့….အစ်ထွက်နေတဲ့ ဖြူလေးရဲရင်သားတွေကိုလဲ အမြဲကြည့်ကြည့်ပီးဖီးတက်လာ တယ်…….ကျနော်ကပြည်နယ်ရုံးကိုခဏခဏသွားရတော့…ပြည်နယ်က ပြန်လာတိုင်းဖြူလေးတို့သားအမိအတွက်…အဝတ်အစား တွေဝယ်ဝယ်လာတတ်တော့…ကျနော်သွားတိုင်းဖြူလေးက……တခုခုမှာ တတ်တာအကျင့်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ……..ကျနော်ဝယ် လာတိုင်းသူနဲ့မတော်တာ…မကိုက်တာကခပ်များများ…..ဆိုတော့သူအတိုင်း အထွာတွေကို ကျနော်ကိုပြောပြောမှာတတ် တယ်……..ကျနော်ဖောက်ပြန်နေတာဖြူလေးကမသိပေမယ်……ကျနော်စိတ်ကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ဖြူလေးကိုသိမ်းပိုက်ချင် စိတ်ပိုလာတာကျနော်သိတယ်….
အပိုင်း(၂)ကျနော်…ကိုကိုကြီး.. ကျနော်ဖြူလေးကိုဘယ်လိုကြံရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းက…တစ်နေ့ကျနော်ပြည်နယ်ကိုမနက်ဖြန် သွားရမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ ဖြူလေးအမျိုးသားကို…တောဘက်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျနော်ခိုင်းလိုက်တယ်……….အိမ်မှာဖြူလေးနဲ့ ကျနော်ဘဲကျန်ခဲ့တယ်……….. နေ့ဘက်ကျနော်က ဖြူလေးတို့နဲ့လိုင်းခန်းတခုထဲအတူနေတာဆိုတော့….သူယောကျာင်္းမရှိလဲသိပ် တော့မထူးဘူးပေါ့…………………. ခဏနေတော့ကျနော်လဲ……..အပြင်ထွက်ပြီးမြို့ထဲကကျနော်အိမ်ကိုပြန်….ကိုကာကိုလာတစ် ဘူးယူပြီး….ဆေးထိုးအပ်နဲ့အထဲကို….. လိင်စိတ်ကြွဆေးထည့်လိုက်တယ်….ပီးတော့ပေါက်ကိုဖယောင်းနဲ့ပိတ်ပြီး….လိုင်းခန်းကို ပြန်လာခဲ့တယ်……………………………… ကျနော်လိုင်းခန်းရောက်တော့ဖြူလေးကရေမိုးခြိုးပီးအလှတွေပြင်လို့…..သူ့ထုံးစံ အတိုင်း…အောက်ကစပန့်ဘောင်းဘီရှည်ပျော့လေးနဲ့ လှနေတယ်…ကျနော်လဲယူလာတဲ့အအေးဘူးကိုလှမ်းပေးပီး….. “ဖြူလေး ရေ…..ဒီမှာအအေးဖြူဖို့ယူလာတာသောက်လိုက်အုန်း” “အော်ကိုကြီးကလဲ…..ဟုတ်ဟုတ်” ဖြူလေးအအေးဘူးကို…သောက် ရင်း….TV ထိုင်ကြည့်နေတယ်…ကျနော်လဲဆေးတန်ခိုးပြမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်း…..ရုံးကိစ္စတွေလုပ် နေတာပေါ့…… ခဏနေတော့ ဖြူလေးချွေးဆေးလေးတွေထွက်ပြီး…..ပေါင်တွေလိမ်လိုက်ကားလိုက်လုပ်နေတာမြင်ရတော့…ကျနော်စဖိုအချိန်ဆိုတာ သိလိုက် တယ်………
“ဖြူလေး….ကိုကြီးမနက်ဖြန်ပြည်နယ်ရုံးသွားမှာ…ဖြူလေးဖို့ဘောင်းဘီဝယ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပလား” “နေပါစေကိုကြီး…အားနာစရာ” “ဘာအားနာရမှာလဲဖြူလေးကလဲ…..ဖြူလေးအရှည်ဘယ်လောက်ဆိုတာပြောလိုက်အုန်း” “ဟိုတခါလိုမကိုက်ဘဲနေအုန်းမယ်” “ကိုကြီးဘာသာတိုင်းသွားတော့……”လို့ပြောတာနဲ့ကျနော်လဲ…အလုပ်လုပ်နေရာကနေထပြီး…..ဖြူလေးထိုင်နေတဲ့နေရာကို သွားလိုက်တယ်… “ထဖြူလေးဟုတ်တယ်တိုင်းသွားမဖြစ်မှာ….တော်ကြာဟိုတခါလို…မကိုက်ဘဲနေလိမ့်မယ်”လိုပြောပီး….ဖြူ လေးကိုပခုန်းလေးနှစ်ဖက်ကိုင်ပြီး ထူလိုက်တယ်….ဖြူလေးအလိုက်သင့်မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့မှ…ကျနော်လဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ် ပီး…… “မှန်းဘယ်လိုတိုင်းသွားရမလဲ….နေအုန်းအောက်ကနေကိုကြီးတောင်ကြည့်မယ်နော်ဖြူလေး” “ရှင်….” “အော် တစ် ထောင်နဲ့ဘယ်နှစ်တောင်ဆိုတာကိုပြောတာ” “အော်ဟုတ်ကိုကြီး”ဆိုပြီး ဖြူလေးက မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ကြည့်နေ တုန်း…..ကျနော်လဲထိုင်လိုက်ပြီး ဖြူလေးခြေတောက်ကနေ အထက်ကို တစ်တောင်၊ နှစ်တောင်ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသူပေါင်လေးတွေ ကို..ကိုင်ရင်းလုပ်နေတော့….ဖြူလေးတုန်ကနဲဖြစ်ပီး….ညိမ်နေတာနဲ့ “ဖြူလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်…”လို့ပြောလိုက်တော့….သူလဲ ဆေးအရှိန်နဲ့ပေါင်းနေတော့…..ဘာမပြောဘဲလှည့်ပေးတယ်….ကျနော်လဲအစ ကနေပြန်ပြီး….တစ်တောင်၊နှစ်တောင်ဆိုပြီးတိုင်း ရင်း…ဖြူလေးဖင်သားလေးတွေကို…ရဲရဲတင်းတင်းကိုင်လိုက်တယ်…………………….
“အ…ကိုကြီး….ဟို”…..ဖြူလေးတစ်ခုခုပြောဖိုလှည့်အလာ…ကျနော်လဲမတ်တပ်ရပ်ပီး….လှည့်လာတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုမေးကနေ ကိုင်ပီး နှုတ်ခမ်းတွေကိုငုံစုပ်လိုက်တာပေါ့…………….. ကျမတို့ဒီမြို့လေးကိုရောက်ပီး….ကိုကြီးနဲ့တွေရတာ..ဘုရားမတယ်ပဲ ပြောရမလိုဘဲ….အစစအရာရာအကူအညီရသလို…… ကျမယောကျာင်္းလဲနေရာရတယ်လေ……ပီးတော့…..ကိုကြီးက ကျမတို့သားအမိ ကို…ဂရုစိုက်တယ်….သူလဲအိမ်ထောင်ကွဲမိသားစုရှိဖူးတော့ သားလေးကိုလဲ…..သူသားလိုချစ်ရှာတယ်…..သူပြည်နယ်ရုံးကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတိုင်း….ကျမတို့သားအမိအတွက်…တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု… ဝယ်ဝယ်လာတတ်တယ်…….ဒီနေ့လဲသူပြန်နယ်ရုံး သွားဖို့အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့…..တောဘက်ကိုကျမယောကျာင်္းတစ်ယောက်ထဲလွတ်လိုက် ရတယ်….အိမ်မှာသူနဲ့ကျမဘဲကျန်ခဲ့တာ ပေါ့……ခဏနေတော့ကိုကြီးအပြင်ထွက်သွားတာနဲ့….ကျမလဲရေမိုးချိုးပီး…..အဝတ်အစားလဲ…. အိမ်ရှေ့မှာ TV ထိုင်ကြည့်နေ လိုက်တယ်….ခဏနေတော့…ကိုကြီးပြန်လာပီး…ကျမဖို့ကျမကြိုက်တဲ့အအေးဝယ်လာတာတွေတယ်…….. သူတိုက်တဲ့အအေး သောက်ပီး….ကျမစိတ်တွေဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူး…..တစ်မျိုးကြီးဘဲ…တစ်ကိုယ်လုံးလဲဖိန်းခနဲရှိန်းခနဲ့နဲ့…………..။။
အဲလိုဖြစ်နေတုန်းကိုကြီးက….ကျမဖို့ဘောင်းဘီဝယ်ဖို့အရှည်တိုင်းမယ်ဆိုပီး……..နောက်ကနေထိုင်….သူလက်ကြီးနဲ့တစ်တောင် နှစ်တောင် တိုင်းရင်း…ကျမတင်သားတွေကိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ….ကျမဟိုးအမြင့်ကြီးကိုရောက်သွားသလိုဖြစ်ပီး…..သူ့ကိုတားဖို အလှည့်….သူကထရပ်ပီး ကျမမေးကနေကိုင်ပီး…နှုတ်ခမ်းတွေငုံစုပ်လိုက်တော့…လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြန်သွားသလိုကျမခံစား လိုက်ရတာပါဘဲရှင်……။ ဖြူလေးနှုတ်ခမ်းတွေကိုငုံစုပ်ရင်း……ကျနော်ဒူးကွေးလိုက်တယ်….ပီးတော့ဖြူလေးနဲ့စပန်ဘောင်းဘီး အပျော့လေးဝတ်ထားတဲ့ ဖင်ကြားလေးထဲကို….နောက်ကနေကျနော့လီးကြီးထောက်ပေးထားလိုက်ရင်း………..ဖြူလေးနို့တွေ ကို….ဖြစ်ညစ်ရင်းအနမ်းရှည်းကြီးပေး နေတာပေါ့….ဖြူလေးဘာမပြန်မပြောနိုင်ဘဲ…ခေါင်းလေးနောက်လည်ပြန်ရင်း….ဖင်လေး ကိုနောက်ကောက်ပေးလာတာတွေလိုက်ရတယ်… ကျနော်စိတ်တွေအရမ်းဟော့လာတော့….ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပီး…လီးကြီးကို ထုတ်ကိုင်….ဖြူလေးဖင်သားလေးနှစ်ခြမ်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ဖြဲပီး… လီးကြီးကိုထောက်ထားလိုက်တယ်…… “အ….အင်းးးးး…..” ဖြူလေးမပိမသအသံများသာထွက်ရင်း……ဖင်လေးကိုကော့ကော့ပေးနေတာပေါ့…..စပန့်သားဘောင်းဘီအပျော့လေးဆိုတော့… ဖင်သား တွေရဲ့နူးညံ့မှုကိုအပြည့်အဝခံစားနေရသလို….ဖြူလေးလဲကျနော်လီးအနွေးဓါတ်ကိုသိနေပီလေ…..ကျနော်ဖြူလေးဖင် သားတွေကိုကိုင်ဖြဲ ထားရာကနေလက်တွေကိုရှေ့ဖက်ပို့ပြီး……….ဖြူလေးစောက်ပတ်ကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်ပေးလိုက် တော့….ဖြူလေးဒူးတွေညွတ်မလို ဖြစ်သွားတယ်….. ကျနော်ထိန်းကိုင်ရင်းဖြူလေးကို….သူတို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းထဲ….နမ်း ရင်း…ပွတ်ရင်း…တွန်းရင်းခေါ်သွားလိုက်တယ်.
အခန်းထဲကုတင်နားရောက်တော့ဖြူလေးကိုအသာ….တွန်းပြီးကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ်…..ဖြူလေးကုတင်ပေါ်အပေါ်ပိုင်း မှောက်ရင်း….. မှိန်းနေတုန်း…..ကျနော်နောက်ကနေထိုင်ပြီးဘောင်းဘီလေးကိုစွဲချွတ်လိုက်တယ်…..။ “ကိုကြီး…ကိုကြီး…ဖြူ လေ….” “ဖြူလေး…ချာတိတ်..ကိုကြီးကိုခွင့်လွတ်ကွာ…ကိုကြီးဖြူလေးကိုချစ်နေတာကြာပီ့….”လိုပြောရင်း……..ဖြူလေးဖင် ကြားလေးထဲကနေနောက်ကိုပြူထွက်နေတဲ့….စောက်ဖုတ်လေးကို…လှမ်းယက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ဖြူလေး အားလိုအော် ရင်စကားလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပေါ့….။ ကျနော်ဖြူလေးရဲဖင်ကိုဖြဲရင်း…..ကြားထဲကပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်လေး ကိုစိတ်ကြိုက်ယက်လိုက်……အပေါက်လေးထဲကိုလျှာချွန်ပြီးကလိလိုက်လုပ် နေရာကနေအသာရပ်ပီး….ကျနော်လီးကြီးကိုဖြူ လေးစောက်ပတ်ဝလေးတေ့ကာ…အသာဒစ်ကလေးစသွင်းလိုက်တယ်…..။“အား…ရှီး……ကိုကြီး…အ…အ..” “ဖြူလေးရယ်… ချာတိတ်ရာ…..”ကျနော်သူနာမည်ကိုတတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း…..နောက်ကနေဖြူလေးဖင်သားလေးတွေပွတ်သပ်ချော့မြှူ ရင်း………….. အသွင်းအထုတ်လုပ်ကာလီးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်…… “အား….ကြပ်တယ်…..အား…”
ကျမ …..ကိုကြီးရဲအပြုအစုအယုအယတွေအောက်မှာနစ်မြောရင်း….အိမ်ခန်းထဲကကျမတို့လင်မယားအိပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်ကို…… မှောက်ရက်ကလေး ရောက်သွားတော့တယ်……အပေါ်ပိုင်းက…ကုတင်ပေါ်မှောက်နေပီး….အောက်ပိုင်းကတော့…ကုတင်အောက် မှာ….အဲအချိန်မှာဘဲကိုကြီးက…ကျမ….. စပန့်သားဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ရင်း…ကျမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ..ပြောရင်း…….ကျ မဖင်သားလေးတွေကို…ကိုင်ဖြဲကာ…..သူ့လျှာကြီးနဲ့ကျမဟာလေးကိုနောက်ကနေလှမ်းယက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာ……..ရင်ထဲဗျော င်းဆန်ခတ်ကာ……မွေ့ယာခင်းကိုလက်တွေနဲ့စုပ်ကိုင်ရင်းးးး….ဖင်လေးကိုနောက်ကော့ပေး မိတော့တယ်…..အိမ်ထောင်သက် တွေကြာပေမယ့်…ကျမယောကျာင်္းကအဲလိုတွေမလုပ်တတ်သလို……သူဆန္ဒရှိတဲ့အခါ…အပေါ်ကနေတက်လုပ်ရင်း…. ပီးခါနီးရင်အပြင်ထုတ်ပီးလိုက်တာကများတယ်….အခုလိုလျှာနဲ့ယက်ပေးတယ်ဆိုတာ…..ပြော သံတွေ….နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေထဲမှာတွေဖူးမြင်ဖူးပေမယ် တကယ်ခံစားတဲ့အခါ….ဒီလောက်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မထားမိ ဘူးလေ……ခဏနေတော့….ကိုကြီးမတ်တပ်ရပ်လိုက်တာသထိထားမီတယ်…………. ကျမအရမ်းလိုချင်နေပီဆိုတာ….ဝန်ခံရမှာ ဘဲ…..သူကျမကိုလိုးတော့မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်….ကျမ…တားမြစ်ဖို့ခွန်အားမဲ့နေတာသိတယ်………………..။
ကိုကြီးသူ့လီးကြီးကို…ကျမဖင်ကြားကနေပြူထွက်နေတဲ့စောက်ပဝလေးကိုထောက်လိုက်တယ်….ပီးတော့စလိုးပါတော့ တယ်….ကိုကြီးလီးဟာကျမယောကျာင်္း လီးထက်…တော်တော်ပိုကြီးတာ…ကျမဖင်ကြားကိုဘောင်းဘီပေါ်ကထောက်ကထဲကသိ တယ်….ဒါပေမယ်…စောက်ပတ်ထဲဝင်လာတော့…..ကျမထင်တာထက် ပိုကြီးတာ….သိလာရယ်…အရမ်းကြပ်ပီး…..ပြည့်သိပ်နေတာခံစားရယ်လေ….။ ကျနော်ဖြူလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးရင်းကနေ…..လီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့……ခပ်သွက်သွက် လေးလိုးရင်း…ဖြူလေးဖင်ကိုဖြဲကာ အဆုံးထိတစ်ရစ်ချင်းထည့်လိုက်တယ်…. “အား….ဖြေးဖြေးကိုကြီး…အရမ်းကြပ်တယ်..” “ဖြူလေးပေါင်ကားလိုက်…နော်ချာတိတ်….အားဖြူလေးစောက်ပတ်က…အရမ်းကြပ်တာဘဲကွာ….” ကျနော်ဖြူလေးကိုပေါင်ကား ဖိုပြောရင်း….ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဖြူလေးပေါင်တွေကိုဆွဲကားပေးလိုက်တယ်…ဖြူလေးလဲအလိုက်သင့်ကားရင်း..ခြေဖြားလေး ထောက်ပီးဖင်ကိုအပေါ်ကော့ပေးလာတော့…လိုးရတာပိုအဆင်ပြေပီး…အဝင်ချောလာတယ်…ဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲက လဲ….စောက်ရည်တွေထွက်နေ ပီဆိုတော့…..တအားကြပ်မနေတော့ဘဲ…အဝင်အထွက်ချောလာတာနဲ့…ကျနော်လဲအဆုံးထိထည့် ပေးလိုက်တယ်….. “အား…အထဲကိုထိတယ်…ကိုကြီး…အားအောင့်တယ်…” ဖြူလေးအတွင်းသားအိပ်ကိုထိပုံရတယ်….ဖြူလေး ကအရပ်ပုတော့….သားအိပ်နိမ့်ပုံရတယ်…ကျနော်လဲလီးထိပ်ကိုတစ်ခုခုထိမှန်းသိတယ်ကျင်ကနဲ့နေ သွားတာကို…ဒါနဲ့ဖြေးဖြေး လေးအသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းကနေ…ဖြူလေးအင်္ကျီကိုချွတ်ရင်း….နောက်ကနေဘော်လီချိတ်တွေဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်…..
အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့မှောက်ခုံလေးအလိုးခံနေတဲ့ဖြူလေးကို….အသာမပြီးသူနိုတွေကိုနောက်ကနေလှမ်းချေပေးလိုက်တယ်……. ဗွ တ်….ဗွတ်….အ….အင့်အင့်…အား…အ…အ….. ဖြူလေးစီက…ဘာမှန်းမသိရတဲ့အသံတွေထွက်ရင်း…ကျနော့်လိုးချက်တွေကိုခံနေ ရှာတယ်….။ “ဖြူလေး….အား…ကိုကြီးပီးတော့မယ်နော်…” “အား….အပြင်ထုတ်နော်ကိုကြီး…ဖြူ….ဆေးလဲမစားဘူး…ထိုးလဲ မထိုးထားဘူး” “ဖြူစိတ်ချ…ကိုကြီးကသားကြောဖြတ်ထားတာ….စိတ်မပူနဲ့နော်ဖြူလေး” “အား…ဖြူကြောက်တယ်နော်ကို ကြီး…” “စိတ်ချပါ…ဖြူဗိုက်မကြီးစေရဘူး…ကိုကြီးသားကြောဖြတ်ထားတာ”ပြောရင်းအဆက်မပြတ်ကျနော်လိုးနေမိတယ်….ဖြူ လေးလဲစိတ်ထနေပီဆိုတော့… ဖင်ကိုနောက်ကော့ရင်း….ပြန်စောင့်စောင့်ပေးနေတယ်… “ဖြူလေး….အား…ကောင်းလိုက်တာ ကွာ” “ကိုကြီး…နဲနဲစောင့်ပေး…ဖြူထွက်ချင်ပီး…အ..အား…ဟုတ်တယ်…စောင့်ကိုကြီးအား…အ” “ကိုလဲပီးပီ…အား…”ပြောရင်း ကျနော်သုတ်ရည်တွေကိုဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲ….ပန်းထည့်လိုက်မိတယ်……..။ ကိုကြီး….လိုးလာလိုက်တာ…သူ့လီးကြီးကျမထဲ အဆုံးဝင်တဲ့အထိပေါ့…..သူလီးကရှည်လဲရှည်တော့ကျမသားအိမ်ကိုထောက်မိတယ်…ကျင်ပီး အောင့်သွားတာဘဲ…ကျမပြော လိုက်တော့မ…သူနဲနဲလျော့သွားတယ်…..ကိုကြီးပီးတော့မယ်ဆိုတော့မ…ကျမလန့်သွားတယ်….ကျမကဆေးမတည့် ဘူးလေ… ဆေးလဲမစား…ထိုးလဲမထိုးတော့…ကိုကြီးကိုအပြင်မှာပီးဖို့ပြောလိုက်တယ်…ကိုကြီးကသားကြောဖြတ်ထားတယ်တဲ့…..ကျမလဲနဲနဲ တော့ စိတ်အေးသွားတယ်…..နောက်ဆုံးကိုကြီးပီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုကြီးကိုဆွဲလမ်းသွားတယ်ဆိုတာဝန်ခံရမလို ဘဲ………….။
ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကိုကြီးလရည်တွေကျမစောက်ပတ်ထဲကို…အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ပန်းထည့်လိုက်တဲ့အရသာဟာ……ဘာနဲ့မ လဲနိုင်အောင်ပါဘဲ… ကျမအဲလိုအပန်းမခံရတာ..နှစ်တွေအေတော်ကြာခဲ့ပီလေ…….အဲလိုပန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအပြည့်အဝပီး သွားတာကို…ပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားလိုက်ရတယ်..။ “အားဖြူလေးရယ်…” ကိုကြီးကျမအပေါ်မှောက်ရက်လေးထပ်ကျလာ ရင်း….သူလီးကြီးတပ်ရက်မှီန်းနေတယ်…..။ “ထတော့ကိုကြီး….တစ်ယောက်မြင်သွားလိမ့်မယ်” အစကတဏှာစိတ်မွန်နေပေ မယ်…အခုတော့လန့်ရမှန်းကျမသိသွားတယ်…ကိုကြီးလဲချက်ချင်းထပြီးပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်တယ်…………..။ကျမလဲဘောင်းဘီပြန် ဝတ် အကျီင်္ပြန်ဝတ်ပီး…..ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေလိုက်တယ်…ကိုကြီးကတော့အပြင်ထွက်သွားပီး…အိမ်ရှေ့ခန်းကသူအလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်နေတယ်…………။ကိုကြီးနဲ့ကျမအခုလိုဖြစ်ပီး…..မျက်နှာပူတာနဲ့ကျမလဲရှောင်နေလိုက်တယ်……သူပြည်နယ်ရုံးကပြန်လာ ပီး….ကျမအတွက်ဘောင်းဘီအရှည်အတိုတွေ……. အကျီင်္တွေအစုံဝယ်လာသလို…..သားလေးအတွက်လဲကစားစရာနဲ့…မုန့်တွေ ဝယ်လာတယ်……ပီးတော့အိမ်ရှေ့မှာထားပီးပြန်ထွက်သွားတယ်…….ကျမအမျိုးသားနဲ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်းစကားပြော….အလုပ် အတူလုပ်နဲ့…..သူမဟုတ်သလိုဘဲ….ကျမလဲနှစ်ရက်လောက်ရှိတော့….ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားပီးမျက်နှာပူတာရှန့်တာမရှိတော့ ဘူး…….
ဒီနေ့ထုံးစံအတိုင်းကျမနေ့လည်ရေမိုးချိုးအဝတ်အစားလဲပီးချိန်ကိုကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်…..သူရုံးအလုပ်တွေထိုင်လုပ်နေတာ ပေါ့…..ကျမယောကျာင်္းကတော့မြို့ထဲကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့……ကျမအခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာပေါ့တေးဘဲလ်လေး နဲ့ ကိုရီးယားကားကြည့်နေတုန်း….ဖုန်းမည်လာတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့……….. ဖုန်းနံပါတ်က ကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်း…..ဘယ်ကဖုန်းလဲ ဆိုပီးကိုင်လိုက်တာပေါ့… “ဟလို….ပြောပါရှင်” “ချာတိတ်…ကိုကြီးပါ…..” ကျမရင်ထဲထိတ်ကနဲ့ဖြစ်သွားသလို…….လက်တွေလဲ တုန်နေတာပေါ့…..ကိုကြီးဖုန်းဆက်လာလိမ့်မယ်လိုလဲမထင်ဘူးလေ………………………………………………….။ “ဟုတ်….ပြော ပါ…” “စိတ်ဆိုးတုန်းလားဟင်..ချာတိတ်” “မဆိုးပါဘူး….”ကျမဒီစကားလုံးဘယ်လိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာ….ကိုယ်တိုင်မသိလိုက် ဘဲ….အလိုလိုထွက်သွားတယ်…..။ “ဝမ်းသာလိုက်တာချာတိတ်ရာ….အပြင်ထွက်ခဲ့ပါ့လားဟင်…” “အာကိုကြီးကလဲ….ဘာလုပ်ဖို လဲ” “မျက်နှာလေးမြင်ချင်လိုပါကွာနော်…ထွက်ခဲ့နော်ချာတိတ်”ဆိုပီးဖုန်းချသွားတယ်…..ကျမလဲထွက်ရမလား…..မထွက်ရမလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေသလို…..ရင်တွေလဲခုန်နေတယ်။ ထွက်လိုက်ရင်….ငါ့ကိုသူတစ်ခုခုလုပ်မှာလား….အို…ကျမစိတ်တွေဟိုပြေးဒီလွှား နဲ့…….အကြောင်းမဲ့လက်တွေချိုးရင်းစဉ်းစားနေတာပေါ့………..။
အဲချိန်မှာဘဲ……ကျမအခန်းရဲ့ခန်းစည်းလိုက်ကာလေးလှုပ်သွားတာမြင်လိုက်ရသလို…..အပေါက်ဝမှာကိုကြီးမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရ တယ်….ကျမလဲရင်တွေတုန်လွန်းလို……. ကုတင်ပေါ်ကနေချက်ချင်းထထိုင်လိုက်မိတယ်… “ကိုကြီး….အခန်းထဲမဝင် နဲ့….တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားရင်အကုန်ခက်ကုန်မယ်နော်…” “ဒါဆိုချာတိတ်ထွက်လာခဲ့လေ”တဲ့….ကျမလဲမထွက်ရင်သူဝင် လာမယ်ဆိုတာသိနေတော….ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပီး…..အိမ်ရှေ့သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့စားပွဲနားကိုသွားထိုင်လိုက် ရင်းကနေ…. “ပြော….ဘာပြောမလို့လဲ”လို့မေးလိုက်ရင်ဘဲကိုကြီးက….ကျမကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီး……မျက်နှာလေးကိုမေးကကိုင်မော့ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းလိုက်တယ်……ကျမတိမ်တွေပေါ်ရောက်သွားသလို….အမြင်ကြီးကပြုတ်ကျသလို….အိုးးးးးး……ခံစားမှုအနိမ့် အမြင့်အစုံနဲ့နစ်မျောနေတာပေါ့….ကိုကြီးလက်တွေကလဲ….ကျမရဲနို့တွေကိုအကျီင်္ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ချေမွနေတယ်…..ပီးတော့ လက်တွေကအောက်ကိုဆင်းသွားပီး….ကျမဂါဝန်ပေါ်ကနေ….ဖင်သားတွေကိုဖြစ်လိုက်…ပေါင်တွေကိုပွတ်လိုက်နဲ့…….ကျမကို ပြုစားနေ တာပေါ့…..။
“အား…ကိုကြီး…တော်ပါတော့…တော်ကြာကိုမျိုးပြန်လာလိမ့်မယ်” “မလာသေးပါဘူးချာတိတ်ရာ….သူကလေးကျောင်းတစ်ခါထဲ ကြိုခဲ့မယ်တဲ့…ကိုကြီးကိုပြောသွားတယ်” “အားးးး…မလာလဲတော်ပါတော့နော်” “ချစ်လိုပါချာတိတ်ရယ်…ကိုကြီးကိုခွင့်ပြုပါ နော်….ခဏလေးပါ”………ကိုကြီးကပြောလဲပြော….လက်ကလဲကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဂါဝန်ပေါ်ကနေပွတ်ပေးနေတာပေါ့…….။ ကျမလဲသူလုပ်သမျှရင်ခုန်လှိုက်မောစွာနဲ့….ခံယူနေမိတယ်….ခဏနေတော့ဂါဝန်လေးကိုလှန်လိုက်ပီး…..အောက်ကစတော်ကင် လေးပေါ်ကနေကျမအဖုတ်လေးကိုပွတ်တယ် “ချာတိတ်ရယ်….ချစ်တယ်ကွာ…”သူကဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရင်း…..ကျမ ဖင်သားတွေကိုနယ်လိုက်….အဖုတ်လေးကိုပွတ်လိုက်နဲ့ကျမမှာသူအယုအယတွေကို…….။ မိန်းမူးနေအောင်ညှို့ယူဖမ်းစားနေတာ ပေါ့….ခဏနေတော့ကျမကိုဆွဲထူလိုက်တယ်…ကျမနဲ့ကိုကြီးမတ်တပ်လေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာကိုကြီးက…ကျမမျက်လုံး တွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်း…. “ခလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်နော်”တဲ့ကျမကိုစိတ်ညှို့ပီးပြောလိုက်သလိုဘဲ….ကျမလဲကိုကြီးပြော သလို….သူ့ကိုကျောခိုင်းလှည့်လိုက်တယ်…….အဲအချိန်မှာကိုကြီးကကျမဆံပင်တွေကိုအသာဖယ်ပီး….နောက်ကနေကျမဂုတ်သား လေးတွေကိုနမ်းစုပ်နေတယ်….ကျမရင်တွေအရမ်းခုန်နေသလို….ဒူးတွေလဲညွတ်ချင်ချင်ဖြစ်နေပီလေ……..။
“ချာတိတ်လေး…..ဖင်လေးနောက်ကော့လိုက်ပါ့လားကွာနော်ခလေး”…..ကိုကြီးဟာကျမကိုစိတ်ညှို့ထားသူတစ်ယောက်ကိုအမိန့် ပေးသလို…..ခိုင်းစေနေတာ……ကျမလဲ.. သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း….ဖင်လေးကိုနောက်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်……..ကိုကြီးက….ကျမ ကော့ပေးလားတဲ့ဖင်လေးကိုဖွဖွလေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွတ်ရင်းဖင်သားလေးနှစ်ချမ်းကိုဖြဲလိုက်….ပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ…ကျမ စောက်ဖုတ်လေးထဲကအရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာတဲ့အထိပေါ့….ကျမဖင်လေးကိုကော့ပေးရင်း….သမင်လည်ပြန်လေး ကြည့် လိုက်ချိန်မှာ….ကိုကြီးက…ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုစီးပြီးစုပ်နမ်းလိုက်တယ်….ပီးတော့…..သူဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ပီး….သူလီး ကြီးကိုထုတ်လိုက်တာကျမလှမ်းမြင်လိုက်တယ်….ကျမစိတ်တွေတအားလှုပ်ရှားနေပီး…..သူရှေ့ဆက်မှာကိုလဲမတားဆီးမိတော့ ဘူး…….။ “ချာတိတ်လေး…” “ရှင်…ကိုကြီး….”ကျမအသံဟာတာဝေးအပြေးသမားတစ်ယောက်ပန်းဝင်လာသလို…အမောတကြီး ဖြစ်နေတယ်လေ….။ “ချာတိတ်ဖင်ကြားထဲကို…ကိုကြီးလီးထောင်ချင်တယ်ကွာ….နော်”….ကျမနားထဲပူသွားသလို….စိတ်တွေလဲ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်ကုန်တာပေါ့……. “အင်း….ကိုကြီးသဘောကွာ”….ကျမပြန်ဖြေပေမယ့်ကိုကြီးကလုံးဝကျမဖင်ကြားထဲ ကို…သူလီးကြီးမထည့်သေးပါဘူး…… “ချာတိတ်ဖင်လေးကိုထပ်ကော့ပေးပါ့လား….ကိုကြီးလီးနဲ့ထောက်လိုကောင်းအောင်လို့နော် ချာတိတ်”…ကိုကြီးကထပ်ခိုင်းစေလိုက်သလို….ကျမဂုတ်သားလေးတွေကိုလဲ…. သွားနဲ့မနာအောင်ကိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ…ကျ မလဲ….ဟင့်ကနဲ့ညီးညူသံနဲ့အတူ….ဖင်ကိုထပ်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်……။
အား….သူလီးကြီးကျမဖင်ကြားကိုထောက်လိုက်တယ်…….ဒါပေမယ့်ဂါဝန်ကော…..စတော်ကင်ပါကြားခံနေတော့….ကိုကြီးလီးအ နွေးဓါတ်ကသိပ်မခံစားရဘူး…ဒါပေမယ့်… ရင်ခုန်မှုကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ…စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ…ဖောင်းကားပီး… အရည်တွေတအားထွက်နေပီပေါ့…….. “ချာတိတ်ရယ်…ကောင်းလိုက်တာကွာ…..ဂါဝန်လေးလှန်လိုက်ပါ့လား….အဲဒါမကိုကြီးလီး ကချာတိတ်ဖင်ကြားကိုပိုထိမှာလေ”“ဟုတ်…အား…အင်းကိုကြီးရာ….”ကျမလဲညီးညူရင်းကိုကြီးခိုင်းသလို…ဂါဝန်လေးကိုလှန် ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ…အောက်ကစတော်ကင်အနီရဲလေးနဲ့နောက်ကိုကော့ နေတဲ့ကျမဖင်လေးကိုမြင်နေရတယ်…ကိုကြီးကကျ မဖင်ကြားထဲကိုသူ့လီးကြီးထည့်ရင်းစောင့်လိုက်တယ်….ဒုတ်ကနဲ့ထိသလို….ကျမပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်ရင်း…….. ပေါင်တစ်ဖက် ကိုစွဲမပြီး……ဒူးကွေးကာ…သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမဂွဆုံနေရာ…စောက်ဖုတ်တည့်တည့်ကို…ထောက်လိုက်တာကျမဒူးတွေညွတ်ကျသွားပါ တော့တယ်……။“ချာတိတ်လေး….လိုးရအောင်နော်…”ကျမနားထဲကိုဗုံးအလုံးပေါင်းများစွာပေါက်ခွဲလိုက်သလို…ကိုကြီးစကားလုံး တွေက…ဝင်ရောက်လာပါတယ်…..နားကတစ်ဆင့်….. ကျမဦးဏှောက်ကိုလဲခိုင်းစေလိုက်သလိုပါဘဲ…..ကျမခေါင်းအလိုလိုညိမ့်မိ ပါတော့တယ်…….။ “သွားချာတိတ်လေး….အခန်းထဲကို…ကုတင်ပေါ်ကနေစောင့်နေနော်…”တဲ့ကျမဟုတ်တစ်လုံးထဲကလွဲပီးဘာ မ…မပြောနိုင်တော့ပါဘူး….ချက်ခြင်းဘဲအခန်းထဲသွားဖို့ ကျမလုပ်လိုက်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်ကိုကြီးက ကျမလက်ကိုဆွဲထားလိုက် တော့….ကျမကြောင်ပီးသူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကိုကြီးက……………………….။
“ဘယ်ကိုလဲချာတိတ်…ဘယ်သွားမလိုလဲ…” ကျမလဲချက်ချင်းဘဲ…“အခန်းထဲကိုလေ…ကိုကြီး”…… “ဘာသွားလုပ်မလိုလဲအခန်း ထဲကို….”ကျမ….ကိုကြီးမေးတာကိုအစကနားမလည်ဘူး…. “ကိုကြီးဘဲအခန်းထဲကသွားစောင့်ဆိုကွာ….”စိတ်မရှည်စွာဘဲဖြေ လိုက်တယ်…….“အင်းလေ…ချာတိတ်ကလဲ…အခန်းထဲကိုဘာလုပ်ဖိုသွားမှာလဲပြောပါအုန်းကိုကြီးကို…နော်…ချာတိတ်နော်လို့” “ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့….သွားမှာမလား…ဟုတ်တယ်မလားဟင်ချာတိတ်”…..ကျမလဲကိုကြီးစားလုံးတွေ…အယုအယတွေအောက်မှာ နစ်မျောနေပါပီ…. ချက်ခြင်းဘဲ….“ဟုတ်…ဟုတ်…ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့အခန်းထဲသွားမလို့ပါ…”ကျမဒီစကားလုံးတွေကို…နှုတ်က လား….ဦးဏှောက်ကလား….ဘယ်ကထွက်လာတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတော့သလိုပါဘဲရှင်……။ကျမအခန်းထဲကိုရောက် တာနဲ့…..ဂါဝန်နဲ့စတော်ကင်လေးကိုချွတ်ပီး……..ဘရာတစ်ခုထဲဝတ်ကာကုတင်ပေါ်တက်ပီး….ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့အသင့်စောင့် နေ လိုက်ပါတယ်……ခဏကြာတော့….ခန်းစည်းလိုက်ကာလေးလှပ်ပီးကိုကြီးဝင်လာတယ်….ကျမမျက်လုံးဒေါင့်ကနေမြင်နေရတယ်… ကိုကြီးကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာပီးကျမအပေါ်ကနေကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းစုပ်ရင်း….လက်ကကျောအောက်ကိုလျှိုထည့် ကာ ဘရာဂျိတ်လေးတွေဖြုတ်လိုက်ပါတယ်….ကျမအလိုက်သင့်ကျောကော့ ပေးရင်းကနေ…ဘရာလေးကိုပင့်တင်ရင်းနို့တွေကိုငုံ စုပ်ခံလိုက်ရတာဟာ….ရင်တစ်ခုလုံးလစ်ဟာသွားသလို……စောက်ပတ်ထဲကလဲအရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ယိုစီးကျလာ ပါတော့ တယ်…..
“အား….ရှီး….အ….ကိုကြီးအင်းးးးးးးးးးးးးးးး” ကျမ မပီမသစကားလုံးဗလုံးဗထွေးတွေရေရွတ်ရင်း….ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ကော့တက်နေသလို….ကိုကြီးကလဲကျမနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုငုံလိုက်…..သှူ့လျှာကြီးနဲ့နို့သီး တွေကို ဝလုံးဝိုင်းသလိုလုပ် လိုက်….နည်းမျိုးစုံသုံးပီး…ကျမကိုပြုစားနေပါတော့တယ်ရှင်….. တဖြေးဖြေးကိုကြီး….အောက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားကာ…ကျမဗိုက် သားနဲ့ချက်တွေကိုနမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့….သူဘယ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာကျမသိနေပါတယ်……. ကျမဘဝမှာကိုကြီးနဲ့တွေ့မှ စတင်ခံစားဖူးတဲ့….စောက်ဖုတ်အယက်ခံတဲ့အရသာကို…ခံစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိက….ရင်ထဲမှာကော….အဖုတ်ထဲမှာပါ တလှပ်လှပ်နဲ့ကြိုတင်ခံစားနေရပါတယ်….. “ချာတိတ်…” “ရှင်….ကိုကြီး…”ကျမမောဟိုက်တိုးညှင်းစွာထူးလိုက်ပါတယ်… “ကို ကြီး…ချာတိတ်စောက်ဖုတ်လေးကိုယက်ချင်တယ်ကွာ….နော်”…ကျမအဲလိုပြောတဲ့ကိုကြီးစကားလုံးတွေအောက်ပါ…ကျဆုံးနေရ ပါပီ……………………………။ “အင်း….ကိုကြီးသဘော”လိုပြောလိုက်ပေမယ်…ကျမပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကိုသာသူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ နမ်းရင်း…ကျမစောက်ဖုတ်စီကိုရောက်လာလိမ့်နိုးမျှော်နေတဲ့ ကျမမျှော်လင့်ချက်ကတော့မပြည့်သေးပါဘူး….ကျမလဲဖင်ကိုကော့ ရင်း…ကိုကြီးပါးစပ်နဲ့ကျမစောက်ဖုတ်လေးတွေထိအောင်လိုက်ရွေ့ပေးပေမယ်….ကိုကြီးကဟိုဒီ သာပြောင်းနေတယ်…ကျမ စောက်ဖုတ်ကိုလုံးဝမယက်သေးပါဘူး…………..။
ကျမ…..ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်နေပါပီ…နောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တော့ဘဲ….. “ကိုကြီး….အားဖြူစောက်ပတ်ကိုယက်ပေးပါ တော့….”ကျမပေါက်ကွဲထွက်သွားပါပီ….နှုတ်ကနေအော်ဟစ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာ….ကျမကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရဲ့ လား လို့……ထင်မှတ်မှားလောက်အောင်ပါဘဲ…… “ယက်ချင်တာပေါ့ချာတိတ်ရယ်…..ချာတိတ်စောက်ပတ်လေးကိုဖြဲပေးနော်…ကိုကြီး ယက်ဖို့လေ..”…ကိုကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ကျမလဲချက်ခြင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုဖြဲပေးလိုက်တယ်……ကျ မစောက်ပတ်ဖွေးဖွေးလေးဟာအမွှေးအမြင်ကင်းစင်ပီး…..ကျမဖြဲလိုက်တဲ့အတွက်..အစေ့လေးဟာပြူးထွက်လာပါတော့တယ်… ကိုကြီးကအဲဒီအစေ့လေးကိုချိုချည်စုပ်သလို….တယုတယလေးငုံစုပ်လိုက်တဲ့အခါ….ကျမ…လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ် သွားသလို…..အရာအားလုံးဟာကိုကြီးရဲ့ စောက်စေ့စုပ်ပေးနေတဲ့အရသာအပေါ်မှာသာ….အပြည့်အဝခံစားနေမိပါတော့တယ်….. “အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ကျမလည်ပင်းကြောတွေထောင်ပီး….ခေါင်းမော့ကာအသက်ကိုမနဲ့ရှူသွင်းနေရပါတယ်…..အစေ့လေး ကိုစုပ်နေရာကနေ…ကျမစောက်ပတ်အဝ လေးကိုလျှာလေးနဲ့ထိုးစွမွှေနှောက်နေပါတော့တယ်….ကျမအသက်ငင်နေတဲ့လူတစ် ယောက်လို….အသံပေါင်းစုံလည်ပင်ထဲကအစ်ထွက်ရင်း….လူးလွန့်နေမီပါတော့တယ်.။
“ချာတိတ်….လိုးရအောင်နော်….”ကိုကြီးကပြောလဲပြော……ဘောင်းဘီကိုအောက်ဆွဲချွတ်ရင်း…ကျမပေါင်ကြားမှာနေရာယူ လိုက်ပါတယ်……..။ “အင်း….လိုး….လိုးပါတော့…ဖြူကိုလိုးပေးပါတော့…”ကျမအရမ်းဆာလောင်နေပီလေ…..ဘာအရှက်…ဘာ အကြောက်တရားမ…မရှိတော့ပါဘူး……………….။ ကိုကြီးလီးဒစ်ကြီးဟာကျမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို….ထိုးခွဲဝင် ရောက်လာသလို….ကျမပေါင်တွေဟာလဲ….သွေးသွားအလိုအရ…အလိုလိုထောင်ကားသွားပါတယ်။ “အား……အင်း…..အားကို ကြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ကျမစောက်ပတ်ထဲမှာအပြည့်အသိပ်….လေဟာနယ်မရှိ….အရသာပေါင်းများစွာပေးနေတဲ့လီးကြီးဟာ… တဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ချင်း…ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာလိုက်….ပြန်ထွက်သွားလိုက်…ကျမစောက်ပတ်လေးဟာလဲ….ဟာသွား လိုက်…ပြည့်အင့်သွားလိုက်နဲ့……ကျမအောက်ကနေကော့တက်လိုက် ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့….စည်းချက်ကိုက်နေတာ…ကိုယ် ဖာသာတောင်သတိမထားမိအောင်ပါဘဲ…. “ချာတိတ်လေး….” “ကိုကြီး….” “ကောင်းလားဟင်ချာတိတ်” “အရမ်းကောင်း တယ်..ကိုကြီးရာ” “ဘာကောင်းတာလဲဟင်ချာတိတ်” “ကိုကြီးလိုးတာလေ….ဟိုးဖြူစောက်ပတ်ထဲကအရမ်းကောင်းတယ်”ကဲအဲ ဒါကျမလားလို့တောင်မေးယူရမလိုဘဲ….ကျမနှုတ်ကထွက်တာတွေဟုတ်ရဲ့လားတောင်မေးယူရမလိုပါ။
“အင့်….အား….ရှီး…အား…အင့်အင့်အင့်”ကျမအသံပေါင်းစုံထွက်နေသလို…ကိုကြီးကလဲအပေါ်ကနေလက်ထောက်ရင်းမှန်မှန်စော င့်လိုးနေပါတော့တယ်….။ ကျမယောင်္ကျားဆိုဒီလိုအချက်တွေအများကြီးမလိုးနိုင်ပါဘူး…..၁၀ ချက်လောက်လိုးလိုက် အချက် ၂၀ လောက်လိုးလိုက်…နားလိုက်နဲ့စပ်တငန့်ငန့်ကြီး…ကိုကြီးကတော့… အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး….စလိုးကတည်းက…တစ်ချက်မ မနား ဘဲအချက်ပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဘူး……ကျမ…ပီးသွားလိုက်….ပြန်ကောင်းလာလိုက်နဲ့………….။ “ကိုကြီး…တော် ပါတော့…ဖြူဒူးတွေတုန်နေပီ”ကျမတားယူတော့မ…ကိုကြီးအလိုးရပ်ရင်းကျမနို့တွေကိုငုံစုပ်ပေးနေတယ်….။ ခဏနေတော့…ကို ကြီးကသူ့လီးကြီးကိုကျမထဲကနေထုတ်လိုက်တယ်………ပီးတော့ကုတင်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်….ကျမလဲဘာလိုပါလိမ့်ဆိုပီး ကြောင်ကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ “ချာတိတ်လေး….ကုတင်စောင်းမှာလိုးရအောင်နော်…”ကျမလဲခေါင်းညိမ့်ပြရင်း….ကုတင်စောင်းကိုလူ ရွှေ့ကာ….ကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုကုတင်အောက်တွဲလောင်းချထားလိုက်တယ်……ကျမတင်က…ကုတင်စောင်းမှာတင်နေတော့… စောက်ဖုတ်လေးကအထက်ကိုခုန်းထနေတာပေါ့…ကိုကြီးက…အောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေတဲ့ကျမခြေထောက် တွေကိုအသာ လက်နဲ့မရင်း…ကျမပေါင်ကြားကိုနေရာယူကာ…သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမစောက်ပတ်လေးကို…စလိုးပါတော့တယ်… “အား…ဖြေးဖြေးကို ကြီး…ထိတယ်..အရမ်းထိလို့”ကျမတောင်းပန်သံကို…မကြားတာလား….ဒါမဟုတ်ဂရုမစိုက်တာလားတော့မသိဘူး…ကိုကြီးကတစ်ချက်လေးမ မလျော့ဘဲ ဆက်တိုက်လိုးစောင့်နေပါတော့တယ်….
“အား….အား…အင်းအ…အ..အ…အ….” “အား…အအ….အ….ကိုကြီး…အ….အင်း….“ “ချာတိတ်ကိုကြီးပီးတော့မယ်….” “ဟုတ်….ပီးလိုက်အ…အ..အား….အား…အ..အ….အ…” “ပီးတာသိတယ်မလားဟင်ချာတိတ်“ “အင်း…သိတယ်…အားးး အားးးးးးးးးးအအအအအအ” “ဘာလဲပီးတာ…သိတယ်ဆိုပြောကွာချာတိတ်” “အား…ကိုကြီးလရေတွေ…ဖြူစောက်ပတ်ထဲ…ပန်း ထည့်တော့မှာလေ….အ…အာ…” “ဘယ်လိုလုပ်ပန်းထည့်မှာလဲဟင်ချာတိတ်လေးးးး” “အား…လိုးရင်း…လိုးအ…လိုးရင်းပန်းထည့် မှာလေးအားအားးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ပြောဆိုလိုးညှောင့်နေရင်းကနေ…ကိုကြီးလရေတွေကျမစောက်ပတ်ထဲကို…အရှိန်အဟုန်နဲ့ပန်းဝင် လာပါတော့တယ်….ကျမပြောမပြတတ်အောင်…ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ရှင်…..။ကျမနဲ့ကိုကြီး တို့ဟာအမြဲထိတွေနေရပေမယ့်……အမြဲတန်းတော့မလိုးဖြစ်ပါဘူး……….ကိုကြီးမအားတဲ့ခါတွေရှိသလို……ကျမအမျိုးသားအိမ် မှာရှိနေတဲ့ အခါတွေမှာလဲ…ကျမတို့ဟာခပ်တည်တည်ခပ်တန်းတန်းနေကြတာပါ……ကျမနဲ့ကိုကြီးမတွေဖြစ်တာအခုဆို ၁၀ ရက် ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါပီ…..ကျမကို…ကိုကြီးကဖုန်းထဲကနေအမြဲလိုလိုလှမ်းပီး…သတိရကြောင်း…တွေချင်ကြောင်းပြောနေပေ မယ်…..လက်တွေမှာအခက်အခဲတွေကိုယ်စီနဲ့မို့ဒီလိုဘဲ…မြင်သာမြင်မကျဉ်ရဆိုသလို နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေကြဆဲပါ……ဒီနေ့လဲကိုကြီး အလုပ်များနေလို့….စခန်းထဲမှာရှိနေပေမယ်….ကျမတို့အိမ်ဖက်ကိုကူးမလားနိုင်ပါဘူး….ဘာတွေအလုပ်များနေတာဆိုတာ တော့ကျမ မသိပေမယ်…..အလုပ်ရှုပ်နေမှန်းတော့ကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်….ကျမလဲကိုကြီးလာရင်….အလှပြချင်တာနဲ့… ရေမိုးချိုးပီးထုံးစံအတိုင်း….ခါးတိုလေး နဲ့ စပန့်ကောင်းဘီရှည်အပျော့လေးကိုဝတ်ထားပီးအသင့်စောင့်နေမိပါတယ်….ကျမ အမျိုးသား ကိုမျိုးဟာလဲ….ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်….အလှုပ်များနေတာအိမ်ကနေ… လှမ်းမြင်နေရပါတယ်…..
ကျမအိမ်ရှေ့စက်တီပေါ်ထိုင်ငေးနေတုန်းဖုန်းသံမည်လာတာနဲ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့…ကိုကြီးဖုန်းဖြစ်နေတယ်…စခန်းနဲ့အိမ်က လှမ်းမြင်နေရတာ….ပီးတော့…….. ၆ ပေလောက်ကွာတာကို….ဘာလိုဖုန်းဆက်တာလဲပေါ့ကျမလဲ…ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက် တယ်…. “ဟလို…ကိုကြီးပြောလေ..” “ချာတိတ်အရမ်းလှတယ်….အမောကိုပြေသွားတာဘဲသိလား…”…သူပြောမ ကျမထိုင်နေ တဲ့နေရာကို သူအခန်းထဲကနေလှမ်းမြင်နေရမှန်းသတိထားမိတယ်……….အုတ်ချပ်လေးတွေထောင်ပီး…လေဝင်ပေါက်သဘောမျိုး ဖောက်ထားတဲ့နေရာကနေမြင်နေရတာကိုး…ကျမလဲလှမ်းပီးလျှာထုတ်ပြလိုက်တယ်…….“အပိုတွေ…..လှပါဘူး”…ကျမခပ်ချွဲချွဲ လေးပြောလိုက်တာပေါ့…. “အရမ်းလွမ်းတယ်ကွာ…မတွေ့ရတာကြာပီ…”……ကိုကြီးကျမကိုအရမ်းတွေချင်နေသလို…ကျမလဲ တွေချင်တာပါဘဲ….ကျမလဲဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲလိုလိုတွေးနေမိတာပါ….. “ချာတိတ်လေး…အိမ်ရှေ့ခန်းထွက် လိုက်…” “ဘာလို…” “အော်…ချာတိတ်ကလဲခိုင်းစရာရှိလိုပေါ့…နော်” ကျမလဲကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်ရှေ့ခန်းကိုထွက်လိုက် တယ်…..အိမ်ရှေ့ခန်းဆိုတော့ကျမကိုတစ်ကိုယ်လုံးလှမ်းမြင်နိုင်တာပေါ့…ကျမလဲဖုန်းကိုင်ရင်းအိမ်ရှေ့ခန်း ထွက်လာလိုက် ယ်…… ကိုကြီးဘာခိုင်းမလိုလဲပေါ့….. “ချာတိတ်…ကိုကြီးစာအုပ်ဘီဒိုအောက်မှာ..မနေ့ကပင်တခုကျနေတာရှိသေးလားကြည့်ပေးပါအုန်း” ကျမလဲသူပြောသလို…ဘီဒိုအောက်ကိုကုန်းကြည့်လိုက်တာပေါ့….မှောင်နေလို့လား…..သူပြောတဲ့ပင်ကသေးလို့လား…မတွေဘူး ဖြစ်နေတယ်ကျမလဲအတတ်နိုင်ဆုံး ဘီဒိုအောက်ကိုခေါင်းဝင်ပီးကြည့်တာပေါ့….. “အားး…ချာတိတ်အဲလိုလေးနေ..အရမ်းမိုက် တယ်ကွာ…” ကျမသိလိုက်ပီ…ဘာပင်မဘီဒိုအောက်မှာမရှိဘူး……သက်သက်ကျမကိုသူဖက်ဖင်ကုန်းပြအောင်လုပ်တာဆိုတာ ကို…..ကိုကြီးကအဲလိုမထင်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ ကျမကိုဆွဲဆောင်နေတာလားလိုထင်မိတယ်….အခုလဲကြည့်ကျမဘီဒိုအောက်က ဘဲပြန်ထွက်ရမလား….ကိုကြီးကိုဘဲဆက်ပီးဖင်ကုန်းပြနေရမလားပေါ့………..
ကျမဘောင်းဘီအပျော့သားနဲ့ဖင်ကုန်းနေတာဆိုတော့….ကျမနောက်ကနေကြည့်နေတဲ့ကိုကြီးစိတ်တွေဘယ်လောက်ထန်နေမလဲဆို တာတွေမိရင်း…..ကျမလဲ စောက်ဖုတ်ထဲက…အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်လာပါပီ….. “ကိုကြီး….တော်ပီကွာ…ညောင်းနေပီ”လို့ကျ မလှမ်းပြောလိုက်တယ်…..စိတ်ထဲမှာလဲအဲလိုကုန်းပြနေရတာ…တစ်မျိုးကြီးလေ….မပြောပြတတ်အောင်ဘဲ……. “ခဏလေးပါ ကွာ…ချာတိတ်ကလဲ…အလွမ်းပြေလေးနော်….အရမ်းမိုက်တယ်..ချာတိတ်ဖင်ကြီးက….လှလိုက်တာကွာ” ကျမလဲကိုကြီးဖုန်းထဲက ပြောလေ…..စောက်ပတ်ထဲက…အရည်တွေထွက်လေ….ဖင်ကိုပိုထောင်ပေးမိတာပေါ့…….။ “ချာတိတ်လေး…..ကိုကြီးလာခဲ့မယ် နော်…အနီးကပ်ကြည့်ချင်တယ်ကွာ…”… “ဟလို…ဟလို…”ကိုကြီးကပြောပြောဆိုဆိုဖုန်းချသွားတော့…ကျမလဲကုန်းနေရာကနေထ ပီး…..အိမ်ရှေ့ခန်းထဲဝင်…….စောစောကထိုင်နေတဲ့ခုံလေးပေါ်ပြန်ထိုင် နေတာပေါ့….. ခဏနေတော့…ခြေလှမ်းကြဲကြီးတွေနဲ့ကို ကြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတာတွေလိုက်တယ်…..ကျမရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေရင်းသူ့ကိုကြည့်နေမိတယ်…………………..။ ကိုကြီးက အိမ်ပေါ်တက်လာရင်း….သူဘက်ချမ်းကအလုပ်စားပွဲမှာခပ်တည်တည်နဲ့ထိုင်ရင်းကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်…..ကျမလဲကိုကြီး ဘာပြောလာမလဲ…..။ ဘာတွေစေခိုင်းလာမလဲဆိုတာကိုငန့်လင့်ရင်း…….သူမျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်နေမိတာပေါ့…..။..ကိုကြီး ကသူ့နားလာဖို့ကျမကို…မျက်ရိတ်လေးနဲ့ပြတော့…… ကျမလဲအသာထပီး….သူစားပွဲနားသွားလိုက်တယ်……ကိုကြီးထိုင်နေရင်း ကနေကျမခါးလေးကိုဖက်ကာ……တင်သားလေးတွေကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်ခြေမွပေးနေတယ်….။
ကျမလဲဘေးဘီကိုကြည့်ရင်း…… “ကိုကြီး…..တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားအုန်းမယ်ကွာ” “ချာတိတ်ကလဲ…ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲ ကွာ..”ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်…ကိုကြီးအလုပ်စားပွဲနားက…အပြင်ကနေလှမ်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ….အိမ်ထဲဝင်လာမသာမြင်ရ တာ…။ ပြောပြောဆိုဆိုကိုကြီးက….ကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်သပ်ပေးလာတော့…..ကျမပေါင်လေးကား ပေးလိုက်မိတယ်…..။ကျမအရည်တွေဟာ…..။ ဘောင်းဘီလေးတောင်ဆိုနေပီလေ……ကိုကြီးကဖင်သားတွေကိုခြေမွ လိုက်…..စောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ်သပ်လိုက်လုပ်နေရင်းကနေ……..ကျမကိုထိုင်နေရာနေမော့ကြည့်ရင်း “ချာတိတ်လေး…မတွေ့ရ တာကြာပီကွာ…အရမ်းလိုးချင်တယ်…” “အား…အတူတူဘဲကိုကြီးရာ….လစ်မ…မလစ်တာ”ကျမလဲပြန်ပြောလိုက်မိတယ်…. “အခုလွတ်လပ်တယ်လေ…..ကိုမျိုးလဲမရှိဘူး….ညမပြန်လာမှာ…သားလေးကလဲကျောင်းဆင်းဖိုအဝေးကြီးလိုသေးတယ်…” “လိုးရအောင်နော်..ချာတိတ်” ကျမလဲအရမ်းခံချင်နေပီလေ….ဟန်ဆောင်ညင်းဆန်ဖို့တောင်အင်အားမရှိတော့ဘူး….ခေါင်းလေး ကိုသွက်သွက်ညိမ့်လိုက်တာပေါ့…..။ ကိုကြီးကထိုင်ရာကနေထပီး…….ကျမနှုတ်ခမ်းတွေက…လည်တိုင်တွေကိုနမ်းရင်းကနေ….နို တွေကိုအင်္ကျီပေါ်ကနေကိုင်တွယ်ဖြစ်ညစ်ပေးနေလိုက်တာ…လူတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလိုပါဘဲ….။
“ချာတိတ်…အခန်းထဲကခေါင်းအုန်းတလုံးသွားယူခဲနော်…” ကျမချက်ခြင်းအခန်းထဲဝင်ပီးခေါင်းအုန်းယူလိုက်တာပေါ့….သူနားပြန် ရောက်တော့ကိုကြီးက…သူအလုပ်စားဘေး..ချောင်လေးထဲမှာခေါင်းအုန်းကိုချထားလိုက်တယ်…….ကျမကိုလဲအဲဒီချောင်လေးထဲ ကိုဆွဲခေါ်ရင်း….. “ချာတိတ်ခေါင်းအုန်းပေါ်ဒူးထောက်ပီးကုန်းလိုက်…” ကျမသူပြောသလိုခေါင်းအုန်းပေါ်ဒူးလေးထောက်ပီးကုန်း လိုက်တယ်…..ကိုကြီးကနောက်ကနေကျမကိုစိုက်ကြည့်နေပီး…….သူပုဆိုးထဲကလီးကြီးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်နေ တာမြင်နေရတယ်….. “ချာတိတ်…..ဘောင်းဘီလေးကိုပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်လိုက်” ကျမကိုကြီးပြောသလိုဘောင်းဘီကို ပေါင်လည်လောက်ထိချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကျမဖင်သားဖွေးဖွေးလေးနဲ့….ဖင်ကြားထဲကစောက်ပတ်လေးကကိုကြီးကိုဖိတ် ခေါ်နေပီဆိုတာသိလိုက်မိတယ်…….ကိုကြီးကထိုင်ခုံကနေကျမနားလာပီးကျမဖင်သားတွေကိုပွတ်သပ်လိုက်….ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်စေ့လိုက်လုပ်ရင်း…..ဖင်ကြားထဲကနောက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ကျမစောက်ပတ်လေးကိုယက်တော့တာပါဘဲ…..ကျမဖင်ကြီး ကိုဟိုရမ်းဒီရမ်းလုပ်ရင်းကနေတအင်းအင်းညီးညူနေမိတာပေါ့….
“ချာတိတ်ခံချင်ပီလား” “ဟုတ်…ခံချင်ပီကိုကြီးရာ….လိုးပေးတော့နော်…” “ဒီနားမလိုးချင်ဘူးကွာ…ချာတိတ်တို့လင်မယားလိုးတဲ့ကု တင်ပေါ်မှာလိုးချင်တာ” “ကိုကြီးသဘောလေ….” “အဲဒါဆိုအခန်းထဲသွား….အလိုးခံဖို့အသင့်စောင့်နေနော်….အသင့်ဖြစ်ရင်ကိုကြီး ကိုခေါ်လိုက်” “အာကိုကြီးကလဲ….လှမ်းခေါ်ရင်..သူများတွေကြားကုန်းမှာပေါ့”ကျမပြောလိုက်တော့.. “ဖုန်းနဲ့ခေါ်လေ….သူများတွေ မကြားတော့ဘူးဟလား”အဲလိုထူးထူးဆန်းဆန်း….အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ကျမကို….စိတ်လှုပ်ရှားစေတာ…ကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လေ…။ ကျမလဲ….ကုန်းနေရာကအသာထပီး…..အိပ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်….အခန်းထဲရောက်တော့…အဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပီး…..အသင့်ဖြစ်တာနဲ့ဖုန်းယူပီး…… ကိုကြီးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်…..တစ်အိမ်ထဲ….အိမ်ရှေ့ခန်းနဲ့…အိပ်ခန်းဖုန်း ဆက်ရတာ…ရီတော့ရီချင်တာ….ပီးတော့စိတ်ထဲလဲတစ်မျိုးကြီး…..အလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်တာကို ကိုယ့်လိုးမဲ့သူကိုလှမ်းပြောရမှာဆို တာကလဲ…..စိတ်ကိုပိုထစေသလားဘဲ….. “ချာတိတ်လေး….အသင့်ဖြစ်ပီလား”ကိုကြီးကဖုန်းကိုင်ရင်းမေးသံတစ်ဆက်ထဲထွက် လာတယ်… “ဟုတ်ကိုကြီး…အသင့်ဖြစ်ပီကွာ….လာခဲ့တော့…” “ဘာအသင့်ဖြစ်တာလဲချာတိတ်လေးရာ…” “ကိုကြီးအလိုးခံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပီ….နော်ကိုကြီးလာခဲ့တော့” “ဘာလုပ်လာရမှာလဲ..ပြောလေ” “ဖြူကိုလာလိုးပါတော့ကိုကြီးရယ်….ဖြူလေကိုကြီး အလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေပီ“ကျမအဲလိုပြောလိုက်တာနဲ့တင်…ပီးချင်ချင်ဖြစ်သွားတာအံ့သြမိတယ်….လိုးတောင်မလိုးရသေးဘူး
“ချစ်တယ်ချာတိတ်ရာ…ပြန်ခေါ်ပါ့လားအဲလိုလေး…အရမ်းနားထောင်ကောင်းလိုနော်ချာတိတ်”ကိုကြီးအသံကတုန်ရီနေပီး… တကယ်ဖီးဖြစ်နေတာသိသာတယ်…ကျမလဲအရမ်း ထကြွနေပီဆိုတော့… “ကိုကြီး…ဖြူကိုလားလိုးပေးတော့နော်…ဖြူစောက် ပတ်လေးကိုကိုကြီးလီးနဲ့လာလိုးပေးပါတော့….ဖြူအရမ်းခံချင်နေပီး…”ကျမပြောရင်းကိုယ့်စောက်ပတ်လေးကိုယ်ပွတ်လိုက် မိတဲ့ အထိပါဘဲ….. ကိုကြီးဝင်လာပီးကုတင်ဘေးမှာရပ်ကာ ကျမကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့ပက်လက်အိပ်နေတာကိုကြည့်ပီး…..သူ့ အဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်တယ်….ပီးတော့ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာ ပီးကျမပေါင်ကြားမှာနေရာယူရင်းကျမပေါင်နှစ်ချောင်းကိုမ လိုက်တယ်….“ချာတိတ်…လိုးမယ်နော်” “အင်း…လိုး…လိုးပေးကွား” “ချာတိတ်ကိုယ့်လီးကြီးကို…ချာတိတ်စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ ပေးပါ့လား….”ကျမစိတ်တွေအမြင့်ဆုံးကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားပါပီ…ခေါင်းသွက်သွက်ညိမ့်ရင်း…..ကိုကြီးလီးကြီးကိုလှမ်း ကိုင် ကာ…ကျမစောက်ပတ်ဝလေးမှာတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်…..
“အား…အင်း….ဝင်တယ်…ကိုကြီး…ဝင်လာပီးဖြူစောက်ပတ်ထဲကို…ကိုကြီးလီးကြီးအားးးးးးးးးး”ကျမစကားလုံးတွေ…ညီးညူ သံတွေနဲ့အတူ……စောက်ပတ်ကိုလဲကော့ပေးလိုက် မိပါတယ်…. ကိုကြီးရဲထုံးစံအတိုင်းစလိုးပီဆိုကထဲက…..ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ တစ်ချက်ခြင်း…..နောက်မြန်မြန်…နောက်စောင့်လိုက်….နည်းမျိုးစုံနဲ့မရပ်မနားလိုးပေးနေတာပေါ့…………..။ ကျမလဲကာမအရာ သာရဲ့ အနိမ့်အမြင့်……အပူအအေး…စတဲ့ခံစားမှုတွေကို….ရင်ခုံလှိုက်မောစွာခံစားရင်း…..အောက်ကနေစည်းချက်ညီညီ….ညီ လိုက်..အော်လိုက်….. ကော့လိုက်…ကားလိုက်ခံနေမိပါတော့တယ်………။ ကျမ ၃ ခါလောက်ပီးလို့…ကိုကြီးလီးမှာလဲကျမစောက် ရေဖြူဖြူပြစ်ပြစ်တွေ…..ပေပွနေပါပီ….ကျမလဲမောဟိုက်တုန်ရီနေပီး….တစ်ကိုယ်လုံး….နုန်းချီလိုက်မောနေပီလေ… “ချာတိတ် လေး…..လရည်တွေလိုချင်ပီလား”ကိုကြီးက မှန်မှန်လိုးနေရင်းကနေလှမ်းမေးလာတော့…ကျမလဲချက်ချင်းဘဲ…. “လိုချင်ပီ…ကို ကြီး…ဖြူစောက်ပတ်ထဲကို..လရည်တွေပန်းပေးပါတော့…“ “ကိုကြီးဖြူစောက်ပတ်ကို…လိုးရင်းပန်းထည့်ပေးနော်….“အား….ကို ကြီး………အင်းးးးးး ကိုကြီးကအလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်သလို……ကျမပြောနေတုန်းမှာဘဲ….သူလရည်တွေကို…..ကျမစောက် ပတ်အတွင်းထဲ….ပန်းထည့်လိုက်သလို….လိုးချက်တွေကလဲ အင်နဲ့အားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုးလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်……….။ကျ မဟာကိုကြီးရဲ့တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ….မရိုးနိုင်သော…ဆန်းသစ်မှုတွေ…….ရင်ခုန်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့….ကာမစိတ်ကို သဘောကျမိနေပါပီ…။
ကိုကြီးဟာနည်းလမ်းတွေ….စိတ်ကိုဖမ်းစားမှုတွေဟာ…တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူရအောင်…မမြဲမထင်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကို ပေးနေတုန်းပါဘဲ…….။သာယာမိတာအမှား လားအမှန်လဲမဝေခွဲတတ်အောင်ပါဘဲ……။ ဒီနေ့ကိုမျိုးအိမ်မှာနားတဲ့ရက်ဆို တော့…..နေ့လည်အေးအေးဆေးဆေး…လင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်ရှေ့မှာအသုပ်စားရင်း….. TV ထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့…..။ နေ့ လည် ၁ နာရီလောက်မှာကိုကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်….ထုံးစံအတိုင်း….သူအလုပ်တွေနဲ့သူ…စားပွဲမှာအလုပ်များနေတာ ပေါ့………..။ ကိုမျိုးလဲဘေးကနေကိုကြီးအလုပ်တွေကို ကူလုပ်ပေးနေတာနဲ့…..ကျမလဲ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးဆက်ကြည့် နေလိုက်ပါတယ်………..။ ကျမဇာတ်ကားသာကြည့်နေရတယ်……စိတ်က ကိုကြီးစီမှာရောက်နေတာလေ…..ကျမကိုယ်ကျမ လဲ….စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…..ကျမအသက်အရွယ်….ကျမအနေ အထားက…….အခုမကြီးမဝက်သက်ပေါက်တယ်ပြောရ မလား…….ဒုတိယအရွယ်ရောက်မ….ပထမဝေဒနာကိုခံစားမိတယ်ပြောရမလား…….ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းမသိ တော့ပါဘူး ရှင်….။ ကိုကြီးနဲ့ကိုမျိုးကတော့…..အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အလုပ်များနေတာပေါ့…..ကိုမျိုးက…ကျမကိုကျောခိုင်းထားပီး….ကိုကြီးက မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားပါ…။
ကျမ….ဇာတ်ကားကြည့်လိုက်….ကိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့…..ဗျာများနေတုံး….ကိုကြီးထ လာတာတွေလိုက်တယ်…..ကျမလဲခပ်တည်တည်ဘဲဇာတ်ကားကိုအာရုံစိုက်နေ သလို……TV ကိုဘဲမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေ တာပေါ့…..ကိုကြီးက….ကျမရှေ့က စက်တီစားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့….ဆားငန်စေ့ဘူးလေးထဲက….ဆားငန်စေ့လေးတွေကို…… အသားများတဲ့အလုံးလေးတွေရွေးရင်း….ကျမမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေတာ…ကျမ…မျက်လုံးဒေါင့်ကနေမြင်နေရတယ်…..ခဏနေ တော့….ကိုကြီးလက်ထဲကစာရွက်ပိုင်းလေး တစ်ခု….ကျမရင်ခွင်ထဲပစ်ပေးပီး…..အလုပ်စားပွဲကိုပြန်သွားတယ်….ကျမ…ကိုမျိုးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့…..ကျမကိုကျောပေးရင်း….အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေတယ်….. ဘာမသိလိုက်ပုံမရဘူး…..ကျမလဲကိုကြီး ပစ်ချသွားတဲ့စာရွက်ပိုင်းလေးကိုအသာပေါင်ကြားထဲဖြည်ကြည့်လိုက်တော့……ချာတိတ်…လွမ်းတယ်….အောက်စလွှတ်ပြ……တဲ့။
ကျမ..မျက်လုံးပြူးသွားတယ်….ချက်ခြင်းကိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့…ကိုကြီးကအေးအေးဆေးဆေးဘဲ…..ဆားငန်စေ့စား ရင်းအလုပ်လုပ်ကာ….ကျမကိုလှမ်းကြည့်နေ တယ်…..ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…..ကျမစောက်ဖတ်လေးကို….အကြိမ်များစွာလိုး လိုက်…..ယက်လိုက်…..လုပ်နေတဲ့ကိုကြီးက……ကျမဟာလေးကိုအောက်စလွှတ်ပြခိုင်း နေတာ…ထူးဆန်းမနေဘူးလား….. ကျမ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးနေမိတယ်…….အောက်စလွှတ်ပဲပြရမလား….ဟင့်အင်းလိုခေါင်းရမ်းပြလိုက်ရမလား……အောက်စလွှတ် ပြတုန်းကိုမျိုးနောက်လှည့် ကြည့်လိုက်ရင်ကော….အို….ကျမအတွေးများစွာနဲ့…..ရင်တွေဆူပွက်နေတာပေါ့….အဲဒါကိုကြီးရဲ့ ထူးခြားချက်ပါဘဲ…..ဘယ်လိုအချိန်…ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျမကို…..အံ့သြ… ထိတ်လန့်….ရင်ခုန်စေမလဲဆိုတာမသိနိုင် အောင်…..ထူးဆန်းတဲ့ရင်ခုန်သံတွေပေးတတ်တဲ့သူပါ…..။ ကိုကြီးက…တစ်ချက်တစ်ချက်…ကျမကိုလှမ်းကြည့်ရင်း…..သူ့ မျက်လုံးတွေက…ကျမပေါင်ကြားကို…လှမ်းကြည့်လိုက်…ကျမမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်နဲ့………… စောင့်နေသလိုလုပ်နေ တော့….ကျမဟာ….နောက်ဆုံး…..ကိုမျိုးအခြေအနေအကဲခတ်ရင်း……ပေါင်လေးတစ်ချောင်းကိုထောင်ပီး…..ဂါဝန်လေးကို အောက်စလွှတ်ပေး… လိုက်တယ်……ကိုကြီးနေရာကနေလှမ်းကြည့်ရင်…ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာတဲ့အနေအထားပါ…..ကျမ အောက်စလွှတ်ပြလိုက်တော့….ကိုကြီးကနှာခေါင်းရှုံ့ရင်း……… ခေါင်းကိုမသိမသာရမ်းပြတယ်…ဟုတ်တယ်လေ….ကျမ အောက်ခံဘောင်းဘီကြီးနဲ့ကို….သိတာပေါ့…..ကျမလဲစချင်စိတ်ပေါ်လာပီး…..ကဲမှတ်ပလားဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ ပြုံးစစပြန်ကြည့် ပလိုက်တယ်……။ကိုကြီးကမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ဘောင်းဘီသွားချွတ်ဖို့လုပ်ပြတော့….ကျမလဲ…..ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်……။
ကိုကြီးကစားပွဲအောက် ကနေ…ကျမကို….လက်သီးဆုပ်ပြတယ်…..ကျမလဲလျှာထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့…..ကိုကြီးတို့အလုပ်စားပွဲ ကအမြင့်….ခါးစားပွဲ…ကျမဆက်တီကအနိမ်ဆိုတော့………….. စားပွဲအောက်ကနေကိုကြီးလုပ်ပြတာမြင်နေရတာပေါ့….ကိုမျိုး ကနေမမြင်ဘူးလေ…..။ကိုကြီးကအလုပ်ကိုပြန်ဆက်လုပ်ရင်း…..ကျမကိုသွားဖို့မေးငေါ့ပြလိုက်…….စားပွဲ အောက်က နေ…..လက်သီးထောင်ပြလိုက်လုပ်နေတာကို..ကြည့်ရင်းရီနေမိတယ်…အဲအချိန်မှာဘဲကိုကြီးက…..သူ့ပုဆိုးကိုပေါင်ရင်းထိလှန် တင်လိုက်ပီး……..စားပွဲ…. အောက်ကနေ….လီးကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့….ကျမထိုင်ရမလို….ထရတော့မလိုဖြစ်သွားတယ်…… ကိုမျိုးမမြင်နိုင်မှန်းသိပေမယ်….ကျမစိတ်ထဲမှာကိုမျိုးသိသွားရင် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ထိတ်လန့်နေမိတယ်…..ကိုကြီးက….သူ့လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ပွတ်ပြရင်း…အပေါ်ဘက်ကတော့အလုပ်ကိုဟန်မပျက်လုပ်နေတယ်………………။
နောက်တော့…ကျမလဲကိုမျိုးမသိနိုင်တာသေချာတော့….ကိုကြီးလီးကြီးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်….ဒီလီးကြီးနဲ့ငါ့ကိုလိုးတာပါ့လား ဆိုတဲ့အသိကလဲ….စိတ်ကိုထကြွလာ စေတယ်လေ…..။ပြောရရင်….ကျမအလိုးသာခံတာ….ကိုကြီးလီးကို သေသေချာချာ…..စေ့စေ့စပ်စပ်အခုလိုမကြည့်ဖူးဘူး…..အခုလိုမြင်ရတော့စိတ်ထဲ့ပိုထကြွလာသလို စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ….မို့ ဖောင်းပီး…အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာတယ်….။ ကိုကြီးက လီးကြီကို ဆပ်ခနဲဆပ်ခနဲ…..လှုပ်ပြလိုက်ချိန်မတော့….ကျမစောက်ပတ် လေးထဲက စစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့….ကျင်သွားပါတယ်……ကျမထိုင်ရာကနေထပြီးအခန်းထဲဝင်သွားမိတယ်…..ပီးတော့အောက်ခံဘောင်းဘီ လေးကိုချွတ်ပီး…..ဂါဝန်လေးကိုသေသပ်….. အောင်ပြန်လုပ်ပီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်…..အခန်းထဲကထွက်လာ ရင်း….ကိုကြီးမျက်နှာကိုလဲ….ရမက်ခိုးတွေပြည့်နေတဲ့ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်း……………. စောစောကထိုင်တဲ့နေရာ ထက်…ရှေ့ပိုကျပီး….ကိုကြီးနဲ့ပိုနီးတဲ့ခုံလေးကိုပြောင်းထိုင်လိုက်တယ်……..ကိုကြီးမျက်ဝန်းတွေဟာ….မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အရောင်တောက် နေသလို…..ရီဝေပီးကျမပေါင်ဂွကြားကိုစိုက်ကြည့်နေတာပေါ့……ကျမပေါင်လေးကိုထောင်ပီး….ဂါဝန်အောက်စ လေးကိုလှပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ……စောက်ပတ်လေးဟာ ပေါင်ဂွကြားမှာ…….ဟဟလေးပေါ်ထွက်လာတာပေါ့…..ကျမစောက် ပတ်လေးကိုလက်နဲ့ပွတ်ပြရင်း…..ကိုကြီးလီးကြီးကိုလဲ….စိုက်ကြည့်နေမိတယ်…….။ကိုကြီးလီးကြီး တဆပ်ဆပ်တောင်နေ သလို…..မျက်လုံးတွေကလဲ…..ကျမစောက်ပတ်လေးစီကနေမခွာတန်းကြည့်နေတာ…..ကျမရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုံရင်းတွေမြင်နေရ ပါတော့တယ်….။ကိုကြီးလီးကြီးကိုကြည့်ရင်း…..ကျမကိုယ့်စောက်ပတ်လေးကို…ပွတ်ရတာအရသာတစ်မျိုးဘဲ…..ရင်တွေလဲခုန် သလို…..ဖီးလဲအရမ်းတက်တာဘဲ……….။
ကိုကြီးလဲကျမစောက်ပတ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်….စားပွဲအောက်ကသူလီးကြီးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတယ်……ခဏနေတော့ကို ကြီးက….။ “ကိုမျိုး….ငါးကင်သွားဝယ်ကွာ….စားရအောင်….ခလေးလဲတခါထဲကြိုလာခဲ့” “ဟုတ်ဆရာ…သွားလိုက်မယ်”လိုခိုင်း သံကြားလိုက်တယ်….ကျမလဲထောင်ထားတဲ့ခြေတောက်ကိုအောက်ချပီး….ဇာတ်ကားကြည့်နေလိုက်တယ်….။ “ဖြူ…ကိုသားကြို ရင်းငါးကင်သွားဝယ်မလို…ဘာမှာအုန်းမလဲ”လိုမေးရင်းသူအပြင်သွားဖိုထလာတာပေါ့….ကျမလဲ….အခုမသူတို့ဖက်လှည့်ကြည့် ဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့……. “မမှာတော့ဘူး….ငါးကင်ကကြာမှာ…သားကိုကြိုတာနောက်ကျနေအုန်းမယ်”လိုပြောလိုက်တယ်….။ “မီပါ တယ်….ငါးကင်က ၁ နာရီလောက်ကြာတာ…အေးဆေးပါ…အာဆိုသွားပီနော်မိန်းမ..”“ဟုတ်ကို….ဖြေးဖြေမောင်းနော်….” “အေး ပါစိတ်ချ…”လိုပြောရင်းကိုမျိုးထွက်သွားတာ…အိမ်ပေါက်ဝထိလိုက်ပို့ရင်းကြည့်နေလိုက်တယ်…..ကိုမျိုးဆိုင်ကယ်နဲ့အပြင်ကို ထွက်သွားတာသေချာတော့မှ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပီး….စောစောကခုံလေးမှာထိုင်ဖို့အသွား…..ကိုကြီးက “ချာတိတ်လာ ခဲ့….စောက်ပတ်ယက်ချင်နေပီ…”လိုကိုကြီးလှမ်းပြောသံကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်….တုန်ကနဲ့ဖြစ်သွားပီး….ကိုကြီးဘက်လှည့်ကြည့် ရင်းသူအနားကို လျှောက်သွားမိတာပေါ့…..။ အနားရောက်တော့….ကိုကြီးကထိုင်နေရာကနေကျမကိုမော့ကြည့်ရင်း…..သူ့လျှာ ကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်….ပီးတော့ကျမကိုခါးကနေသိုင်းဖက်ထားရင်း……. ဖင်သားတွေပွတ်လိုက်….ဂါဝန်ပေါ်ကနေစောက်ပတ် လေးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတယ်……ကျမမျက်လုံးလေးမှိတ်….ခေါင်းလေးမော့…ပေါင်လေးကားရင်း……… နစ်မျောနေမိတာ ပေါ့……
“ချာတိတ်….ကာဝန်လှန်ပေးကွာနော်…”တဲ့… ကျမမတ်တပ်ရပ်ရင်းကနေ…..ဂါဝန်ကိုလှန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကို ကြီးကထိုင်ခုန်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းဒူးထောက်ထိုင်ရင်းကနေ….ကျမစောက်ပတ် လေးကိုပွတ်သပ်ရင်း…..ပေါင်တွေကိုနမ်း လိုက်…..ဆီးခုံလေးကိုနမ်းလိုက်လုပ်နေတာပေါ့….ကျမအရမ်းဟော့နေပီဆိုတော့…..ပေါင်တွေကိုကားပီးခြေဖျားထောက် ကာ…..ကိုကြီးခေါင်းကိုကိုင်ပြီး…စောက်ပတ်နဲ့သူမျက်နှာအပ်ပေးလိုက်တယ်…..ကိုကြီးကျမစောက်ပတ်လေးကိုဖြဲရင်း….အစေ့ လေးကိုယက်လိုက်….အကွဲကြောင်း လေးကိုအောက်ခြေကနေအထက်ထိယက်လိုက်…..အစေ့လေးစုပ်ပေးလိုက်နဲ့….နည်းမျိုးစုံ အောင်သုံးပီးယက်ပေးနေပါတော့တယ်…. “အား…အင်း…ကိုကြီး…အားရှီး….အင်း…” ပလပ်….ပလပ် “ရှီး…အား…အင်း…ကို ကြီးရာ…အား….” “အင်း…အ….အ..အင်း….မရ…အ…မရရှီးး….မရတော့ဘူး” “အားးးး…..မရတော့ဘူးကိုကြီး…အ…ဖြူမနေနိုင် တော့ဘူး…”ကျမတကယ်မရတော့ဘူး….ကိုကြီးကိုအောက်စလွှတ်ပြကထဲက….အရမ်းဖီးတက်နေပီလေ………. အခုလိုစောက် ပတ်အယက်ခံလိုက်ရတော့…..အမြင့်ဆုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပီပေါ့…. “ဘာမရတာလဲချာတိတ်….ပလပ်”ကိုကြီးက မေးလဲမေး… စောက်ပတ်ကိုလဲသူ့လျှာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ယက်တင်လိုက်တော့….ကျမလဲ….. “အား….အလိုးခံချင်ပီ…..ကိုကြီးလိုးပေးတော့… ဖြူစောက်ပတ်ကိုလိုးပေးပါတော့…အား”ကျမပြောလဲပြော…..သူခေါင်းကိုလဲတွန်းလွတ်ကာ…ကျမနောက်ကို ဆုတ်ပလိုက် တယ်….ဟုတ်တယ်ကျမ…မရတော့ဘူး…..အရမ်းခံချင်နေပီလေ…..။
ကိုကြီးကထိုင်ရာကနေထပီး…ကျမ မျက်နှာလေးကို…မေးက နေကိုင်မော့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုမျှင်းပီးစုပ်လိုက်တယ်…ပီးတော့မ “မရမ်းခံချင်နေပီလားချာတိတ်…” “အား….ခံချင်တယ်ကွာ…ကို ကြီးရာ…အရမ်းအလိုးခံချင်တယ်…” “အာဆို….အခန်းထဲကိုသွား….ကုတင်ပေါ်မှာဂါဝန်လေးလှန်ပီး…ဖင်ကုန်းနေဟုတ်ပလား” “ဟုတ်….ကုန်းပေးမယ်…ကိုကြီး”ကျမသွားဖို့အလုပ်မှာ….လက်ကိုဆွဲထားတော့….ကျမသိတယ်လေ…ကိုကြီးရဲ့အကျင့်ကို….. “ကို ကြီးလိုးတာခံဖို့….ဖြူအခန်းထဲကိုသွားမလိုနော်ကိုကြီး….ဖြူကိုလာလိုးပေးနော်…ဖြူဖင်ကုန်းပီးကိုကြီးလာလိုးတာစောင့်နေ မယ်”လိုးပြောလိုက်တာပေါ့…… အဲတော့မှကိုကြီးကဆွဲထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်ရင်း…..ကျမကိုရီဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေ တယ်…ကျမလဲခပ်သွက်သွက်လေးအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပီး…ကုတင်ပေါ်တက်….ဂါဝန်လေးလှန်ဖင်လေးကုန်းရင်း…..ကိုကြီးဝင် လာပီးလိုးမဲ့အချိန်ကို….ရင်ခုန်စွာစောင့်နေတာပေါ့….ခဏနေတော့…ကိုကြီးအခန်း ထဲဝင်လာတာသိလိုက်ပီး…..ကျမဖင်တွေကို နောက်ကနေ…ပွတ်သပ်ရင်းဖင်ပေါက်လေးကိုလဲ……လက်နဲ့ဝလုံးဝိုင်းသလိုလုပ်ပေးနေတယ်….ကျမဖင်ကြီး ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့…..ညီး ညူရင်း…..ငန့်လင့်စွာစောင့်စားနေတာပေါ့….။
ကိုကြီးကျမဖင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပွတ်သပ်ပြီး…..ဖင်ကြားထဲကနေ…နောက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ကျမစောက်ပတ်ဝလေးကို….သူ့လီးဒစ်ကြီးတော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လီးကြီးရဲ့အနွေးဓါတ်ဟာ…..စောက်ပတ်ဝကနေတစ်ကိုယ်လုံးကို…လွှမ်းခြုံသွားသလိုခံစားလိုက်ရ တယ်……. ဗြစ်….ဗြစ်…. “အ….အင်းးးးးးး….အား….ဝင်တယ်…ကိုကြီးရာ…အင်း”ကျမဝင်လာတဲ့ကိုကြီးလီးရဲအရသာကို….ခံစား ရင်းပါးစပ်ကလဲ…အော်ဟစ်နေမိတယ်………….။ ကိုကြီးက…ကျမဖင်သားကြီးတွေကိုဖြဲရင်း…လီးကြီးကို….အသွင်းအထုတ်မှန် မှန်လုပ်ရင်း…..စလိုးနေပါပီ….ကျမလဲ…..သူလိုးချက်တွေကပေးတဲ့…….. အရသာကိုခံစားရင်း…..အသံမျိုးစုံထွက်ကာ….ညီညူ နေတာပေါ့…. “အား…အင်း…အား…” “……ရွှတ်…..ပြွတ်……ဖွတ်……ဖတ်…..” “…….ဖွတ်….ပြွတ်……ပလွတ်…..ဖွတ်….”ကို ကြီးလီးကြီးကို……တဖြည်းဖြည်းချင်း တထစ်ချင်းထည့်လာလိုက်တာနောက်ဆုံး….ကျမစောက်ပတ်လေးထဲကို အဆုံးကိုရောက် လာပါတော့တယ်။…ကိုကြီးလီးကကြီးမားတုတ်ခိုင်ရှည်လျှားတော့…အရမ်းအရသာရှိပြီး…ခံရတာအပြည့်အသိပ်နဲ့အရမ်းကောင်း တယ်… “ အို….ကောင်းလိုက်တာ…..ဆောင့်ပါ….တအားဆောင့်ပေးစမ်းပါ……..ဆောင့် ဆောင့်…အင်း…….အီး………”လိုကျမညီး ညူရင်း…တောင်းခံနေမီတာပေါ့ “ ဖွတ်…ဖတ်..ဖတ်…ဖုတ်…ဖွတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖွတ်…အင့် ဟင့် ဟင့်….” “ အားပါးပါး…ရှီး…” “ကောင်းလားဖြူလေး…ချာတိတ်…အား..အင့်အင့်”ကိုကြီးကအားရပါးရင်စောင့်လိုးရင်း….ကျမကိုလှမ်းမေးလာတယ် “အား… ကောင်းတယ်….ထိတယ်ကိုကြီး…လိုးကွား….လိုးပါဖြူကို….အား”ကျမကိုလိုးနေတာမှန်းသိပေမယ်….ထပ်ထပ်တောင်းခံမိလောက် အောင်ကောင်း နေတော့…ကျမနှုတ်ကနေ….တတွတ်တွတ်ရေရွတ်ရင်း…ပြောနေမိတာပေါ့….
“ ဘွပ်….ဘွပ်….ပလွတ်….” “ ဘု…ဗြစ်….” “ အား….ကျွတ်ကျွတ်..ကျွတ်..” “ ဘု…ဗျစ်…ဗျစ်….”အား…ကျမအရမ်းကောင်းနေ ပီ…..ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာတောင်ပြောမပြတတ်အောင်ပါဘူး….. “ တစောင်းကွေးပြီး လိုးကြရအောင်…နော်ချာတိတ်”ကို ကြီးကကျမကို…..ဖင်ကုန်းလိုးနေရင်းကနေပြောလာတော့…..ကျမလဲ…အင်းလိုတုန့်ပြန်ရင်း……. ကိုကြီးလီးအချွတ်ကိုစောင့်နေ လိုက်တယ်….ကိုကြီးကဖင်သားတွေကိုပွတ်နေရင်းကနေဖြေးဖြေးချင်း…လီးကြီးကိုစောက်ပတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်တယ်….။ ကျ မတစောင်းလေးကုတင်ပေါ်အိပ်လိုက်တာပေါ့……။ “ဂါဝန်ချွတ်လိုက်တော့လေချာတိတ်…အကုန်ချွတ်လိုးချင်တာ…..”ကိုကြီးက တောင်းဆိုလာတော့…ကျမလဲဂါဝန်ကိုချွတ်…ဘရာကိုချိတ်ဖြုတ်ချွတ်ပီး…. ကိုယ်တုံးလုံးလေး…တစောင်းအိပ်လိုက်တယ်……ကို ကြီးက…ကျမနောက်ကနေ…..ကပ်ပီး…ခပ်ကွေးကွေးလေးအိပ်လာတယ်…စတီးဇွန်း(၂)ချောင်း ထပ်ထားသလိုပေါ့………ပီး တော့…ကျမဖင်သားအပေါ်ချမ်းကိုလက်နဲ့ဆွဲဖြဲရင်း….သူလီးကြီးကိုကျမစောက်ပတ်ထဲသွင်းလိုက်တယ်……………….။ ကျမဖင်ကို နောက်ကော့ပေးရင်း….ဝင်လာတဲ့လီး…အဝင်ဖြောင့်အောင်အလိုက်သင့်လေးနေပေးလိုက်တာပေါ့………………။လီးကြီးဝင်လာ လိုက်တာ ကျမဖင်ကြားထဲကိုကြီးဆီခုန်ထိသွားမရပ်သွားတယ်…..။ကျမနောက်ကနေ…..ကိုကြီးနို့တွေကိုဆွဲရင်း….လိုးစောင့်ပါ တော့တယ်….စောင့်ချက်ကလဲ ပြင်းထန်သလို…..ကျမလဲဖင်ကိုနောက်ပြန်ကော့ရင်း…အလိုးခံနေမီတယ်…..ကိုကြီးလီးကြီးရဲထိ ရောက်မှုက….တစောင်းလိုးတဲ့အခါပိုသိသာတယ်… ကျမဖင်သားတွေနဲ့ကော…ပေါင်တွေပါညှပ်ထားတော့……စောက်ပတ်ထဲကို လီးဝင်ထွက်တိုင်း…ပွတ်တိုက်မှုအားကပိုသိသာတယ်……။
“ ဗျစ်….ဘု ဘု…ဘွပ်..” “ အား…ကျွတ်ကျွတ်….ဟင့်…” “ချာတိတ်…ပီးမယ်….အား…နော်…အ….အ..” “အင်း…ပီးလိုက်တော့… အား….ကိုကြီးလရေတွေ…လိုးပီးဖြူစောက်ပတ်ထဲပန်းထည့်ပေးပါ…အား…”ကျမအော်ဟစ်နေတုန်းမှာပဲ……………….။ “အင်း..အား…ရော့ချာတိတ်…ကိုကြီးလရေတွေယူ…အင့်…အား…အင့်” “အား…အ…အား…ကိုကြီးအားးးး” ကိုကြီးလရေတွေ ဟာ…အရှိန်အဟုန်နဲ့ကျမစောက်ပတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်တာ…နွေးကနဲ့ဖြစ်သွားရင်း…..ကျမလဲဟိုးအမြင့်ကြီးကပြုကျလာသလို… ရင်ထဲအေးကနဲ့ဖြစ်ကာ….အဆုံးအစွန်ဆုံးပီးမြောက်သွားပါတော့တယ်….ရှင်….။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဒုတိယအရှယျ၏ ပထမဝဒေနာ